Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: November 2009
ငြိမ်ချမ်းရေးအစစ်အမှန်ဆိုတာအောက်ကဗွီဒီယိုမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတို.၏စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိမှဖြစ်မယ်လေ၊ The Real Peace Cannot Be Achieved by Force. It Can only Be Achieved by Understanding ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားပဲ၊လက်ရှိဗမာစစ်အစိုးရပြောနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို.၊အမျိုးသားပြန်
လည်သင့်မြတ်ရေးတို.၊ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးတို.ဟာ အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့စကားလုံးတွေပဲ၊ ဒီအပုပ်ထဲကဒီပဲတွေဘဲ၊အနိမ်.ဆုံးအဆင့်ပေါ့ကွာ၊တိရိစ္ထာန်သတ္တဝါလောက်စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိရင်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်တွေ. နိုင်တယ်လို.ထင်ပါရဲ.။
My New Foster Family @ Yahoo! Video
၀ နှင့် နအဖ ဆက်ဆံရေးနောက်ကွယ်၌ ပြိုင်တူ စစ်ရေးထပ်ပြင်ဆင်
(ဝတပ်မတော်နှင့်စစ်အစိုးရတိုက်ပွဲဖြစ်လျှင် မဟာမိတ်တပ်တွေအနေနဲ.ဝတပ်ကိုအကူအညီပေးကြပါ၊ဖက်စစ်အစိုးရကိုဝိုင်း တိုက်ကြပါ၊ဝတပ်ဟာနိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတဲ့တပ်ဖြစ်လာလို.အားပေးရမည်၊)
အင်္ဂါနေ့၊ 24 နိုဝင်ဘာလ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ကိုးကန့်အရေးအခင်းပြီးသကာလ ၀ နှင့် နအဖ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမရှိရာမှ အောက်တိုဘာလမှစ၍ ပြန်လည်ဆက်ဆံမှု ပြုလာခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီမှုမရကြဘဲနှစ်ဘက် စစ်အင်အားဖြည့်တင်းမှု ပြင်ဆင်မှုများလုပ်လာသည်ဟုမျက်မြင် များ က ဆို၏။
“၁၉ ရက်နေ့က စစ်ကားကြီးတွေ ဘူဒိုဇာ/ဘက်ရိုး နဲ့ မြေထိုးစက်တွေတင်ပြီး တာချီလိတ်ကနေ မြို့အနောက်ဘက် တောင်ပိုင်း ၀ ထိန်းချုပ် နယ်မြေဘက် တက်သွားတယ်” - ဟု တာချီလိတ် လန်မအိုးဂိတ်စောင့် များနှင့်နီးစပ်သည့် ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောပါသည်။
တောင်ပိုင်း ၀ ထိန်းချုပ်ဒေသဘက်၌ နအဖ တပ် ပြင်ဆင်မှုပြK လုပ်နေသကဲ့သို့ ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့ကလည်း တောင်ကြီးမှ ကွန်ဟိန်း - ကာလိဘက်ဖြတ်သန်းသွားသည့် စစ်လက်နက်ကိရိယာပစ္စည်းတင် နအဖ စစ်ကား ၁၀ စီး ထက်မနည်း သံလွင် အရှေ့ဘက်ခြမ်းသို့ကူးခဲ့ကြောင်း ကွန်ဟိန်း ဒေသခံမျက်မြင်တဦးက ဤကဲ့သို့ပြော၏။
“စစ်ကား ၁၅ စီးလောက် ရှိတယ်ဗျာ့၊ ဘာ အမိုးအကာမှ မရှိဘူး၊ အလေးအပင်တွေလို့ ယူဆရတဲ့ သေတ္တာကြီးတွေ အဆင့် ဆင့်တင်ထားတာတွေ့ရတယ်၊ ဗမာစစ်သားတွေက ‘အားလုံး လက်နက်ခဲယမ်းတွေဘဲ’ လို့တောင် ကြွားလုံးထုတ်လိုက် သေးတယ်”
ဗမာ့တပ်မတော်က စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းသကဲ့သို့ ၀ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် UWSA ကလည်းပန်ဆန်းဌာနချုပ် ၏ မြောက်ဘက်၊ အနောက်ဘက် နှင့် တောင်ဘက် ၁၅-၂၀ မိုင်အကွာ ၃ ဘက် ၃ တန်တွင် ကတုတ်ကျဉ်းများ ခံတပ် စခန်းများ ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ လက်နက်ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းခြင်းရှိနေကြောင်း၊စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရှိနေကြောင်း တန့်ယန်းဒေသခံ တဦးက လည်းပြောပါသည်။
“ခွဲမှူး ရင်းမှူးအဆင့် ၀ တပ်အရာရှိအချို့ဆိုရင် ဗမာတပ်နဲ့တိုက်ဖို့အမြဲတမ်းအသင့်ဘဲ၊ ပစ်ချင်ခတ်ချင်တာလက်တောင် ယား နေပြီ” - ဟု တောက်တခေါက်ခေါက်ကြုံးဝါးနေကြကြောင်းလည်းသိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် တန့်ယန်းမြို့တွေ့ဆုံပွဲ၌ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်က - အသက် ၅၀ ကျော် ၀ အရာရှိများ ရာထူးမှ အနားယူရမည် ဟူသည့်အချက်အပေါ် အသက် ၆၀ အထိ အလျှော့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် နိုဝင်ဘာ ၂၂ နောက်ဆုံးထား၍ လူသူလက် နက်စာရင်း ပေးပို့ရမည့် အချက်ကိုမူ UWSA ဘက်မှ တစုံတရာအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိကြောင်းအပစ်ရပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မှ အရာရှိတစ်ဦးကပြောပြ၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးထား၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF၊ ဒေသကာကွယ် ရေးတပ် HGF အဖြစ် အပြီး ပြောင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀ တပ်ဖွဲ့အပါအ၀င် အပစ်ရပ်အဖွဲ့အား ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်က ရာဇဒဏ်ပေးထားသည်။
စစ်အစိုးရမည်မျှပင် ဖိအားပေးစေကာမူ ၀ နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့က အဖွဲ့အစည်းနာမည် တခုတည်းသာ ပြောင်းရန်အားသန် ပြီး ‘တပ်ရင်းတခု ဗမာ့တပ်မတော်အရာရှိ ၃၀ ပါဝင်ရမည်၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများချထားရမည်’ ဆိုသည့် အချက်များကိုမူ ၀ နှင့် မိုင်းတပ်တို့မှ လုံးဝလက်မခံပေ။
၂၀၀၈ မူကြမ်းမပြင်မချင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည်မဟုတ်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြော
Tue 24 Nov 2009, မင်းအာသံ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကို မပြင်မချင်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်၌ ဥက္ကဋ္ဌကြီး နိုင်ထောမွန်က နယ်စပ်ဒေသရှိ သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံများအား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး နိုင်ထောမွန်၏ ပြောကြားသည်မှာ “ပါတီက ဗိုလ်ချူပ်ခင်ညွှန့်လက်ထက်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ယူထားတယ်။ အဲဒီတုန်းက သဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒီလို နယ်ခြားစောင့်ရယ်၊ ပြည်သူ့စစ်ရယ်၊ လက်နက်ချခိုင်းတာရယ် သဘောတူထားတာမျိုး မရှိဘူး။ နောက်ပြီး ပြည်သူတွေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့အစိုးရသစ်တစ်ရပ် မပေါ်မချင်း ဒီသဘောတူထားတဲ့ အရာမှန်သမျှကို ပြောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲချိန်မှာ စစ်အစိုးရက သဘောတူထားတယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့တယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး နိုင်ထောမွန် နှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်တို့ ဦးဆောင်သော စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ (၁) ၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များးနှင့် ပါတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုလည်း ရှင်းပြ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့လက်နက် မွန်လူမျိုးထဲမှာ ရှိရမယ်။ ဒါဟာ ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပဲ။ စစ်အစိုးရက ၂၀၀၈ မူကြမ်းကိုပဲ ကိုင်ထားတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်တာပေါ့။ စစ်အစိုးရက ဒီမူကြမ်းကို မပြင်မချင်း ကျနော်တို့က၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့များ စစ်အစိုးရက ဘာမှ စဉ်းစားမပေးတော့ပဲ သူတို့သဘောအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟာ ပျက်လည်း ပျက်သွားနိုင်တယ်” ဟု ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ရှင်းပြသွားခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သံဃာတော်များက သဘောကျပြီး မွန်အမျိုးသားတို့၏ လွတ်မြောက်ရေးကိုလည်း တတ်နိုင်သရွေ့ ၄င်းတို့၏ ပါတီနှင့်တပြေးညီ ဝိုင်ဝန်းသွားမည်ဟု ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ရှင်းပြပွဲတွင် မိန့်ကြားခဲ့သည်။
“မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အတူတူပါပဲ၊ အားလည်း ရပါတယ်။ နောက်ပြီး နအဖ တောင်းဆိုထားတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိုလည်း ပါတီက ငြင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ သံဃာတော်တွေဘက်က ဘာမှ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး” ဟု အထက်ပါ အထက်ပါသံဃာတော်က မိန့်ကြားသည်။
အထက်ပါ သံဃာတော်က “သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မွန်လူမျိုးတွေဟာ မင်းမျိုးမင်းနွယ်နဲ့ ရှင်သန်လာခဲ့တယ် ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရဘူး၊ နအဖက အခုလိုမျိုး သူ့တို့ရဲ့လက်အောက်မှာ နေဖို့ အတင်းလုပ်ခိုင်းတာကတော့ ဘယ်နည်းမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မဖြစ်အောင်လည်း ဦးဇင်းတို့ဘက်က ကြိုးစားသွားမှာပဲ”ဟု မိန့်ကြားသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၉ နောက်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးနှင့် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နှင့် စစ်အစိုးရအကြား သဘောကွဲလွဲလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မွန်ရိုးရာ မိချောင်းတူရိယာဟာ မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ အထွတ် အမြတ်ထားတဲ့ တူရိယာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ တရပ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေးအစဉ်အဆက်ဆက်က အမြတ် တနိုးတီးခတ်လာ ခဲ့တဲ့ ရိုးရာမိချောင်း တူရိယာဟာ အခုချိန်မှာ ကျွမ်း ကျွမ်းကျင်ကျင် တီးခတ်တတ်တဲ့ သူနည်းလာပါပြီးလို့ ဆိုပါတယ်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အမျှ အဟောင်းနေရာမှာ အသစ်သစ်တို့အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာဟာ ဓမ္မတာတခုလို့ ဆိုပေမဲ့ ခေတ်ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မိမိအမျိုးသားရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုမတိမ်ကောမပပျောက်သွားအောင် ထိန်းသိမ်း သွားဘို့ဟာ လူမျိုးတိုင်း ရဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်တခုပါ။ တကယ်လို့လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အသွင်လက္ခဏာ ပျောက်ကွယ်သွားယင် သည်လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွား တာနဲ့မခြားဘူးလို့ သမိုင်းသုတေသီတို့က ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလိုရှည်လျားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ရှိလာခဲ့တဲ့ မိချောင်းတူရိယာရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင် တွေကို မွန်ဂီတ သမိုင်းလေ့လာသူ နိုင်အောက်ပိုင်က အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓြွမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန် ရာမညတိုင်း ဒဂုံမြို့မှာ ဥက္ကလာပမင်း ထီးနန်းစိုးစံစဉ်ကာလမှာ ပေါ့။ အဲဒီအချိန် သူ့ရဲ့သားတော် မင်းနန္ဒာဟာ သံလျှင်ဘက်ကမ်းက ချစ်သူရှင်မွေ့နွန်းဆီသွားရာမှာ ငမိုးရိပ် မိချောင်းကိုဘဲစီးသွားလေ့ ရှိတယ်။ တနေ့တော့ စီးတော် မိချောင်းငမိုးရိပ်နဲ့ ရန်သူမလက်တိုတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် ခဲ့ရာမှာ မင်းသားမင်းနန္ဒာ အန္တရာယ်ကျရောက်မှာစိုးလို့ ငမိုးရိပ်မိချောင်းက အာခံ တွင်းထဲမှာငုံထားပြီး ဒဂုံဘက် ကမ်းကိုကူးလာခဲ့တယ်။ ဒီဒဂုံ ဘက်ကမ်းလဲရောက်ရော မိချောင်းရဲ့ခံတွင်းမှာရှိတဲ့မင်းသားခင်မျာ အသက် ရှုမွန်းကြပ်ပြီးအသက်ပါမလာတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ဥက္ကလာပမင်းကြီးဟာ သားတော်စိတ်နဲ့ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်နေ တယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ နန်းတော်ထဲ မှာမိချောင်းရုပ်ကြိုးတပ်တူရိယာတီထွင်စေပြီး သားတော်ကိုသတိရ လွမ်း ဆွတ်တဲ့အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့ မိချောင်း တူရိယာပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော့်ဆရာ မိချောင်းတူရိယာပညာရှင် နိုင်ထဝိုင် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။”
ကြိုးတပ်တူရိယာထဲမှာဆိုယင် ကြိုးသုံးချောင်းသာရှိတဲ့ မွန်ရိုးရာမိချောင်း တူရိယာဟာတကယ့်ကိုထူးခြား ပါတယ်။ စူးရှတဲ့အသံလွင်လွင် လေးနဲ့ နဝင်ပီယံဖြစ်စေပြီး နားသောတအာရုံကိုလည်း ထူးထူး ခြားခြားမြူးကြွ စေပါတယ်။ ရှေးဟောင်းမိချောင်းတူရိယာဟာ အခြားကြိုး တပ်တူရိယာနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို နိုင်အောက်ပိုင် ပြောပြပါသေးတယ်။
“မိချောင်းတူရိယာနဲ့အခြားတူရိယာ ကွာဟချက်ဆိုတာက မိချောင်းဆိုတာကသူက(ှူငအန)လုပ်လို့ရ တယ်။ ဥပမာမွန်မှာဆိုလို့ရှိရင် လခြမ်းသူကအသံသေ။ ပတ္တလားအသံသေ။ မိချောင်းဆိုတော့ (ှူငအန )လုပ်လို့ ရ တယ်။ အသံတွေက အရွေ့အပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်။ ”
ပဒေသရာဇ်စံနစ်ရဲ့ဆိုးမွေကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ မွန်လူမျိုး တွေအတွက် အရင်ကထီးသုံးနန်းသုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မွန်ရိုးရာမိချောင်းတူရိယာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူမဲ့ပြီး လက်တဆုတ်စာ ပညာ ရှင်တွေကဘဲ ရိုးရာအမွေအနှစ်မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းနေကြပါ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမိချောင်းတူရိယာ ပညာရှင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး နိုင်အောက်ပိုင်က အခုလိုပြောပါတယ်။
“အခုဆိုယင်ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်။ မိချောင်းတူရိယာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တီးတတ်တဲ့သူဆိုလို့ ဆရာ နိုင်ထဝိုင်ရယ် ဆရာနိုင်ချင်ရယ် ဆရာနိုင်ရွှေပြည်ရယ် ဆရာနိုင်ထောပိုင်ရယ် ဆရာနိုင်ဟံသာရယ် ဒါဘဲ ကျန်တော့ တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက ပညာရှင်အဆင့်ရောက်ဘို့တော်တော်ကိုကြိုးစားရအုံးမယ်။”
မိချောင်းတီးခတ်တဲ့လက်ကွက်တွေဟာ အခြားတူရိယာတွေနဲ့မတူပါဘူး။ နည်းပရိယာယ်အပိုင်းတွေများပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိမှသာ အကွက်သံစဉ်တွေကိုဖေါ်နိုင်မယ်လို့နိုင်အောက်ပိုင်ကဆိုပါတယ်။
မိချောင်းတီးကွက်ဆိုတာက ပထမဦးဆုံးစတီးတာနဲ့ မွန်တွေက ဇယ်နဲ့စတီးတယ်။ ဇယ်ဆိုတာက စီစကေးပေါ့။ ဗမာသံနဲ့ဆိုရင်သံမှန်ပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ တန်းပွန်း(တင်ပန်) ဆိုတာက ဗမာမှာ(၅)ပေါက်သံနဲ့သွားကိုက် ညီတယ်။ ဘာကြောင့်ဗမာသံငါးပေါက်နဲ့ကိုက်ညီသလဲဆိုယင် ဗမာကအောက်ဘက်ကနေစရေတွက်လာတယ်။ မွန်မှာကျတော့ အပေါ်ဘက်ကရေတွက်တယ်။ အဲဒါတော့ကွာတယ်။ မွန်မှာကျတော့ တစ် နှစ် သုံး လေး ငါး ဘယ်ဘက်ကရေတယ်။ မြန်မာဂီတမှာကျတော့ ညာဘက်အခြမ်းကရေတယ်။ ဗမာက ရေတွက်တော့ ငါးပေါက် နဲ့သွားကိုက်ပြီး မွန်ကျတော့ လေးပေါက်နဲ့ကိုက်တော့ တန်းပွန်(တင်ပန်)လို့ခေါ်တယ်။
ရှေးဟောင်းကြိုးတပ်တူရိယာထဲမှာဆိုယင် ဆရာခင်မောင်လေးရဲ့လေ့လာချက်အရ (၇)မျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မွန်ရိုးရာမိချောင်းတူရိယာက စောင်းအမျိုးအစားထဲမှာ ပါတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။
(၆) ကြိုးတစ်ချောင်းတပ် ဗူးဗျပ်စောင်း
ထန်မင်းဆက်လက်ထက် တရုတ်ပြည်ရောက်မိချောင်းစောင်းဟာ ယခုမွန်တို့အသုံးအပြုနေတဲ့ မိကျောင်း စောင်းမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာကြီးဒဂုန်နတ်ရှင်ကဆိုထားပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရောက် မိကျောင်းစောင်း(၂)ခုအနက် တစ်ခုရဲ့ပုံ သဏ္ဍာန်ဟာ အခုမိကျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။ (၄)ပေရှည်ပြီးတော့ ခြေလေးချောင်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက် ဟောင်းလောင်းရှိနေပြီး ကျောဘက်မှာမိကျောင်းရေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားပါတယ်။ ကြိုး(၉)ချောင်းကို ဆန့်တန်းရန်အကန့် ထားရှိထားပါတယ်။ လက်ဝဲဘက်နှင့် လက်ယာဘက်မှာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ခလုတ် (၁၂) ခုရှိပါတယ်။ အခြားထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ မိကျောင်းစောင်းနှင့် မတူအောင်ရောင်စုံခြူးပန်းခြူးနွယ်တို့နဲ့ တန် ဆာဆင်ထားပြီး မြွေသားရေနဲ့ ဖုံးအုပ် ထားပါတယ်။
ထိုစဉ်က တရုတ်မိကျောင်းစောင်းပြုလုပ်ထားပုံကတော့ အခုမွန်တို့အသုံးအပြုနေတဲ့ မိကျောင်းတူရိယာ နဲ့အခြေခံအား ဖြင့် တူညီပေမဲ့လည်း ယခုမွန်မိကျောင်းမှာ ကြိုး(၃)ချောင်းသာပါရှိပြီး လက်ဝဲလက်ယာမှာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ခလုတ် များမပါရှိဘဲ ထိပ်တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ ကြိုးညှိဘို့အတွက် ဒလက်သုံးခုပါရှိပါတယ်။ ယင်းမိကျောင်းပုံစံကနေယခုခေတ် မိကျောင်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သလားလို့တွေးတောစရာပါ ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုအခါမိကျောင်းတူရိယာကို မွန်တို့က သာအသုံးပြုနေကြလို့ ထန်မင်းဆက်လက်ထက် တရုတ်နန်းတော်ရောက် နေခဲ့တဲ့ မိကျောင်းစောင်းဟာ ယခုမွန် မိကျောင်းတူရိယာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဆရာကြီးဒဂုန်နတ်ရှင်ရဲ့အဆိုကို လက်သင့်ခံရမယ်လို့ ဆရာခင်မောင်လေးက သုတေသနပြုရေးသားထားပါတယ်။
ယနေ့လက်ရှိအနေအထားကတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအနေအထားအရသော်၎င်း မွန် အမျိုးသားတို့ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေလို့ မွန်ရိုးရာမိချောင်းတီးခတ်မှုအတတ်ပညာဟာ တိမ်ကောလုနီးပါးဖြစ် နေပါပြီး။ မွန်ဂီတပညာရှင်တွေအနေနဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားနေပေမဲ့ အတိုင်းတာတခု အထိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
အခုခေတ်မွန်လူငယ်အဆိုတော်တွေထဲမှာ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတနဲ့ ရိုးရာမိချောင်းဒူရိယာတီးလုံး တေးသွားတွေကို တွဲဖက် အသုံးပြုတာ တချို့တလေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း မိချောင်းဒူရိယာကို တကယ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးခတ်နိုင်တဲ့သူကတော့ သိပ်ကို နည်းသွားပါပြီးလို့ နိုင်အောက်ပိုင်ကအခုလို ဆွေးမြေ့စွာ ပြောပြပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ အနာဂါတ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတွက် လင်းတခါ မှိန်တလှည့်ဖြစ်နေလေရဲ့။
အခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုတာတွေက အခုခေတ်သစ်တူရိယာတွေဝင်လာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တူရိယာတွေ ကို သူတို့ချစ်မြတ်နိုးမှသာ သူတို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မယ်။ ဒီထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ လေ့လာ လိုက်စားတဲ့ နေရာမှာ အရင်ကထက်နည်းပါးလာတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုးရာအဆိုအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပပြီး မြန်မာ့ယဉ် ကျေးမှုအသွင် လက္ခဏာတွေမပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ဂီတ၊ယဉ်ကျေး မှုတွေကို ထိန်းသိမ်း မှုမရှိသေးတာကြောင့် တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားကို စိုးရိမ်မိ တယ်လို့ နိုင်အောက်ပိုင်က ပြောပါ တယ်။ သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မိချောင်းတူရိယာလေးဟာ သိမ်ငယ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ တီး ခတ်နိုင်မဲ့ပိုင်ရှင်သစ်ကို မျှော်လင့် နေသယောင်ယောင်ရှိနေပါတယ်။
ပြာသိုလဆန်း(၁) ရက်နေ့ဟာဆိုလျင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ် ပါတယ်။ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဟာ ကရင်အမျိုးသားများ အတွက် အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ် ရောက်တိုင်း ကရင်အမျိုးသားတွေဟာ မိမိတို့၏ သက်ကြီး ဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကို အလေးအမြတ်ပြု ပူဇော်ပသ ကန်တော့ ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာ ယုံကြည်ကိုး ကွယ်မူအလိုက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေ ပြုလုပ်ကြသလို မိမိတို့ရဲ့ ရိုးရာယဉ် ကျေးမူစာပေဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ကြ ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွေဒုံးယိမ်းအကတွေနဲ့လည်းဖြေဖျော်ပေးပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမူ အကတခုဖြစ်တဲ့ ဒုံးယိမ်းအကဟာ လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ အကတစ်ခု ဖြစ်သလို ထူးထူးခြားခြား မြူးကြွမှု ရှိတဲ့အတွက် ကရင်လူမျိုးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူဘွယ်ရာအကတစ်ခု လို့ဆိုယင်မမှားပါဘူး။ ချမ်းအေးတဲ့ ငွေနှင်းမှုံကြား မှာ ရွှင်မြူးတဲ့ဒုံးယိမ်းအသံတွေဟာ တကယ့်ကို ပဏာရလှပါတယ်။
ဒီနှစ်ဆိုရင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို စည်ကားသိုက် မြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပ လိမ့်မယ်လို့ ပွဲဖြစ်မြောက်ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးမြအေးကပြောပါတယ်။ ယခုကျင်းပမဲ့နှစ် သစ်ကူးပွဲမှာ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမူပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဒုံးယိမ်းအက၊ ကရင်နပန်းလုံးပွဲ၊ ကောက်သစ်စား ဖီးဘီး ရော်လက်ချည်ပွဲများအပါအဝင် ဘော်လုံးပွဲ၊ လက်ဝှေ့၊ ဇာတ်ပွဲ၊ မဲရုံထီ၊ ချောတိုင်တက် ပြိုင်ပွဲများနဲ့ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ကရင့်ရိုးရာအစားအစာများကိုလည်း ကျွေးမွေး ဧည့်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်ကကြမည့်ဒုံးများကတော့ ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်း ဆိပ်ကြီးမြို့နယ် နာမည်ကြီးဒုံးများ ဖြစ်တဲ့ ဖားပြကျေးရွာဒုံး၊ လာကဒါ၊ ထီးမံထို၊ ကျုံခဝန်၊ နှင့်တောင်ဒီးဒုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ကျေးရွာများမှ ဒုံး များ လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုံးအဖွဲ့ပေါင်း (၁ဝ) ဖွဲ့ကျော် လာရောက်ကကြမှာဖြစ် ပါတယ်။
အဆိုပါနာမည်ကြီးတဲ့ဒုံးများထဲမှ တောင်ဒီးဒုံးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှာ ဘားအံမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကရင်ပြည် နယ်နေ့မှာ ဒုံးအဖွဲ့ပေါင်း (၇ဝ) ထဲမှ ဒုတိယဆုရရှိသွားတဲ့ဒုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုံးယိမ်းအကဟာ သွက်သွက်လက် လက်မြူးမြူးကြွကြွနှင့်ကနေရတာပဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအဝင် ကရင်လူငယ်တွေပါ အားလုံးလိုလိုကသိမြင်ထားကြပါတယ်။ တကယ် တမ်းကျတော့ လူငယ်တွေအများစု ဟာ ဒုံးယိမ်းအကအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိသူနဲပါးလှပါတယ်။ ဒုံးယိမ်းအကကိုလူငယ်တွေမှသာကနိုင်ကြပါတယ်။ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားနေရ တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်ရှိ ဒုံရင်းကျေးရွာဇာတိနေ အဖိုးခွဲကဘောင်ဟာ အသက် (၁၈) နှစ်ကစပြီး ဒုံးယိမ်းအက ကိုစတင်လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပြီး အသက် (၂၆) နှစ်မှာ ဒုံးဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါ တယ်။ အသက် (၇ဝ) ထိ ဘဝတစ်လျှောက် လုံး ဒုံးယိမ်းအကကိုပဲ လေ့လာလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုအဖိုးခွဲကဘောင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိ ကရင်စာ ပေယဉ်ကျေးမူတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူ ထားပါတယ်။ ဒုံးယိမ်းအကနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒုံးဆရာကြီးအဖိုးခွဲကဘောင်က အခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒုံးယိမ်အကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ရှေးခေတ်အပျိူလူပျိုတွေဟာ သစ်ပင် ဝါးပင် အောက်မှာ ချိန်းတွေ့နေကြပြီး လူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကို ကြည့်မကောင်းရှုမလှဖြစ်ခဲ့ရာမှ ရိုးရယဉ်ကျေးမူတွေရှိလာအောင် အပျိုလူပျိုတွေကိုစုရုံးပြီး ဒုံးယိမ်းအကကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကဒုံးဆရာတွေဟာ ဒုံးသင်ကြား တဲ့နေရာမှာ တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို အခြေခံပြီးမှ ဒုံးသီချင်းကိုဖွဲ့နွှဲု့ပြီး ဒုံးအကသင်ကြားပေး ပါတယ်။ ဒုံးဆိုတာရိုးရာယဉ်ကျေးမူကြားမှာ စိတ်ကိုမြူးကြွစေတဲ့အက တခုဖြစ်ပါတယ်။
ကရင့်ရိုးရာ ဒုံးယိမ်းအကကို ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးက ခရစ်တော်မပေါ်မီ Bဃ ၇၃၉ ခုနှစ်မှာ စတင်အသိအ မှတ်ပြုလာ ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးခေတ်က ဒုံးအမျိုးအစား (၇) မျိုးရှိပြီး ယင်း (၇) မျိုးမှာ ဒုံးမောင်ရိုး၊ ဒုံးဆအော် (ခေါ်) (ဒုံးမျောက်)၊ ဒုံးမူးနော်ဖိုးသားခွား (ဒုံးအပျိုလူပျို)၊ ဒုံးလူအို၊ ဒုံးပနား (ခေါ်) (ဒုံးကျွဲ)၊ ဒုံးထရဲ (ခေါ်) (ဒုံးဒရယ်)၊ ဒုံးကုလားတို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒုံးမောင်ရိုးအကမှာ ဟွေးလေးလေးမောင်းရိုး ဆိုတဲ့သံစဉ်နဲ့ အစချီပြီးဖြေး ဖြေးနှင့်ကရပါတယ် သို့သော်လည်း ကကွက်သိပ်မရှိပါ။ ဒုံးဆအော် (ခေါ်) (ဒုံးမျောက်) သည် မျောက်မျက်နှာကဲ့သို့မျက်နှာအမူအရာထားပြီး ကရတာမျိုးဖြစ် ပါတယ်။ ဒုံးမူးနော်ဖိုးသားခွား (ခေါ်) (ဒုံးအပျိုလူပျို) သည် ယနေ့ကနေတဲ့ဒုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုံးပနား (ခေါ်) (ဒုံးကျွဲ)သည် ကျွဲထိန်းသမား များကတီထွင်လာတာဖြစ်ပြီး ကျွဲဂျိုနဲ့တူတဲ့ဂျိုကိုပြုလုပ်ပြီး ခေါင်းမှာပတ်ပြီး ကကြ ပါတယ်။ ဒုံးထရဲ (ခေါ်) (ဒုံးဒရယ်) ဟာလည်းပဲ ဒရယ်ခေါင်းဂျိုတပ်ပြီးကကြပါတယ်။ ဒုံးကုလားအ ကမှာတော့ ကုလားတို့ရဲ့တေးသံတေး သွား နဲ့အတူ ကုလားတို့ရဲ့အကအမူရာနှင့်ညီအောင်ကနေရပြီး ရယ်စရာ ကောင်းသောဒုံးတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဒုံးကုလားအကဟာ အသားဖြူသူတချို့က အိုးမဲသုတ် လိမ်းပြီးမှကကြရပါတယ်။
ယခုခေတ်ဒုံးအများစုက တဖွဲ့မှာ လူ ၃၂ ဦး မှ ၃၄၊ ၃၆ ဦးအထိရှိပါတယ် လူများရခြင်း အကြောင်းမှာ ဒုံးယိမ်းအကဟာ ကကွက်နှင့်အတူကရတာပြီး လူများမှ ကကွက်စေ့ပါတယ် အထူး သဖြင့် ကကွက်တွေဟာ KAREN သင်္ကေတတွေကို ကကြတာများပါတယ် တချို့ကကွက်တွေမှာ ကရင်နှစ် သစ်ကူးနေ့ဆိုတဲ့သင်္ကေတကို အကွက်ကျကျစီပြီးကကြတယ် အက္ခရာ တစ်လုံးချင်းကို ကကြတာဖြစ်ပါတယ် သို့သော်လည်း ကကွက်စီတဲ့နေရာမှာ ဘယ်ကကွက်ကို ကရမလဲဆိုတာ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ သင်ကြားပေးတဲ့ဒုံးဆရာအပေါ်မှာသာမူတည်တယ်လို့ ဒုံးဆရာတစ်ဦး ကပြောပါတယ်။
အများအားဖြင့် ဒုံးအဖွဲ့တိုင်းမှာ ဒုံးပဏာမရှေးဦးကို သုံးယောက်၊ နှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက် စသဖြင့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကတစ်ဦးမှာ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ၄င်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ မေတ္တာပို့ သတဲ့ တေးသီချင်းကိုဆိုရင်းကနေရတာဖြစ် ပါတယ် ၄င်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းကို တပင်တိုင်အ ကဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဒုံးပဏာမရှေးဦးကို အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသား နှစ်ဦးထားရှိကြပါတယ်။ ၄င်းအမျိုးသားနှစ်ဦးဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ဘေးတဖက်တချက်စီမှာ ကနေရပါ တယ်။ ဒုံးပဏမ ရှေးဦးကို အမျိုးမျိုးထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒုံးပဏာမရှေးဦးထား ရှိရတဲ့အပြင် ကရင့်အမျိုး သား အလံတော်ကို ကိုင်ဆောင်ရမည့် အမျိုး သမီးတစ်ဦးလည်းထားရှိရပါတယ် ဒုံးအဖွဲ့တိုင်း အမျိုးသားအလံကိုင် ဆောင်ရခြင်း၏ အကြောင်းမှာ ကရင်အမျိုးသား၏အလံတော်ကို လေးစားဂုဏ်ပြုခြင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း ဒုံးတခု လုံး၏ မျက်နှာဖုံးအနေဖြင့်လည်းကောင်း အလံကိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၄င်းအလံကိုင်သူတစ်ဦးဟာ မတ်မတ်ရပ်နေရတဲ့ အပြင် ဒုံးကပြီးသည်အထိ အလံကိုငြိမ်သက်စွာကိုင်ထားရပါတယ်။ ဒုံးစတင်ကတော့မည်ဆိုလျင် အလံကိုင်တဲ့အမျိုး သမီးသည်ဒုံး၏စင်မြင့်ပေါ်၌ ရှေ့သို့ဦးစွာထွက်လာရပါတယ် ၄င်းအလံကိုင်အမျိုး သမီးထွက်လာပြီးမှ ဒုံးပဏာမရှေးဦး သုံးယောက်လည်း မေတ္တာပို့သထွက်လာရပါတယ် မေတ္တာပို့သ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒုံးတစ်ဖွဲ့လုံးစတင်ကရပါတယ်။
ဒုံးနှင့်အတူတွဲကအသုံးပြူတဲ့ တီးမှုတ်တူရိယာများကတော့ ပင်စည်၊ ကြေးကွင်း၊ နွဲ၊မောင်း၊ ဝါးလက်ခေါက်တို့ဖြစ်ပါ တယ်။ တေးသီချင်းနှင့်အတူသံပြိုင်သီဆိုကရပါတယ် တီးဝိုင်းအနားမှာ နောက်ခံ တေးအဖွဲ့တဖွဲ့လည်းထားရှိရပါတယ်။ ရိုးရာဝတ်စုံအဖြစ် အမျိုးသားမှာ လုံချည်၊ အင်္ကျီအောက်ခံ အဖြူရောင်လက်ရှည် နှင့် အပေါ်ကရိုးရာအင်္ကျီ၊ ခါင်းပေါင်း၊ ခြေစွပ်အဖြူဝတ်ပြီး အမျိုးသမီးမှာလည်း ထဘီ၊ အင်္ကျီ၊ ခေါင်းစည်းပုဝါ နှင့်အတူ ဘယ်ဘက်လက်၏လက်ခလယ်မှာ အဖြူရောင်ပုဝါ သေးသေး လေးတခုကို ညှပ်ထားရပါတယ် အမျိုးသားတွေလိုပဲ ခြေစွပ်အဖြူ များကိုဝတ်ဆင်ကြပါ တယ်။
အခုလက်ရှိဒုံးအကနဲ့ ရှေးခေတ်ကဒုံးအကကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် များစွာကွာခြား လှပါတယ်။ အခုလက်ရှိဒုံးယိမ်း အကဟာ စိတ်ကိုမြူးမြူးကြွကြွနဲ့ရှိစေပါတယ်။ ရိုးရာယဉ် ကျေးမူနဲ့ လည်းလိုက်ဖက်မူရှိပါတယ်။ အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ရှေးခေတ်ဒုံး (၇) မျိုးကတော့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမူနဲ့ ကိုက်ညီမူ မရှိတဲ့အတွက် ဒုံးဆရာတစ်ဦးကနေပြီး ဒုံးယိမ်းအကကို ယဉ်ကျေးမူရှိတဲ့အမူအရာလေးရှိလာ အောင် ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ ပထမတခါ ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ် ထိုအချိန်ကစပြီး အဆိုပါဒုံး (၇) မျိုးဟာ ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ရခြင်း၏အကြောင်းမှာ ဥမာအားဖြင့် ဒုံးဆအော် (ခေါ်) မျောက်အကဒုံးဟာ မျောက်မျက်နှာလိုမျိုး မျက်နှာအမူအရာထားကရပြီး၊ ဒုံးဒရယ် သည် လည်းပဲ ဒရယ်ဂျိုကိုခေါင်းမှာတပ်ပြီး ကရတဲ့အတွက်ကြောင့် ၄င်းအက တွေဟာ ယဉ်ကျေးမူနဲ့ လိုက် ဖက်မှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းအကတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုံးယိမ်းအကကိုပထမဆုံးတခါ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမူရှိ ဒုံးဆရာကြီး ရွှေကြိုးကြာမှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမူဒုံး၏အမည်အခေါ်အဝေါ်နှင့် အကအားလုံးကို တမျိုးတ စားတည်းဖြစ်အောင် ယဉ်ကျေးမူရှိရှိနှင့် မြူးမြူးကြွကြွကရတဲ့အကမျိုးဖြစ်လာအောင် ၁၉၆၄ ခုနှစ် (မဆလ) ခေတ်မှာ ဒုံးယိမ်းအကကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကရင်တွေ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကျင်းပတိုင်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒုံးယိမ်းအကကိုပါ ကနေခဲ့ကြတာ ဒီကနေ့ဒီ အချိန်အထိပါပဲ။ ဆောင်းနဲ့နှင်းခွဲခြားမရသလို ကရင်လူမျိုးနဲ့ဒုံးယိမ်းအက ဟာခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ နှင်းတွေဝေတဲ့ပြာသိုလရောက်တဲ့အခါတိုင်း ဖါးစည်သံတလွင်လွင်နဲ့ ကရင်ဒုံးယိမ်းအသံလေး တွေဟာ ဆောင်းအလှကိုချယ်မှုန်းထားသလိုပါဘဲ။
အီးယူကော်မရှင်အဖွဲ့ နယ်စပ်ဒုက္ခသည် အခြေအနေ လာရောက်ကြည့်ရှု
နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်။ နန်းထူးစံ (ကေအိုင်စီ)
အီးယူကော်မရှင်အဖွဲ့တဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်း တခုဖြစ်သည့် မယ်လစခန်းသို့ လာရောက်၍ ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်ဟု စခန်းကော်မတီဝင်များ ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဗြိတိန်၊ ဂျာမဏီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ နယ်သာလန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်စသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၈)နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင် ၃၀ဦးသည် ဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ နေထိုင် ရေး၊ စားသောက်ရေးအခြေအနေများကို လေ့လာရန် လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မယ်လစခန်း ဥက္ကဌ စောသာကဲက ပြော သည်။
သူက “အခုလာတဲ့ အီးယူကော်မရှင်အဖွဲ့က ပထမ အမ်အိုအိုင်နဲ့တွေ့တယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ စခန်းကော်မတီနဲ့ နေ့လည် စာစားတယ်။ ပြီးတော့ အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး ရေပေးဝေတဲ့ (Solidarities) အဖွဲ့၊ အေအမ်အိုင်ဆေးရုံနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို သွား ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အီးယူကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ဒုက္ခသည်များအား စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ကူ ညီပေးနေသည့် တီဘီဘီစီအဖွဲ့၊ စခန်းဆိုင်ရာ အခြားအဲန်ဂျီအိုများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လက်ရှိထောက်ပံ့မှုအခြေအနေနှင့် ရှေ့ဆက် ကူညီပေးသွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
မယ်လစခန်းရှိ အေအမ်အိုင်ဆေးရုံအုပ် ဆရာစောနေစဲန်က “သူတို့အဖွဲ့တွေက ကေဒဗလျူအိုရုံး အပါအ၀င် နေရာအတော် များများကို သွားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှ သုံးဖွဲ့စလုံး ကျနော်တို့ဆေးရုံကို ရောက်လာတယ်။ ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြား ဆွေး နွေးတာတော့ မရှိပါဘူး။ လူနာတွေ အခြေအနေကို နည်းနည်းပါးပါး မေးမြန်းပြီး ဆေးရုံအဆောက်အဦးတွေကို လိုက်ကြည့် တာပါပဲ”ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို တတိယနိုင်ငံများသို့ နေရာချထားရေးအစီအစဉ်တွင် အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျား နိုင်ငံပြီးလျှင် ဥရောပနိုင်ငံများသည် ဒုက္ခသည်ခေါ်ယူရာတွင် တတိယအများဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
မယ်လစခန်းတွင်းရှိ AMI ဆေးရုံသို့သွားရာလမ်း
အီးယူကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ယနေ့တွင် မဲဆောက်မြို့ရှိ ယူအဲန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်၊ ZOA၊ OPE၊ IOMနှင့် ထိုင်းကျေးရွာများသို့ သွား ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းတို့၏ ခရီးသွားလာရေး အစီအစဉ်အရ သိရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ၂၀၀၀ခုနှစ်ကတည်း က မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ယခုလို နှစ်စဉ် လာရောက်လေ့ရှိသည်ဟု မယ်လစခန်းဥက္ကဌက ပြောသည်။
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသည် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ တတိယနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အခြေချသည့် ဒုက္ခသည်ပေါင်း (၁၉,၀၀၀)ဦးရှိပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဒုက္ခသည် လူသစ်လူဟောင်း စုစုပေါင်း ၅၀,၀၀၀နီးပါးရှိသည်ဟု သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ အသိအမှတ်ပြုထားပြီး တီဘီဘီစီမှ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်း ၇ခုနှင့် ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်း ၂ခုရှိသည်။
ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ်ကျခံရသူ အပစ်ရပ် SSA နာယက ပုံမှန်ဆေးစစ်ခွင့်မရ
ခမ္တီးထောင်၌ ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ် ကျခံနေရသူ SSA အပစ်ရပ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် ပုံမှန်ဆေးစစ်ခွင့် မရကြောင်း မိသားစုဝင်တဦး၏ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
“ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက မျက်စိကတိမ်ဖုံးတယ် အနီ အစိမ်း အ၀ါ ခွဲလို့မရဘူး၊ မိုးတွင်းတလျှောက်လုံးခံလာရတာက ငှက် ဖျားရောဂါ၊ ဂျူလိုင်လတုန်းက စဖြစ်တယ်။ အသည်းအသန်ဖြစ်ချိန်က စိုးရိမ်အဆင့် ၂ လို့ပြောတာဘဲ၊ နောက်ပိုင်း ပုံမှန် ဆေးစစ်ခွင့် မပေးတော့ဘူး” - ဟု ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့လာသည့် သမီးဖြစ်သူ ခမ်းပေါဝ်း ကပြောပါသည်။
ယခုလ ၁၅ ရက် မှ ၂၂ ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ခမ္တီးထောင်၌ ကျခံနေရသူ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန်အား သမီးဖြစ်သူ နန်းခမ်းပေါဝ်း နှင့် မိခင် (ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန်၏ ဇနီး) တို့နှစ်ဦး ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
“ကျမတို့ ခမ္တီးမှာ ၅-၆ ရက်နေရပေမဲ့ ၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည်ပိုင်း ၁ နာရီကျမှ ၄၅ မိနစ်လောက်ဘဲ အဖေ နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်။ ဘာမှ ပြောဆိုတိုင်ပင်ခွင့်မရဘူး။ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းမပြောနဲ့ မိသားစုအရေးတောင်ဘာမှ မပြောပြလိုက်ရဘူး၊ ခရီးတခေါက်သွားရင် မယုတ်မလွန် ၂ ခါ ၃ ခါလောက်ပေးတွေ့ရင် ကောင်းတာပေါ့” - ဟု သမီးဖြစ်သူ က ဆက်ပြော ပြ၏။
လူတယောက်အတွက် ရန်ကုန် - ခမ္တီး အသွားအပြန် တသိန်းခွဲကုန်ကျသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန်အား မိသားစုဝင် များ တလတခါသွားတွေ့ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ “ခြောက်လ ခုနှစ်လမှ တကြိမ်သွားလို့ ရတယ်၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အဖေက အပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ အဖေ့က အသက်ကြီးပြီလေ၊ အဖေအပါအ၀င် ဒေါ်စုနဲ့ သျှမ်းခေါင်း ဆောင်တွေ၊နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားတွေအားလုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မြန်မြန်ရပါစေလို့ဘဲဆုတောင်းတယ်” - ဟုနန်းခမ်းပေါဝ်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြော၏။
ထို့အတူ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသတင်းရပ်ကွက်ကလည်း အပစ်ရပ်မြောက်ပိုင်း SSA အား ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် HGF (Home Guard Force) အဖြစ် ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးထား အသွင်ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် လွတ်မြောက်ရေး နှင့် အပေးအယူကမ်းလှမ်းထားကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်အတွက် ယခုလဆန်းမှစ၍ SSA-N ဌာနချုပ်က ဆိုင်ကျော့ဝ် တွင် အိမ်အကောင်းစားတလုံးကြီးစဆောက်လာကြောင်း ဆို၏။
“အဲဒီ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမတို့ဘာမှမသိပါဘူး၊ အဖေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကလဲ နည်း နည်းဘဲဆိုတော့ အခြားကိစ္စဘာမှ မပြောဖြစ်ဘူး” - ဟု သမီးဖြစ်သူက ပြောပြသည်။
၂၀၀၅ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ သျှမ်းပြည်အတိုင်အပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စအကြောင်းပြု ၍ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန်၊ SNLD ဥက္ကဌ စ၀်ခွန်ထွန်းဦး နှင့် သျှမ်းခေါင်းဆောင် ၇ ဦးအား နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရန် ကြံစည်မှုနှင့် အခြားအမှုပေါင်းများစွာ စွပ်စွဲပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်အား ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ် စ၀်ခွန်ထွန်းဦးအား ၉၃ နှစ်၊SNLD အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင် ၈၅ နှစ်နှင့်အခြားခေါင်းဆောင် များအားလည်း အနည်းဆုံးထောင် ဒဏ် ၇၅ နှစ်ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်းတွင်လူ (၂၁)ယောက်အသတ်ခံရ
By Manny Mogato
Monday, November 23, 2009 8:39 AM
MANILA (Reuters) - Gunmen abducted and killed at least 21 people in the southern Philippines Monday, apparently to preventawoman filing her husband's nomination to run for provincial governor in elections next year, the military said.
Lieutenant Colonel Romeo Brawner said the bodies of 13 women and eight men were found in the area where about 30 people were taken hostage.
"We believe more bodies are buried," Brawner said. "Unfortunately, the killing happened before our troops got there."
Some of the victims were beheaded, and bodies mutilated, local officials said.
Military officials said the dead included Genalyn Tiamzon-Mangudadatu, who was on the way to file the nomination of her husband to contest the governorship of Maguindanao province against Datu Andal Ampatuan, the head ofapowerful local family.
She was accompanied by two lawyers, several members of her family and local journalists.
"No effort will be spared to bring justice to the victims and hold the perpetrators accountable to the full limit of the law," Arroyo said inastatement read by her press secretary, Cerge Remonde. "Civilized society has no place for this kind of violence."
The southern Philippines is driven by clan rivalries, including one between the Mangudadatus and the Ampatuans. Many politicians and elected officials in the region maintain well-equipped private armies.
Of the 22 mayors in his province, most are sons, grandsons or other relatives. Two of his sons have been killed in violence linked to clan wars.
Ina2007 interview with Reuters, Ampatuan said people did not run against him or his family members because they had little chance of winning.
"It's because of popular support," he said. "Because I am so loved by the constituencies of the municipalities, they ask me to have my sons as representatives."
Arroyo has called himavaluable ally in the past. In the 2004 presidential elections, she won most of the votes in Maguindanao. In one town, her rivals did not getasingle vote.
Earlier, military officials had said about 100 armed men, several of them in police uniform, had stopped the Mangudadatu convoy atapolice checkpoint onahighway and taken the victims toaremote mountainous area.
Remonde, Arroyo's press secretary, said extra troops had been sent to the area to defuse tension. Checkpoints were set up to limit movement and lessen chances of retaliation.
The election process for the May 2010 national polls began last week with the filing of candidacies for more than 17,800 national and local positions.
The official campaign begins in February for candidates running for president, vice president and 12 seats in the upper house of Congress. For those seeking local positions and nearly 300 seats in the lower house of Congress, campaigning starts in late March. Polling is on May 10.
Elections in the Philippines are usually marred by violence, especially in the south, where security forces are battling communist rebels, Islamic radicals and the clan rivalries.
(Reporting by Manny Mogato; Editing by Raju Gopalakrishnan and Ron Popeski)
(ငလိမ်ငညာပလီပလာအကျင့်ကိုမွေးကတည်ကပါလာတဲ့ဗီဇတွေဟာ ဘုရားကိုလည်းလိမ်ဖို.ဝန်းမလေ၊ဆရာကိုလည်လိမ်ဖို. ဝန်မလေ၊လူမျိုးကိုလည်းလိမ်ဖို.ဝန်မလေ၊ကမ္ဘာကိုလည်းလိမ်ဖို.ဝန်မလေ၊သားသမီးကိုလည်းလိမ်ဖို.ဝန်မလေ၊ကိုယ့်အမေကို တောင်ပြောင်လိမ်ဖို.ကအပြစ်မကြောက်တဲ့သူတွေပါ၊ ဘယ်တော့မှမယုံနဲ.၊ထန်းသီးကအုန်းသီးဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆို တာကိုမှတ်ထားကြပါ၊)
ဟိုတလောကထိုင်းနိုင်ငံတွင်းအစည်းအဝေးလာတက်တုန်က ပြည်ပဆိုင်ရာငလိမ်နံပတ်တစ် မောင်ဥာဏ်ဝင်းပြောခဲ့တဲ့စကား
ရှိတယ်၊ ယာယီမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငွေကြေးကောက်ခံသည့်ကိစ္စရပ်များမှာ မိမိတို့၏လုပ်ရပ် မဟုတ်ကြောင်း ဟုလူသိရှင်ကြားပြောခဲ့တယ်၊ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊အပေါ်ကပြောတဲ့စကားကတစ်မျိုး၊အောက်မှာ လက်တွေ.လုပ်နေတာကတစ်ဖုံဖြစ်နေတယ်၊ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်၊မုဒုံမြို.နယ်တွင် မြို.နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်ရွာတာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်း၍ ပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏မိသားစုတစ်ချို.ထံမှငွေကြေးကောက်ခံခဲ့ကြောင်း ငွေပေးခဲ့ရသူတစ်ဦးမှပြောပြသည်၊
မြို.နယ်အာဏာပိုင်တစ်ချို.နှင့်ရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအိမ်ကိုရောက်လာတယ်၊ ကျနော်တို.အိမ်မှာပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူရှိနေတာကိုသူတို.သိတဲ့အကြောင်း၊ဘယ်နိုင်ငံမှာသွားလုပ်နေတယ်၊ဘယ်လောက်ကြာလည်ပေါ့ တိကျတဲ့အချက်အလက် တွေနဲ.လာပြီး ငွေလာညှစ်တယ်၊ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမည်ကိုမပြောဘူး၊ဒါပေမဲ့၊ပြည်ပကငွေလွှဲပို.ပေးတာကိုအခွန်ငွေမ ဆောင်ခဲ့လို.ဥပဒေနဲ.မကိုက်ညီသဖြင့် အရေးယူနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်၊ အဲဒီလိုပြောတော့၊ကျနော်တို.ကလည်ကြော က်တာပေါ့၊ပြီးတော့၊ ကျနော်တို.မသိတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်၊သူတို.ကဥပဒေနဲ.မကိုက်ညီတာကိုပဲထပ်ပြောနေတော့၊နော က်ဆုံးမှာ ငွေတစ်သိန်း စာပွဲအောက်ကနေပေးခဲ့ရတယ်၊ပြီးတော့၊သူတို.အုပ်စုကအခြားသောအိမ်များသို.ထွက်ခွာသွားတယ်၊ ကျနော်ထင်တယ် အခြားသောအိမ်လည်ထိမှာပါ၊ ဟုငွေပေးခဲ့ရသူတစ်ဦးကပြောပြသည်၊
တကယ်တမ်းကျတော့၊ယာယီပတ်စပို.လုပ်လုပ်မလုပ်လုပ်ကအကြောင်းမဟုတ်တော့ပါ၊ တိုင်းပြည်တွင်ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေမှန် သမျှကို အခွန်ငွေပေးဆောင်ရမည် ဆိုတဲ့ တရာမဝင်ဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးငွေညှစ်နေအုံမှာပဲ၊ခက်တာက မြိုနယ်အာဏာပိုင်များက ရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုအသုံးချပြီး ပြည်ပမှအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အိမ်ယာတွေကစာရင်းကောက် ယူပြီးလစဉ်ကြေးလိုမျိုးငွေလိုက်ကောက်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာကိုလည်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည်၊
ပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးယာယီပတ်စပို.လုပ်ခိုင်းတယ်၊ပတ်စပို.လုပ်ဖို.ကနိုင်ငံသားစိစစ်ရေး အတွက် မှတ်ပုံတင်နှင်အိမ်ထောင်စုစာရင်းတင်ခိုင်းတယ်၊ပြီးမှပတ်စပို.ချပေးတယ်၊ ပတ်စပို.လုပ်တဲ့သူများ၏နေရပ်လိပ်စာအတိအကျရထားပြီးတော့ ငွေညှစ်ယူရတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုရှာကြတယ်၊ ကျနော်တို.မကောက်ပါဘူးလို. ငလိမ်နံပါတ်တစ်ကပြည်ပမှာပြောင်ကျကျလိမ်ပြောပြီး ဥပဒေအရအခွန်ငွေဆောင်ရမည်ဆိုတဲ့
ဥပဒေကိုသုံး၍ ပြည်တွင်းမှာ လစာမလုံလောက်သောအောက်သူတောင်းစားများ ရဲ.ဝင်ငွေလုံလောက်ရေးအတွက်လမ်းဖွင့်ထားတဲ့သဘောလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
နန်ဒီတာဟက်ဆာ (Nandita Haksar) မဇ္ဇျိမသတင်းဌာနမှရယူသည်၊
သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 43 မိနစ်
အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ကာလကတ္တား စက်ရှင်တရားရုံးများအတွင်း ရှေ့နေလိုက်နေကြသော ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကြီးများအတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့သည် ခါတိုင်းလို အလုပ်များလှသော နေ့တနေ့သာဖြစ်သည်။
သူတို့သည် တရားသူကြီး မစ္စ ကယ်ပါနာဒေး (Ms. Kalpana Dey) ရုံးထိုင်သော တရားခွင်ရှေ့မှ ငဲ့စောင်း၍ပင် ပြန်မကြည့်ဘဲ ကျော်ဖြတ်သွားကြသည်။ သူတို့အတွက်တော့ မြင်ကွင်းမှာ ဘာမှမထူးဆန်း။ ရှေ့နေများက အနက်ရောင် ဝတ်ရုံများခြုံ၍၊ တရားခွင်စာရေးများက စားပွဲတွင်ထိုင်၍၊ တရားသူကြီးက တရားခွင်မှတ်တမ်းကို သူ့လက်ရေးတို စာရေးကို နှုတ်တိုက်ချပေးနေ၍၊ မြင်နေကျမြင်ကွင်းများပင်။
တရားခွင်မှ အသည်းအသန် ပြောဆိုနေကြသော လျှောက်လဲချက်များကို ကြားလိုက်ရသည့် ရှေ့နေတချို့ကတော့ ဥပဒေရေးရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထူးတာလေးများ ကြားရမလားဟူသော စေ့ငုလိုစိတ်ဖြင့် အခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာကြတာလည်း ရှိသည်။ အစိုးရရှေ့နေကြီးက နိုင်ငံခြားသားများကို သေသေချာချာ သမ္မန်စာဆင့်ဆိုခြင်း မရှိဘဲ တရားရုံးတွင် သက်သေထွက်ခွင့် မပြုသင့်ကြောင်း ရုံးတော်ကို လျှောက်လဲကန့်ကွက်နေသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အတိုင်းသာ သမ္မန်စာဆင့်ဆိုရမည်ဟု သူက ဆိုသည်။
ဤလေကောင်းလေသန့်ရ၍ ကျယ်ဝန်းသော ရုံးတော်၏နောက်ရှိ သစ်သားအချုပ်ခန်းထဲတွင်မူ လူ ၃၄ ဦးကို ချုပ်နှောင်ထားသည်။
သူတို့ထဲမှ အတော်များများမှာ ပင်ပန်းလွန်း၍ ရပ်မနေနိုင်တော့ဘဲ အေးစက်နေသည့် ကျောက်တုံးကြမ်းခင်းပေါ်တွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူတို့သည် အင်္ဂလိပ် စကားလည်း မတတ်၊ ငြင်းခုံပြောဆိုနေကြသည့် ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသည့် ဥပဒေရေးရာ အချက်အလက် အကြောင်းအရာများကိုလည်း သူတို့မသိကြ။ သို့သော် တချို့ကတော့ အချုပ်ခန်း သစ်သားတန်းများကိုကိုင်၍ အပြန်အလှန် လျှောက်လဲချက်များကို နားထောင်နေကြသည်။ သူတို့ မျက်နှာများပေါ်တွင်တော့ ပူပန်သောကများက အထင်းသား ပေါ်နေသည်။
ကျယ်ဝန်းလှသော တရားရုံးအတွင်း ချထားသည့် ခုံတန်း ၃ တန်းအနက် နောက်ဆုံးခုံတန်းတွင် ထိုင်နေသူ ၂ ဦးကမူ အေးဆေးစွာ အနှောင့်အယှက်မရှိ အသေအချာ နားစိုက်ထောင်နေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သစ်သားလှောင်အိမ်တွင်းမှ အချုပ်သား ၃၄ ဦး၏ ရှေ့နေကြီးက သူ့သက်သေများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါရန် တရားသူကြီးကို ဖျောင်းဖျပြောဆိုလိုက်သည်။ ပထမဆုံး သက်သေမှာ ဦးဟန်ညောင်ရွှေ ဖြစ်သည်ဟု ရှေ့နေကြီးက တရားသူကြီးကို အသိပေးလိုက်သည်။
ဦးဟန်ညောင်ရွှေက နေရာမှထပြီး သက်သေခုံရှိရာသို့ လျှောက်လာသည်။ သူ့ဘေးတွင် ကပ်လျက်ထိုင်နေသူကို တရားရုံးပြင်ပသို့ ထွက်ခွာပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။ ဥပဒေအရ တရားခံပြ သက်သေများသည် တဦးထွက်ဆိုနေသည်ကို နောက်တဦးက နားထောင်နေခွင့် မရှိပါ။
ဦးဟန်ညောင်ရွှေ ခနော်နီခနော်နဲ့ သက်သေဝက်ခြံအတွင်းသို့ ဝင်လိုက်ပြီး ကျမ်းကျိန်ရသည်။ ထို့နောက် သူသက်သေထွက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သစ်သားလှောင်အိမ်အတွင်းမှ တရားခံများအနေဖြင့် သူဘာပြောနေသည်ကို မကြားရနိုင်ပါ။ သို့သော် သူ၏ ကြက်သရေရှိမှုနှင့် အေးဆေးငြိမ်သက်သော ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတို့ကြောင့် မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ကြပါ။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး လက်ရေးတိုစာရေးက သူအကျွမ်းတဝင် မရှိသော လေယူလေသိမ်းနှင့် မြန်မာအမည်များကို မနည်းကြိုးစားကာ ရေးမှတ်နေရသည်။
ဦးဟန်ညောင်ရွှေကို လွန်ခဲ့သော ၆၂ နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရှမ်းမင်းမျိုးမင်းနွယ်မှ ပေါက်ဖွားလာသူ ဖြစ်ကြောင်းကို သူ့ဟန်ပန်အမူအယာကို ကြည့်ရုံဖြင့် သိနိုင်သည်။ သူ့ဖခင်သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့် စကားလုံးများကို သေချာစွာ ရွေးချယ် ပြောကြားနေသည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက အာဏာသိမ်းလိုက်သောအခါ သူ့ဖခင်မှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ထဲ၌ပင် သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ သူ့အကိုတဦးမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၏ ကွပ်မျက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဤကြေကွဲဖွယ် အဖြစ်ဆိုးများကြောင့် မိသားစုလိုက် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ကြရသည်။ ထို့နောက် ဦးဟန်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ပြောင်းရွှေ့ခိုလှုံခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကနေဒါနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခဲ့သည်။
မျိုးရိုးဂုဏ်ကြောင့်သာမဟုတ်၊ သူ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကလည်း အထင်ကြီးစရာပင်။ သူသည် သတ္တုတွင်းတူး အင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စိစစ်လေ့လာသူတဦးလည်းဖြစ်ကာ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတဦးဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ့ဘဝတခုလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း၌သာ မြှုပ်နှံထားခဲ့သည်။
ဤတရားရုံးတွင် သက်သေထွက်ဆိုရန်အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံမှ တနံတလျားလာခဲ့ရသည်။ တရားခွင်နောက် သစ်သားလှောင်အိမ်တွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၄ ဦးလုံးမှာ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်ရေးသမား အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြောင်း သူက ရုံးတော်သို့ ထွက်ဆိုသည်။ သူသည် ဘရပ်ဆဲလ်တွင် ဌာနချုပ်ရှိသော ယူရိုဘားမားရုံး (EBO) ၏ အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ရုံးမှ ဤအမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထုတ်ပေးနေခဲ့ကြောင်း၊ အကယ်၍ ဤတရားခံ ၃၄ ဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ လုံခြုံရေး အကျိုးစီးပွားများကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သည့် လက်နက်မှောင်ခိုသမားများ ဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိခဲ့လျှင် ဤသို့ငွေကြေးများ ထောက်ပံ့ပေးကမ်းရန် လုံးဝ အကြောင်းမရှိပါဟု သူက ရုံးရှေ့တွင် ထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့သည်။
သူသက်သေထွက်ပြီးသောအခါ သက်သေခုံမှဆင်း၍ နောက်သက်သေတဦးကို ခေါ်သည်။ ဒုတိယ တရားခံပြသက်သေမှာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက သူသည် ဆရာဝန်တဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်မှ မနုတ်ထွက်မီအထိ ဆေးကုသခြင်း လုပ်ငန်းကို ၁၅ နှစ်ကြာ မျှလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ထင်ရှားလှသည့် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုသွားသည်။ သူသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးခဲ့ပါ။ ထိုသို့ လွှဲမပေးသည့်အပြင် ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှာ စစ်အစိုးရက ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်မှထွက်ခွာလာခဲ့ရရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အရောက် ၅ ညအိပ်၊ ၆ ရက်ခရီးကို ခြေလျင်လျှောက်ခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေကလည်း ဤမြန်မာနိုင်ငံသား စွပ်စွဲခံရသူ ၃၄ ဦးမှာ အိန္ဒိယ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဂရေးဝါးလ်၏ အမှုဆင်ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်းကို သူသိကြောင်း ရုံးတော်ကို ထွက်ဆိုသည်။ သူ ဂရေးဝါးလ်ကို လူကိုယ်တိုင်သိကြောင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က အခြား မြန်မာလူမျိုး ၁၁ ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခဲ့ရာတွင် သူသည် အဓိကအခန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်ကြောင်း သူက ရုံးတွင် ထွက်ဆိုသည်။ အဝေးရောက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB) ၏ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုယ်တိုင် ရုံးရှေ့သို့ လာရောက်ထွက်ဆိုလိုသော်လည်း ဗီဇာမရ၍ မလာနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သူက ရုံးတော်သို့ အသိပေးပြောပြခဲ့သည်။
ထိုနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ဦးဟန်ညောင်ရွှေနှင့် ဒေါက်တာတင့်ဆွေတို့ ၂ ဦးလုံးကို လှောင်အိမ်တွင်းမှ အကျဉ်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရခိုင်နှင့် ကရင်လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်ရေးသမား ၃၄ ဦးလုံးနှင့် သူတို့ ၂ ဦးက တဦးချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ထိုအခိုက်အတန့်လေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စိတ်ဓာတ်မှာ တရားရုံးအတွင်းသို့ သက်ဆင်းကျရောက်လာသလို ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ခေါင်းဆောင်များက အတူတကွ လက်တွဲကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ထိုမြန်မာနိုင်ငံသား ၃၄ ဦးမှာ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်နှင့် ကရင် လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဦးဟန်ညောင်ရွှေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကောင်စီ (ENC) ကို ကိုယ်စားပြုနေသည့် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသည့် ရှမ်းအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှာ မြန်မာလူမျိုးတဦးဖြစ်ပြီး အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကို ကိုယ်စားပြုလာရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒါ ကာလကတ္တား တရားရုံးအတွင်း ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ပြန်လည်ရှင်သန်နေခြင်း မဟုတ်ပေဘူးလား။
မြန်မာမီဒီယာအများစုက ဤတဒင်္ဂတွင် ဤသို့ ဆက်စပ်နေပုံကို မမြင်လိုက်ကြ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြပုံ၏ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အဖြစ်ကို သတိမမူမိလိုက်ကြ။ မြန်မာစစ်တပ်က ၄၇ နှစ်လုံးလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးဟု ကြွေးကြော်ပြီး ဝါဒဖြန့် သိမ်းသွင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ လူထု၏ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် မြန်မာနိုင်ငံတော် အမြင်သဘောထားကို ချေဖျက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို အာခံ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် လူများစု မြန်မာလူမျိုးများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ဤနေရာတွင် စုရုံးရောက်ရှိလာကာ မြန်မာနိုင်ငံသား လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူ ၃၄ ဦး၏ ဘဝများကို ကယ်တင်နိုင်ရေးအတွက် အတူတကွ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
ဤတရားခွင်သို့ အိန္ဒိယလူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများနှင့် အိန္ဒိယမီဒီယာလည်း ရောက်မလာခဲ့ပါ။ သူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရက်စက်ဆုံး စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုလည်း ပြသရန် စိတ်မပါကြ၊ ဤလွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများကို ဒီမိုကရက်တစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၁၂ နှစ်ကျော် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားခဲ့သည်ကိုလည်း ဒေါသထွက်ရကောင်းမှန်း မသိကြပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ် အခြေခံသည့် အားလုံး ပါဝင်နိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပုံနှင့် ပင်လုံစိတ်ဓာတ်တို့မှ သင်ခန်းစာများ အများကြီး ရယူနိုင်ပါသည်။
ထိုနေ့က ကျမ တရားရုံးအတွင်းမှ ထွက်ခွာလာချိန်တွင် ပင်လုံစိတ်ဓာတ်က တရားရုံးကို လွှမ်းခြုံနေခဲ့ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား တရားခံ ၃၄ ဦးလုံးလည်း မကြာခင် လွတ်မြောက်လာတော့မည့်အကြောင်း ကျမ သိလိုက်သည်။ သို့သော် ကျမစိတ်ထဲတွင် ဝမ်းနည်းစိတ် ပေါ်လာသည်မှာ ကျမတို့ အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့် မြန်မာလူမျိုးများက ကာလကတ္တား တရားရုံးအတွင်း ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ပြန်လည်ရှင်သန် နိုးထလာချိန် သမိုင်းသင်ခန်းစာ ကောင်းကောင်းယူနိုင်သည့် တဒင်္ဂလေးကို လက်လွတ်သွားခဲ့ရခြင်းပင်။
စာရေးသူသည် ထင်ရှားသည့် လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေတဦးနှင့် စာရေးဆရာတဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ဤ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၄ ဦးအမှုကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ နောက်ဆုံးထုတ် စာအုပ်မှာ `သူလျှိုငလိမ် စစ်ထောက်လှမ်းရေး -မြန်မာ့ခုခံဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို အိန္ဒိယ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက မည်သို့မည်ပုံ သစ္စာဖောက်ခဲ့ပုံအကြောင်း´ ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် အိန္ဒိယစစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး V.S. Grewal မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများကို သစ္စာဖောက်ရန် ဦးဆောင်ကြံစည်ခဲ့ပုံအကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးသားထားသည်။
Illegal Burmese migrants: caught between hiding or becoming legal
By JACKIE POLLOCK
Published on November 21, 2009
MANY OF the estimated2million Burmese migrants currently living in Thailand can remember the mass deportationadecade ago. With the threat of another mass expulsion looming, migrant workers are exploring their options and hoping to avoid the panic, the desperation and the dangers of November 1999.
This collective memory is in itself an acknowledgement of the number of years that migrants have given to Thailand, but despite this, they still have limited options to secure their livelihood, safety and all options that render them temporary commodities.
Newly arrived migrants from Burma only have one option and that is to live and work illegally in Thailand. Migrants who have missed all of the registrations offered by Thailand must also liveaclandestine life. Migrants who have registered and re-registered since 2004 have the option of re-registering but this time with the proviso that their details will be sent to Burmese authorities to have their nationality verified. Those who pass this scrutiny will then be issuedatemporary passport to allow them to enter Thailand legally for work. Ironically, the illegal workers may be the most permanent of all the workers. They certainly are the largest in number, currently estimated at around 1.5 million.
The 600,000 registered migrants have permission to stay year by year, withathreat of deportation at the end of each 12-month cycle. Next year, all the various registration processes expire on the same date, February 28, 2010, with the threat of mass expulsion.
The temporary passports being issued to migrants, who have had their nationality confirmed, are part ofaprocess started by the signing ofamemorandum of understanding between Thailand and Burma in 2003. To date, only around 2,000 Burmese migrants have been issued with passports. As the name implies, these passports are only valid for three years. Migrants with these passports can then apply forawork permit, which may be extended forafurther two years. After four years of working in Thailand, the migrant will not be allowed back for three years.
Many of the ethnic nationalities of Burma fear repercussions for their families if they enter the verification process and so are opting out of the whole registration process. Having read the policy and heard the threats, they are preparing to go home. They are working hard, saving money and asking around about jobs in other countries. They will require some assistance from Thai authorities to safely return to the border and bid farewell to their lives in Thailand.
Others who are rejecting the verification and passport process are making preparations ofadifferent kind. They are preparing to return to the illegal status and continue working. Many already have the experience of being considered illegal and their experience is often that legal status does not makeagreat deal of difference. Registering foramigrant worker's card has never guaranteedaminimum wage or proper health and safety standards or even days off. So, they will save the money they would normally have paid for registration, and instead give it under the table when demanded from the local police or immigration. They are also preparing to ward off brokers and traffickers, and to run when needed.
And then there are some migrants who vacillate between getting verified or not. The right to haveanationality, passport, be legal for four years, be able to travel by local transport or drive are tempting. But the concerns about taxation, repercussions on family members, increased costs and the experience that the Burmese military regime has no qualms on backtracking on policies and promises remain strong deterrents. Maybe if the incentives were greater, more migrants would enter the process. If havingapassport and work permit guaranteed regular payment of minimum wage; if it was not left up to the discretion of the employer to register workers in the social security system to ensure that workers got free healthcare and welfare benefits and rights; if the work permit did not come with the three-year ban; maybe if migrants were not classed as second-class citizens only worthy ofatemporary passport; maybe if migrants could travel onanormal passport and make their own decisions regarding which country offered better conditions, more migrants would be eager to join the process.
Even the previous registrations of migrant workers in Thailand in their own way provided more security and stability than the four years of the passport. Though only annual policies, they have been renewed again and again over the last 17 years. Even the current policy acknowledges the length of time migrants stay. All those migrants registering today have been in Thailand for five years. With the passport system, they would be long gone, having passed their expiry date of four years. With the ban on returning for the following three years, they will surely be off to the Middle East or elsewhere, certainly not waiting around to return to Thailand.
Registration, temporary work permits, illegal status - the choices are limited. And the choices all ignore the migrants and their families, their lives, their talents, their interests and their dreams. The choices all focus only on the productivity of the migrants, on the profits for the employers and the country's economy. Woven through every policy is the discourse of illegality and impermanence. It is time that migrants were afforded identity, rights and protection as people as well as workers. A migrant's right to healthcare or to housing should not be dependent on an employer. Migrants need legal status asapeople first and then as workers.
"Booths on the border" is one possible solution. A migrant crosses into Thailand and immediately getsacard withaphotograph, which is then entered intoacomputerised system. Thailand has the technology. The long porous border, supposedly impossible to man, seemsabit ofamyth when one sits and watches the rubber rings floating across at Myawaddy to Mae Sot. If the border is so long and porous, why cross right in front of the immigration authorities? Land-mined and militarised might better describe the Thai-Burma border. Immediate documentation of migrants on arrival would put traffickers out of business, and brokers could only facilitate not manipulate the labour market. Migrants could travel freely to their places of work and then register with local authorities once they have found work.
More migrants might come, but more migrants might also return. Research has shown that the greater the restrictions placed on migration, the longer migrants stay put. Ease the restrictions and migrants can move with the economy, the labour flows and the normal patterns of ones life. The restrictions mean that migrants risk everything to move and so will not take that riskasecond time, they will stay in the country of destination despite economic downfalls or bad conditions because the risk of getting home and not being able to return is too great.
If limiting the number of migrants arriving isaconcern, then Thailand together with Asean countries need to address the situation in Burma. Migrants from Burma are simply looking forachance to haveastable, secure livelihood and outlive the military regime. Asean needs to speed up the demise of the military dictatorship in Burma and give migrants the choice of living in their own country or migrating for work.
There is an urgent need for review of the policies towards migrants and towards Burma. Mass expulsion and mass unemployment of migrants without temporary passports in February 2010 isarepugnant solution; collective expulsions are inherently arbitrary and thus prohibited under international human-rights law. They invariably result in accidents, abuse and the separation of families.
Migrants have voiced concerns over the temporary passports, and these concerns need to be taken into consideration for future policies. The temporary passport may be one option but it is not the choice for most migrants, and would take years to implement even with full cooperation from the migrants, employers and Burmese authorities. Migrants are asking for policies which protect their rights and dignity as people, which enforce labour standards equal to their Thai counterparts, and which do not force them to live in states of insecurity, instability and dishonesty.
မြန်မာဒုက္ခသည်များလက်ခံရေးအတွက် ဂျပန်းအစိုးရ၏အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံပါရန် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာအဖွဲ.အားဝန်ကြီးချုပ် ဟာတိုရာမတောင်းဆို
လာမည့် နှစ် ၂၀၁၀ ဧပြီလကစပြီး ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင်နေထိုင်နေသောမြန်မာဒုက္ခသည်များကို တစ်နှစ်လျှင် ဒုက္ခသည် အယောက် (၃၀) လောက် ဂျပန်းအစိုးရကလက်ခံနိုင်ရေးအတွက် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးအဖွဲ.အနေနဲ.ဂျပန်းအစိုးရနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဂျပန်းဝန်ကြီးချုပ်က နာရီဝက်လောက်တွေ.ဆုံပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်၊ဤအစီအစဉ်ကို (၃)နှစ်လောက် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုရှိမရှိအပေါ်မူတည်၍ ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဟုသိရှိရသည်၊
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာသောဒုက္ခသည်များကူညီမှုအစီအစဉ်ကိုအာရှနိုင်ငံများအနက်ဂျပန်းနိုင်ငံကပထမ ဦးဆုံးစတင်မည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်၊
ဤအစီအစဉ်ကိုစတင်ရခြင်း၏အကြောင်းကတော့ ဂျပန်းအစိုးဟာဒုက္ခသည်များကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုလုံလုံလောက် လောက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိ ဟု နိုင်ငံတကာ၏ဝေဖန်သံများကို ခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ.လုပ်ဆောင်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Hatoyama Calls For UNHCR To Support Plan To Accept Myanmar Refugees
TOKYO, Nov 20 (Bernama)-- Prime Minister Yukio Hatoyama on Thursday called on the United Nations refugee agency to support Japan's plan to accept Myanmar refugees from fiscal 2010, Japan's Kyodo news agency reported quoting the Japanese Foreign Ministry as saying.
During the meeting with U.N. High Commissioner for Refugees Antonio Guterres, Hatoyama was quoted as saying that Japan needs the agency's continued cooperation for it to makea''success'' of its acceptance of Myanmar refugees underathird-country resettlement program starting in the next fiscal year from April 2010.
Japan is set to accept about 30 refugees, who have fled the suppression of human rights by Myanmar's military government and currently live in border camps in Thailand, each year for three years from fiscal 2010 under the resettlement programme, according to ministry officials.
If realised, Japan will be the first Asian country to introduce the programme, which is designed to help people who have fled to nearby states because of conflict in their home countries but find it hard to settle there or return home.
In the half-hour meeting at the prime minister's office, Guterres responded that Japan's foreign policy and the UNHCR's support are heading toward the same goal and that Japan can expect continued support from the agency, according to the ministry.
The government will examine the outcome of the programme after the three years and decide whether to continue it, the officials said.
The introduction of the programme is apparently aimed at fending off criticism in the international community that Japan is not doing enough in the area of refugee support.
လက်နက်ကိုင် အကျဉ်းသား ၃၄ ဦးကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည့်အပေါ် ကေအဲန်ယူ ကြိုဆို
ရေးသားသူ - စောခါးစူးညား
ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 19 ရက် 2009 ခုနှစ်
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(ယူအဲန်အိပ်ခ်ျစီအာရ်)က အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တား အကျဉ်းထောင်တွင် နှစ် ရှည် ထိန်းသိမ်းခံရသည့် မြန်မာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင် ၃၄ဦးကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရန် စဉ်းစားခဲ့သည့် အပေါ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)က ကြိုဆိုလိုက်သည်။
ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘောက “ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ သူတို့တွေဟာ ဘာအပြစ်မှ ရှိတာမှမဟုတ်တာ။ အိန္ဒိယအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ပြစ်မှုတွေ တခုမှမရှိဘူး။ အိန္ဒိယဥပဒေအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာတခု မှ ချိုးဖောက်ခဲ့တာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပဲ”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းတို့ကို အိန္ဒိယအစိုးရက အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ နှစ်ရှည်အထိန်းသိမ်းခံရသည်က တကြောင်း၊ တရားလို ဘက်မှလည်း တရားစွဲရန် ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားများ မရှိသည့်အပေါ် ယခု အမှုသည် ပြီးဆုံးသင့်သည်မှာ ကြာပြီဖြစ် ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ကရင်နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အကျဉ်းသား ၃၄ဦးကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် နယူးဒေလီမြို့ရှိ ယူအဲန်အိတ်ခ်ျစီ အာရ်ရုံးသို့ တင်ပြမှုများရှိခဲ့ပြီး အသိအမှတ်ပြု စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပေးပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)နှင့် ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားညီညွတ် ရေးပါတီ(အဲန်ယူပီအေ) တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀ဦးတို့သည် ၁၉၉၈ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယပိုင်နက် ဂရိတ်နီကိုဘာကျွန်းစု ထဲမှ လန်းဖောလ်ကျွန်း(Landfall)တွင် လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားရှိမှု၊ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ လက် ဝယ်ထားရှိမှု၊ နိုင်ငံခြားသား အက်ဥပဒေအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာမှုတို့ဖြင့် အိန္ဒိယရေတပ် စစ် ထောက်လှမ်းရေးမှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၎င်းတို့အထဲမှ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဗိုလ်ခိုင်ရာဇာ၊ ပဒိုမူးရယ် အပါအ၀င် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၆ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ကျန်ရှိသည့် ကေအဲန်ယူအဖွဲ့ဝင် ၁၁ဦးနှင့် အဲန်ယူပီအေအဖွဲ့ဝင် ၂၃ဦး စုစုပေါင်း ၃၄ဦးကို ဂရိတ်နီကိုဘာကျွန်းစုများရှိ ပို့ဘလဲ ယားကျွန်းသို့ စွဲချက်တင်ပို့ဆောင်ကာ အမှုရင်ဆိုင်စေခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးဗျူရို(စီဘီအိုင်)က အဆိုပါအကျဉ်းသားများကို ၆နှစ်ကြာ တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိဘဲ ထိန်းသိမ်း ထားကာ ၂၀၀၆ခုနှစ်မှသာ ကာလကတ္တားအကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာစစ် အစိုးရ၏ ခိုင်းစေမှုကြောင့် ၎င်းတို့ကို အကွက်ချကာ ကြံစည်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု အမှုသည်များက တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုသွားခဲ့သည်။
အဲန်ယူပီအေ၏ ပြောကြားချက်အရ ထိုသူများအား လမ်းဖောလ်ကျွန်းကို အိန္ဒိယဘက်က အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး တရုတ်ရေတပ် လှုပ်ရှားမှုကို အပြန်အလှန် ထောက်လှမ်းပေးပို့ပြီး အခြေချစခန်း တည်ဆောက်ရန် အိန္ဒိယစစ်ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီးတ ဦးနှင့် သဘောတူညီချက်ရှိထားသည့်အပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ရောက်ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ကရင်နှင့် ရခိုင် အကျဉ်းသားများ၏အမှုကို လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နှင့် ၁၂ရက်နေ့၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလကတ္တား မြို့ရှိ ပရက်စီဒင်စီ(Presidency) တရားရုံးတွင် ကြားနာခဲ့ရာ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက် ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး စီရင်ချက်ကို ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီမှသာ ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာဇာနည်ရေသားထားတဲ့ဆောင်ပါးသည် ဆောင်ပါး၏အရသာကလည်းကောင်း၊ဆောင်ပါးကိုဖတ်ပြီးတော့ စကားစစ်ထိုးပွဲကလည်းကောင်းတော့ ဧရာဝတီဝက်ဆိုက်မှကူးယူပြီးတိုင်းရင်းသားအသံကပြန်လည်ဖော်ပြထားပါသည်၊မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့သူများကိုဖတ်စေချင်
Tuesday, 10 November 2009 16:15 ဒေါက်တာ ဇာနည်
အမေ့ဗိုက်က ထွက်လာကတည်းက ကျုပ်တို့ ဗမာတွေဟာ မုသာဝါဒကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ သွန်သင် ဆုံးမတာ ခံခဲ့ရပါ တယ်။ အသက်လေး နည်းနည်းရလာပြီး ဘုရားကျောင်း ကန်ဆောက်၊ သံဃာများနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါကျ တော့လည်း “မုသာဝါဒါ ဝေရာမဏိ”ဆိုပြီး တတွတ်တွတ် ရွတ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ဗမာ တမျိုးသားလုံးဟာ မုသာဝါဒ မှိုင်းတွေမိပြီး ဘိုးဘွားပိုင်တိုင်းပြည်ကြီးဆိုပြီး ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်တွေ တက်ကြွ နေတာပါ။ ရေထဲက ငါးတွေ ရေစိုတာ မသိသလိုပါဘဲ။ မိရိုးဖလာ မျိုးချစ်ကြီးတွေ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေး အသိမရှိတဲ့ ဘ၀မှာ အားလုံးက အမျိုးသားဇာတ်ပျက်ကြီးထဲ “ကမ္ဘာမကြေ”ဆိုတာနဲ့ တက်အောင် ထကခဲ့၊ ထက နေကြတာပါ။
စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ။ ကျုပ်တို့အားလုံးကို သွင်းထားတဲ့ အမျိုးသားရေးဇာတ်ပွဲရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို ကြည့်ပါ။ ဗမာ တွေ ပေါက္ကံပြည်ကြီးမှာ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်း တိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဥမကွဲ သိုက်မပျက်နေခဲ့ ကြတာ ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက၊ ကမ္ဘာတည်စကတည်းက ဆိုမယ်။ ဒီရွှေနိုင်ငံကြီးကို မိစ္ဆာကုလားဖြူတွေ ကျူးကျော် နယ်ချဲ့လို့ တိုင်းဌာနေ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကွဲ၊ ပြည်သူတွေလည်း နှစ် ရာကျော် ကျွန်သဘောက် ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ အမျိုးသားရေး ဇာတ်ထုတ်က ဆိုတယ်။
ဗမာတွေ လွတ်လပ်ရေး ရတာပဲ အနှစ် (၆၀) လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ကျုပ်တို့တွေ သမိုင်းကို မျက်မှန်စိမ်းဖြုတ်ပြီး ကြည့်ဖို့၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုပြီ။
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့၊ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေး သမိုင်းအမြင်ကို ဂျပန်ခေတ်က စကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ “မျက်မှန်စိမ်း”၊ သမိုင်းလောကုတ္တရာ စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ “အမျိုးသားရေး မောဟ” လို့ခေါ်ရမယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ စကားငှားသုံးရင်တော့ ဗမာတွေရဲ့ “ခွ(ဂွ)ကောင်တွေခွေးဖြစ်တဲ့သမိုင်း”လို့များ ဆိုရ မလား မသိပါ။
သမိုင်းသတ္တိရှိကြပါ၊ ကျုပ်တို့ပြည်သူအားလုံးကို “ကျေးတော် ကျွန်တော်” လုပ်ခိုင်းပြီး စီးပွားရေး ကုပ်သွေးစုပ်၊ မယားမှိုလိုပေါက်အောင် ယူပြီးတော့ လောကီစည်းစိမ်ယစ်မူးခဲ့တဲ့ “ပါးစပ်က ဘုရား လက်ကကားယား” ပဒေသရာဇ်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုကြည့်။ ယိုးဒယားကိုသိမ်း၊ ရခိုင်ကို ဖျက်ဆီး၊ မွန်တွေကို အမျိုးဖြုတ်၊ ရှမ်းတွေကို နှိပ်ကွပ်၊ ကရင်တွေကို ပေါ်တာဆွဲ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်း အဓမ္မဇာတ်ခင်းပြီး လက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီးတွေ ထောင်ခဲ့ တာပဲ။ အဲဒါကို ရာဇ၀င် ဆရာကြီး၊ ဆရာလေးများက လက်ခုပ်သြဘာပေး၊ ကိုယ်နဲ့ အတန်းမတူတဲ့ ဘိလပ်က အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ဟဲဗီးစိတ်တန်းဝင်မြှောက်ပေးကြတော့ ကုန်းဘောင်ဆက်လဲပြုတ်။ ရွှေနန်းတော်ကြီးလည်း ထင်းဖြစ်။ မယားကြောက် သီပေါလည်း အင်္ဂလိပ်ဘွတ်ဖိနပ်စာထိ။ ဗမာတွေလည်း ကုန်းဘောင်ကျွန်ဘ၀ကနေ ၀ိတိုရိယ ကျွန်ဘ၀ အရှင်လတ်လတ် ဘ၀ကူးခဲ့ရတာပေါ့။
ကျုပ်တို့အမျိုးသားရေးသမိုင်း အမြင်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေ ဆိုးဝါးအနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘုရင် သခင်က တခြားလူမျိုးတွေကို သွားသိမ်းပိုက်အနိုင်ယူတာကျတော့ ပါးစပ်က အမြှုပ်တွေ ထတဲ့အထိ ပီတိဖြာ တယ်။ ပြောလို့ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးတော့ဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုးအသုံးမကျလို့ အင်္ဂလိပ်မင်းများက သခင်ကြီးအဖြစ်လဲ ရောက်ရော မတရားဘူး ထအော်ပေါ့။ ဒါက ညစ်ပလီစိတ်ပါ။
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေလို့ သိမ်းကျုံးပြီး ရည်ညွန်းလိုက်ပြန်တော့ တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် ကြီးလာတဲ့ ညီနောင်ရင်း လူပါးဝလှချည်လားဆိုပြီး ဆဲတာတွေ၊ ကလော်တုတ်တာတွေ လာမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်၊ “ဗမာ”ဆိုတာ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဗမာအားလုံးကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ အရပ်သား၊ စစ်သား၊ ဘုရားသား၊ အသည်သား၊ ရုံးသား သားပေါင်းစုံကို ဆိုလိုပါတယ်။ မရှင်းမှာ စိုးလို့ပါ။
လူစင်စစ်က အမျိုးသားရေး “မျက်မှန်စိမ်း” တပ်ခံခဲ့ရ၊ တပ်ခံနေရဆဲ ကျုပ်တို့ရဲ့ဘ၀ကို မချိလို့ပါ။ ဒီညစ်ပလီ အမျိုးသားရေးသမိုင်းကို မိရိုးဖလာ အလား၊ ကိုယ်ပိုင် ဆင်ခြင်တုံတရား မသုံးဘဲ လက်ဆင့်ကမ်း လာလိုက်တာ (၁၉၄၈) က စပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျိုးဆက် (၃) ဆက်လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ လက်ရှိသမိုင်း သင်ရိုးညွန်တမ်းတွေ ဆိုတာကလဲ အဲဒီ သမိုင်းမျိုးအပေါ်မှာပဲ အခြေစိုက်ထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းတာမှန်သမျှ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အမွေအနှစ်အဖြစ် ပြောမယ်။ မကောင်းတာ၊ ပျက်တာ၊ ဖောက်ပြန် တာ မှန်သမျှ ဗြိတိသျှ သခင်ကြီးများ လက်ကျန် ကိုလိုနီအမွေအနှစ်တွေပါဆိုပြီး တာဝန်ကို ရှန်တိန်လုပ်ထားတဲ့ သမိုင်းပဲ။ မိရိုးဖလာ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရဲ့ သမိုင်းအမြင်တွေထဲမှာ မှန်တာတွေကတစိတ်လေးလောက်တော့ ပါမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သုံးသပ်ချက်အမှား၊ သမိုင်းကောက်ချက်အမှားနဲ့ ထိန်ချန်မှုတွေကလည်း တပုံတပင်ပါ။
ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်း ဘ၀ကတည်းက ကျုပ်တို့ဟာ ကျွန်သာသာ ဘ၀မှာ နေခဲ့ရတယ်။ မျက်နှာဖြူ သခင်ကြီးများ လက်အောက်ရောက်တော့လည်း ဒုံရင်း ဒုံရင်းပါပဲ။ ဒီ ပြည်သူအများစုရဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာ ဘ၀ကို ထိန်ချန် ရေးတဲ့ အမျိုးသားဝါဒီ သမိုင်းရာဇ၀င် က၀ိကြီးများက ကျုပ်တို့ရဲ့အတိတ်ဆိုး၊ အတိတ်ပုပ်တွေကို မျှော့ကြိုးလို သဘောထားပြီး ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေး၊ ဆွဲရေးခဲ့ကြ၊ ရေးနေဆဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေခမျာလဲ အစဉ်အလာအမျိုးသားရေး၊ လူမျိုးရေး သမိုင်းအမြင်ထဲမှာပဲ တ၀ဲလည်လည်ပေါ့ ဗျာ။ ဖွတ်ကို မိကျောင်းမှတ်၊ မမြင်ဘူး မူးမြစ်ထင်ဆိုသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားလိုက် ဘ၀င်မြင့်လိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတဲ့ သမိုင်းရေဆွေးထဲပဲ ပိတ်ဆို့ ပေါလောမျောနေတာကိုး။
ဘုရားဆုပန် သာသနာပြု ဆင်ဖြူ နွားဖြူများရှင် မင်းတြားကြီးများရဲ့ လက်ထက်က ပြည်သူတွေရဲ့ လူမူစီးပွား ဘ၀ကို မျက်မှန်စိမ်းချွတ်ပြီး ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ပါးစပ်ကတော့ ဘုရား ဘုရားနဲ့၊ ပြည်သူကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဧကရာဇ်တွေဟာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ တိုင်း သူပြည်သားတွေကို ဘယ်လိုများ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ မခြား ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်း သမားတွေပဲ။ ထီးဖြူ ကိုဆောင်း၊ ပလ္လင်ပေါ် တင်ပျဉ်ခွေထိုင်၊ ဘောင်းတော်စီးပြီး ဘုရားထူးခံတာက လွဲလို့ အဟိတ်သတ္တ၀ါများနဲ့ သိပ် မကွာလှပါဘူး။
ကုလားပြည်နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ လူတန်းစား ဇာတ်ခွဲခြားမူ လွှမ်းမိုးတဲ့ လူမှုဘ၀ကို ကြီးကြပ်စီမံခဲ့သူတွေပါ။ အ၀တ်အစား အရောင်၊ ခေါင်းပေါင်း ပုဝါ ကစပြီး အိမ်တောင် ဆိုဒ်စုံ ပြဌာန်းချက်တွေ များစွာနဲ့ မလွတ်လပ်တဲ့ ကျွန်လူနေမှုစနစ်ကြီးပါ။ ကျုပ်တို့တွေ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းဘ၀က ဘ၀ရှင်မင်းတြားကြီးဆိုသူများဟာ ဘုရားကြီး တွေတည်၊ နန်းတော်ကြီးတွေ တခုခုပြီးတခုဆောက်၊ သူတို့နန်းဆက်တည်မြဲရေးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာ အစစ်ကို မယုံရင် ဗဒုံ (ခေါ်) ဘိုးတော်ဧကရာဇ် ဘုရားတည် “ဘုရားကြီး” ကို သွားကြည့်ကြပါ။ ပြည်သူတွေ စားစရာမရှိ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ ဘ၀မှာ ဘိုးတော်ဘုရင်က ပြည်သူသွေးချွေးနဲ့ ရင်းလို့ရလာတဲ့ ဥစ္စာနဲ့ ပြည်သူလုပ်အားကို အဓမ္မသုံးပြီး ဘုရားတည်ခဲ့တာပါ။
ဘိုးတော်ဘုရား တယောက်တည်း ဒီလိုကျင့်ကြံခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကတည်းက ကျုပ်တို့ ဗမာ အားလုံး အခက်ကြုံခဲ့တာတွေ အခုခေတ်မှာလည်း ဂယက်ရိုက်တုန်းပါပဲလား။ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေ လက် ထက် ခေတ်အဆက်ဆက်က နိမ့်ကျတဲ့ ဒုတိယတန်းစား လူ့အလွှာအဆင့်မှာ ဆက်ဆံခံခဲ့ရတယ်။ နဖူးကချွေး ခြေမကျမှ ရတဲ့ ဆန်စပါး ကောက်ပဲသီးနှံတွေက်ို အခွန်ကောက်၊ အမြတ်ထုတ်၊ လက်ဝါးကြီးအုပ် သိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်သူနဲ့ မင်းမြှောင်များ မြို့ကြီးသား လူ့ယဉ်ကျေးဆိုသူများက စားတော်ခေါ်ကြ၊ နိုင်ငံထူထောင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာအုပ်ချုပ်သူ၊ ရှမ်းအုပ်ချုပ်သူ၊ ရခိုင်အုပ်ချုပ်သူ၊ မွန်အုပ်ချုပ်သူ အစရှိသဖြင့် လူမျိုးတွေ၊ လူတန်းစားတွေ၊ ခေတ်တွေ ပြောင်းသွားပေမယ့် အကျင့်အကြံ အပြုအမူတွေကတော့ သူမသာ ကိုယ်မသာတွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာ လူထုကြီးတွေကို ဂုံးပိုးစီးပြီး နိဗ္ဗာန်ကို ဖြတ်လမ်းက ရောက်ချင်သူတွေပါ။
ဒီလို ညစ်ပလီသမိုင်းဆိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျုပ်တို့ရဲ့ခြံပေါက်အမျိုးသားရေး ၀ါဒီများအပေါ် သမိုင်းက၀ိကြီး တွေက သတ္တိရှိရှိ ပညာရှင် ကျင့်ဝတ်မသုံးဘဲ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဓမ္ဗဓိဌာန်ကျကျ မရေးကြတဲ့အပြင် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်က မျက်မှန်စိမ်းကြီးတွေ ဆိုဒ်စုံတပ်ပြီး ကလောင်သွေးခဲ့ကြတာ နှစ်တရာကျော်တောင် ရှိလာပြီပဲ။ ခေတ်မီဗမာ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ (၂၀) ရာစုဆန်းကစပြီး ကျုပ်တို့ ခြံပေါက် ရာဇ၀င်ဆရာကြီးများ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ကြရအောင်။
ဦးမေအောင် နဲ့ အဘိဓာန်ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဘဟန်က အစ သွေးအိုင်ထဲမှ မြန်မာ့ဒေါင်း အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး သမိုင်း (၁၇၅၃ - ၁၉၄၈) ရေးသူ ကမ္ဘာကျော် မြန်မာပုံပြောဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင် အလယ်၊ မြန်မာအမျိုးသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း(၁၉၄၀ - ၄၈) ရေးသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်(ကွယ်လွန်) နဲ့ နောက် ဆုံး ခြေရာပျောက်များကို ရှာကြည့်ခြင်း ပုဂ္ဂလိက သမိုင်းရှာပုံတော် ရေးသူ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦး အထိ အားလုံး သော က၀ိကြီးများက ဗမာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဗဟိုပြုတင်ဆက်ထားတဲ့ အုပ်စိုးသူဗမာရေပေါ်ဆီတွေရဲ့သမိုင်းကို မသာ ပေါင်ဒါဖို့တာမျိုး ရေးသားကြတာပါ။
ဒီ ညစ်ပလီ အမျိုးသားရေး သမိုင်းအရဆိုရင် တိုင်းပြု ပြည်ပြု ဗမာမျိုးချစ်ကြီးများ လုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ ပြည်မနဲ့ လူမျိုးစုပြည်နယ်များ ပေါင်းစည်းရေးက အဓိကပေါ့ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ပဲခေါ်ရခေါ်ရ၊ သေနတ်အားကိုးနဲ့ နဖား ကြိုးဆွဲခေါ်ရခေါ်ရဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါကတော့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းမှာ လူလိမ္မာနဲ့ လူမိုက် ကွဲခြားမှုလောက်ပါပဲ။ ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ဗမာကို အလယ်မှာထားပြီး လူနည်းစုလူမျိုးစုတွေက အစွန်အဖျားကနေရမယ့် ဗမာဗဟိုပြု ပြည် ထောင်စုကြီး ထူထောင်ဖို့ပါ။
တကယ်တော့ ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဟာလဲ သြဇာအာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ဗမာလူမျိုး မြို့နေလူတန်းစား ယောက်ျားရေပေါ်ဆီတွေရဲ့သမိုင်းပါ။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီက ညစ်ပလီ အတိတ်ဘ၀ကို ကိုယ့်အမျိုးလို့ဆိုပြီး သာသာထိုးထိုး ရေးခဲ့တဲ့ မျက်မှန်စိမ်း သမိုင်း အဖြစ်ကိုရော၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် အမျိုးသားစိတ်မွှန်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များ ကိုပါ သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေး လွန်ကာလမှာ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းဆိုပြီး နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေး အမျိုးသားသမိုင်း က တကယ်တော့ ဖ ဆ ပ လ နိုင်ငံရေးသမားကြီးများနဲ့ နောက်ပိုင်းကာလ တပ်ထဲက ခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ခေါင်း ဆောင်လတ်များက ဗမာဇာတိမာန် ဇာတိသွေးကြွပြီး အားနည်းတဲ့ လူမျိုးစုဝင်တွေကို ပြည်တွင်းဖြစ် ကိုလိုနီ လက်သစ်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ဖို့၊ ဗိုလ်ကျဖို့ လုပ်တဲ့ ခေတ်သစ်ညစ်ပလီ သမိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဝါဒီ ဗမာနိုင်ငံရေးသမား၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရေပေါ်ဆီ ပညာတတ်ကြီးများအပါအ၀င် အထူးသဖြင့်တော့ ငါးတောင်ဝတ် နိုင်ငံမျက်နှာဖုံး ဂုဏ်သရေမရှိ လူကြီးများက ကျန်တဲ့ ဗမာလူထုလူတန်းစားများနဲ့ လူမျိုးစုငယ်များ အပါအ၀င် ကုမ္မာရီမိန်းမ လူကြီးအားလုံးထက် ငါတို့ ငါးတောင်ဝတ် ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒီများက တမူးသာတယ် ဆိုတဲ့ အဓမ္မ အမြင်နဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး သမိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၄ ဆောင်းရာသီအ၀င်လောက်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ယခင်တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင် တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗမာ့သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်း(၃) ရဲ့ တပ်မှူးကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်မြိုင်(အငြိမ်းစား)ကို ကျုပ် အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့တာ အလျင်းသင့်လို့ တင်ပြပါရစေ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်မြိုင်ဟာ ကွယ်လွန်သူ NLD ဦးကြည်မောင် (ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း နဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် ဟောင်း)နဲ့ အတူ သံမဏိအဖွဲ့မှာ ပါခဲ့ပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးမှာပါခဲ့သူ လူလေးစားခံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော် ခေါင်း ဆောင်ဟောင်းတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့် သတ္တိရှိတဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီးမို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ဗမာအမျိုး သားရေးဝါဒီ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တခြားလူမျိုးစုတွေကို ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ဘွင်းဘွင်းပဲ ပြော သွားခဲ့တာက ဒီလိုပါ။
၁၉၅၀ အစောပိုင်းကတည်းက ဗထူးတပ်မြို့ကွဲပြီး ရှမ်းပြည်မှာ သွားတည်တာ ရိုးရိုး သားသားမှ မဟုတ်ဘဲ၊ ရှမ်းတွေ ၁၉၅၈ ရောက်ရင် ခွဲထွက်မှာကို ဗျူဟာအရ ဟန့်တားဖို့နဲ့ စစ်ရေး အရ ခြေခွင်းဖို့ ဗထူးမြို့ကို စစ်အခြေခံ စခန်းအနေနဲ့ ဆောက်ပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်တာပါ။ DSA စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့မွေးဖွားရာလို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဖ ဆ ပ လ ခေတ်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များကလည်း ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ ဗိုလ်မောင်မောင်တို့နဲ့ နှစ်ပေါက်တပေါက် ရိုက်ပြီး ဒီစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေကို မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး နေခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဦးအောင်ဆန်းက ဗမာတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထိုး လက်ခံခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကို အိမ်သာသုံးစက္ကူလောက်တောင် တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ သဘောရောက်ပါ တယ်။ ဒါကတော့ ဗမာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဗမာအမျိုးသားရေး စစ်ဝါဒီတွေ ညစ်ပလီ ညစ်ပလစ်လုပ်ခဲ့ ကြတဲ့ သမိုင်းပုပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပါ။
ကျုပ်တို့ ဗမာအမျိုးသားရေး စစ်ဝါဒီ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေက တခါသေဖူးလို့ ပျဉ်းဖိုး သိနေပြီး မယုံကြတာ ဘယ်သူ့အပြစ်ပါလဲ။
အခုလဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမူတွေကို ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေလုပ်ပြီး ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး မှောက်ချီလှန်ချီ လုပ်နေကြတော့ “ငြိမ်း” အဖွဲ့တွေခဗျာ အရူးမ လင်လုပ်တဲ့ဘ၀ကို ရောက်မှန်း မသိရောက်နေ တော့တာပေါ့။ မင်းတို့ဗမာတွေ “ညစ်ပလီ”တွေဆိုပြီး ပြောရင်လဲ ခေါင်မိုးက မလုံတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ခေါင်းငုံ့ခံရ မှာပါ။ ကိုယ့်လူတွေကမှ မရိုးသားကြတာကိုး။
အဲဒီ ၁၉၄၇ ခု ဖွား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အားမနာတမ်း ဝေဖန်ရရင်တော့ ဖက်ဒရယ် (သို့) ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ နာမည်ခံပါ။ တကယ်ကြတော့ ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒီ နောင်တော်ကြီးများက လူမျိုးစုဝင် ညီငယ်တွေကို ဆရာလုပ် ဗိုလ်ကျ လူပါးဝဖို့ကို ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အသွင် ဆောင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ၀တ်လုံတော်ရ ဦးရဲထွန်း ဖခင်ကြီး ဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်သော မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး တရား သူကြီးချုပ် ကွန်လွန်သူ ဦးချန်ထွန်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သုံးသပ်သွားတဲ့ ဥပဒေအမြင်ပါ။ ကျုပ် လံကြုတ်လုပ်ပြီး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထားတော့ တခြား ဗမာမဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားတွေဘက် လှည့်ကြရအောင်။
ဗမာတွေ လူမျိုးကြီး သမိုင်းကို မျက်မှန်စိမ်း ကပ်ကြည့်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးကို မောင်ပိုင်စီးဖို့ လုပ်ပြီဆိုတော့ လူမျိုးစု အသီးသီကလည်း အားကျမခံ ဘူးပေါ့ဗျာ။ သူတို့တွေလည်း မျက်မှန်ဝါ ၊ စိမ်း၊ နီ၊ ပြာ ဆိုဒ်စုံတပ် ကိုယ့် လူမျိုးစုသမိုင်းကို ဇောင်းပေးရေး ဒါနဲ့ပဲ လူမျိုးရေး ပေါင်းစုံ ရောင်စုံမျက်မှန်တပ်ပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကတည်းက ခုဆို နှစ် (၆၀) ကျော်လာခဲ့ပြီ။
ခွေးသေ၊ ၀က်သေ သေတဲ့သူ၊ အသတ်ခံရတဲ့သူ၊ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့သူ၊ ကွဲတဲ့သူ၊ ပြဲတဲ့သူ၊ ဘ၀ပျက်တဲ့သူ များလွန်းလို့ အသုဘ စာရင်းကိုင်တွေတောင် မျက်ဖြူစိုက်နေတဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေးသမိုင်း။
လူမျိုးရေး ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်ဆိုတာ တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့ဗျာ။ ဒီ လူမျိုးရေး စစ်ရေးသွေးကြွတာတွေ များလာတော့ ကျုပ်တို့အားလုံး ဘုရားဆုပန်ဆိုတဲ့ဘ၀ကနေ အမြီးပေါက်ပြီး တရားပျောက်တဲ့ဘ၀။ လူထုက စားဝတ်နေရေး ရုန်းကန်ရလို့ ကျောင်းပညာနဲ့ ဗဟုသုတ ကောင်းကောင်း မရှိနိုင်တဲ့ ဘ၀။
ပါရဂူဘွဲ့ရ က၀ိကြီးများ ကိုယ်တိုင်က မျက်မှန်အရောင်စုံတပ်ပြီး ရခိုင်ပြည်သည် ရခိုင်များအတွက်ဆိုပြီး သွေး စကားတွေ ပြောပြီး ခေတ်နောက်ပြန်စွဲ ညစ်ပလီသမိုင်းထဲမှဘဲ ယက်ကန်ယက်ကန် ပေါလောပေါလာ အဆင့် ကနေ တက်မလာကြတာကို ၀မ်းနည်းစွာ မြင်ရ ကြားရ ဖတ်ရပါတယ်။ ဥပမာ ပြရရင် ဧရာဝတီမှာ ပါသွားတဲ့ ဒေါက်တာ အေးကျော် ရဲ့ အင်တာဗျူး။ ကေအန်ယူ ခေါ် ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ကြီးရဲ့ သင်ရိုးတွေမှာလည်း ဗမာတွေကို ကလော်တုတ်အောင် ဇောင်းပေးရေးထားတာ အားလုံးက သိကြပါတယ်။ ဒီလူမျိုးရေး အခြေခံ သွေးစော်နံတဲ့ သမိုင်းအမြင်နဲ့ လူမူနိုင်ငံရေး သဘောထား အကျင့်အကြံတွေဟာ ကျူပ်တို့ မဟာ ဗမာတွေနဲ့ “မဟာလူနည်းစု” ၀င်တွေကြားက ပြဿနာတင် မဟုတ်ပါဘူး။
ဗမာတွေကို မဟာဗမာတွေ ဆိုပြီး ကလော်တုတ်ပြီး ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ရခိုင် စတဲ့ မဟာလူနည်းစုဝင် များက ၄င်းတို့ထဲမှာ ကြားညပ်နေတဲ့ လူမျိုးစု အငယ် ဘုစု ခရု မှန်သမျှကို မဟာလူနည်းစု ၀ါဒကိုင်စွဲပြီး ညစ် ကျယ်ကျယ်လုပ်ပြ ဗိုလ်ကျ လုပ်တာ မမြင်ချင် မကြားချင်လို့ မရတဲ့ အနေအထား၊ သွေးကိုပဲ အခြေခံခံ၊ ဒေသ အရ အသံထွက် ကွဲပြားတာကိုပဲ ကြည့်ကြည့် ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမတူတာဘဲ အဓိကထားထား ကျုပ်တို့အားလုံး တမျိုးနဲ့ တမျိုး တဖွဲ့နဲ့ တဖွဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး မှိုင်းတွေမိပြီး ညစ်ပလစ်၊ ညစ်ပလီ နိုင်ငံရေး လုပ်နေကျ တာပဲဗျာ။
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မကြည့်ပါနဲ့၊ ရခိုင်က မဟာမေဒင် ကုလားတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ကြံ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော် ကြီးက အစဉ်အလာအရ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ KNU အဖွဲ့ဝင်တွေကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး လိုက်သတ်၊ ဂျိန်းဖောတွေ က လီဆူးတွေကို ဗိုလ်ကျ၊ ဒါတွေပြောမယ်ဆိုရင် ပြောမဆုံးပေါင် တော သုံးထောင် ဆိုတာလိုမျိုး။
လက်ရှိ စစ်ပါတီများ ချယ်လှယ်တဲ့ န အ ဖ အစိုးရ ကြည့်ပြန်တော့ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ “သွေး” ပြဿနာထုကြီးကို ပေါ့သေးသေး နိုင်ငံရေး သူငယ်နာရယ်လိုများ သဘောထားသလား မသိပါဘူး။ လူမျိုးရေးကိစ္စကို “နယ်ခြားစောင့် တပ်”ရဲ့ စစ်သားစုဆောင်းရေးပြဿနာ သဘောလောက်ပဲ ဒီမောင်တွေ သဘောထားပုံရတယ်။
NLD က ဒီမိုကရေစီ ထုတ်ဆေး မန်းဆေးနဲ့ လူမျိုးရေးကို ကိုင်မယ်၊ ကုမယ်။ န အ ဖ စစ်ပါတီကြီးများက M.1 M.2 M.3 ခေါ် မောင်းပြန် ဆေးကြိမ်လုံးတွေနဲ့ လူမျိုးရေး အမင်းထုတ်မဲ့ ဟန်။ ဒါကတော့ တိုင်းပြည်ကြမ္မာကို သုံးသပ်ကြည့်တာပါ။ ဖြစ်နေတာက နာတာရှည် ကင်ဆာ၊ ကုမဲ့သူတွေက စစ် ဆရာ ကြီး တွေ။ လူမျိုးစု၊ လူမျိုးကြီး ပြဿနာဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ါဒရေးရာပြဿနာပဲ ဆိုပြီး ကန့်ကြည့်လို့ မရပါဘူး။
ဒီ အပေါ်ယံ သွေး စကားပြောတာကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် လူ့အလွှာတွေ၊ လူမျိုးအစုတွေ ထဲမှာ အနိုင်ကျင့်မူ၊ စီးပွားရေး ကုပ်သွေးစုတ်မူတွေ အဖုံဖုံတွေ့ရမှာပါ။
“ကမ္ဘာမကြေ”ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ဗမာတွေ အားလုံး ရုပ်ရှင်ရုံထဲ မတ်တပ်ထရပ် လောက်အောင် ခေါက် ရိုးကျိုးတဲ့ အထိ အမျိုးသားရေး မျက်မှန်ရောင်စုံတပ်ခံထားရတော့ ဗမာအချင်းချင်း၊ ရှမ်းအချင်းချင်း၊ ကရင် နဲ့ ကချင် အချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်တို့တမြေတည်းနေ တပြည်ထောင်စုသားတွေ မုဒိတာ ပွားကြမယ်လို့ ထင်ပါ သလား။ သတိမျက်မှန်လေးကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။ ဟင်္သာကိုးသောင်း ဇာတ်တူသားစား ဇာတ်ခင်းနေတာ မမြင် ချင် အဆုံး။
ရခိုင်ကမ်းလွန်နဲ့ ကန်းခြေမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူး၊ ရေနက်သင်္ဘောဆိပ်တွေ ဆောက်တာ ဘယ်သူ့အမိန့် နဲ့ ဘယ်သူ့အကျိုးအတွက်လဲ။ မွန်တွေရဲ့ဒေသ မုတ္တမ ပင်လယ် ကွေ့မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးပြီး ရလာတဲ့ ဘဏ္ဍာတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ၊ ကရင်တွေရဲ့ ကော်သူလေးပြည်မှာ ကျွန်းနဲ့ တခြား သစ် မာတွေ ခုတ်ရောင်းတာ ဘယ်သူတွေ အမြတ်ရသလဲ။ ဒေသခံ ပြည်သူတွေလား။ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ သံနဲ့ ယူရေ နီယမ် ထွက်တာ တူးတာက ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်နီဒေသတွေများတယ်။ ဒါတွေထုတ်ရောင်းတော့ အဲဒီနယ်တွေက ပြည်သူတွေ ဘာတွေများ အကျိုးအမြတ်ရပါသလဲ။ ဒီအမြတ်တွေ၊ သယံဇာတတွေ ဘယ်နားရောက်သွားသလဲ။ လို့ မေးကြည့်ပါဦး။
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာ လူသန်း ၅၀ ကျော်ရှိတာ ဘယ်လူတန်းစားက ဆန်စပါး၊ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ပေးပြီး အဲဒီ လူတန်းစားရော စားဝတ်နေရေး ရုံးကန်ရတဲ့ဘ၀ကလွတ်ဖို့ အနေအထား ရှိပါသလား။ တံငါသည် တွေ၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ ထမင်းရည်ကို ပုလင်းနဲ့ ၀ယ်သောက်ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး ရဲ့ ပါမစ်အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ပျက်ကြီးကို ကြိုးကိုင်ပြီး ပထွေးသေလို့ အမွေရတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးလို လက်ဝါး ကြီးအုပ် အမြတ်ထုတ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘယ်လူတန်းစား ပါလဲ၊ တို့ တိုင်းဌာနေလို့ ဆိုတဲ့ ရွှေဝါပြည် ကြီး မှာ တို့တာဝန်ကြီး သုံးပါးဆိုတာ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ ရွှေဉာဏ်တော်စူး ရောက်မှုပါလဲ။
ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးဖို့၊ ဖြေနိုင်ဖို့ ပါရဂူဘွဲ့လည်း မလိုဘူး။ ရေပေါ်ဆီ နိုင်ငံရေးသမား၊ တိုင်းပြုပြည်ပြု သမားတွေ ဖြစ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဘယ်ဆုရမှ ဘွဲ့ ရမှ အဖြေမှန် ထွက်နိုင်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓမ္မာစရိယလည်း အောင်စရာ မလိုပါဘူး။
သာမန်ပြည်သူ အခြေခံလူတန်းစားကအစ ရွှေကိုင်းမျက်မှန်နဲ့ ခါတော်မီ ကိုယ်တော်လေးတွေ အဆုံး ဖြေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပဟေဠိ တွေပါ။
ဗမာတွေ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အားလုံးပါ အသည်းနာဖို့ ကောင်းတာက လွတ်လပ်ရေးရတာ နှစ် (၆၀) ကျော်ပါပြီ။ မျက်မှောက် တို့တိုင်းဌာနီကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ လူမျိုးရေး အနေအထားတွေ ဟာ ကိုလိုနီ နှစ်ထပ်ကွမ်း အနေအထားပါ။
လူမျိုးစုတွေဘက်က ကြည့်ရင် မျက်မှောက်မြန်မာပြည်ကြီးဟာ မဟာဗမာ စစ်ဝါဒီ တွေရဲ့ လူမျိုးရေး ဗိုလ်ကျမူ၊ စီးပွားရေး ကုပ်သွေးစုတ်မူနဲ့ နယ်ချဲ့သိမ်းပိုက်မူ ဘ၀မှာ နေရတယ်လို့ ပြောလာရင် မှန်တယ်လို့ပဲ ၀န်ခံရမှာပါ။
မျက်မှောက် တို့တိုင်းဌာနီကြီးက သူတို့ အတွက်တော့“လူမျိုးရေး ကိုလိုနီစနစ်”ပါပဲ။ ဗမာအရပ်သား ပြည်သူတွေ (စီးပွားရေးသမား၊ ပညာရှင်၊ အနုပညာသမား၊ လက်လုပ်လက်စားနဲ့ တောင်သူလယ်သမား၊ စက်ရုံ အလုပ်သမား၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအပါအ၀င် ဘုန်းတော်ကြီး၊ သီလရှင်တွေ အားလုံး) ဘက်က ကြည့်ပြန်တော့ သေနတ် အားကိုး နသားပါးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ ပြည်တွင်းဖျက် ကိုလိုနီ ယန္တရားထဲမှာ ပြားနေအောင် ၀ပ်နေရတဲ့ “စစ်ကိုလိုနီ”စနစ်။
ဒါကြောင့် တို့တိုင်းဌာနေကြီးကို “ကိုလိုနီ နှစ်ထပ်ကွမ်း” လို့ တင်စားလိုက်တာပါ။ နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး လူကြားကောင်းအောင် အော်ပြီး ၂၀၁၀ ရွှေးချယ်ပွဲကနေ ဒီ ပြည်ဖျက် “ကိုလိုနီနှစ်ထပ်ကွမ်း” ကို စင်တင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်တန်းဆရာဖေများ သက်ရှိထင်ရှားရှိဦးမယ် ဆိုရင် “ညစ်ပလီ”များပေပဲ ဆိုပြီး ကလောင်နဲ့ တွယ်လိုက်ဦး မယ် ထင်ပါတယ်။
ပညာရှင် တယောက်အနေနဲ့ရော ဗမာတယောက်အနေနဲ့ပါ အော့နှလုံးနာမိတာကတော့ အရပ်သား ပညာရှင် က၀ိကြီးများက ကျုပ်တို့ လူမျိုးချင်းချင်း ကိုလိုနီစနစ်မှာ အုပ်ချုပ်မယ့် စစ်ဝါဒီဝင်တွေကို မျိုးချစ်ကြီးများရယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ရေးကြ၊ သုံးသပ်ကြ၊ ဟောပြောကြနဲ့ ပညာရှင် သိက္ခာမစောင့် လုပ်နေကြတာပါပဲ။
အဲဒီ က၀ိကြီးတွေ နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ဆရာတွေ ရေး၊ ပြော၊ ဟောတာတွေက စစ်ဝါဒီ တွေရဲ့လက်အောက်မှာ နင်းပြားကျွန်နှစ်ထပ်ကွမ်း ပြည်သူလူထု တိုင်းရင်းသားအစုအားလုံးကို စော်ကားမော်ကား လုပ်တာပါပဲ။
လူလူချင်း လူပါးဝပြီး သွေးစုတ်ကြ၊ အနိုင်ကျင့် ကြနဲ့ စခဲ့တဲ့ ပဒေသရာဇ် စနစ်ဆိုးတွေရဲ့ ကြားက ဖြတ်သန်းလာ ခဲ့တဲ့ မြန်မာလက်နက်နိုင်ငံကြီးတွေကို ပြည်ထောင်စုရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်အသွင် လံကြုတ် လုပ်ကြံရေးထားတဲ့ မုသာဝါဒ အမျိုးသားသမိုင်းကို ကျုပ်တို့ ဇီဝိန်ဖြုတ်ဖို့ လိုပြီ။
“နိုင်ငံတော်သည် အမိ၊ နိုင်ငံတော်သည် အဖ” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ဝါဒီ များ၊ မကျက်တကျက် အမျိုးသားဝါဒီ ပညာတတ်လူတန်းစားများ က၀ိကြီးများ က ကျုပ်တို့ လူထုကြီးကို ဆက်ပြီး သမိုင်းမျက်မှန်စိမ်းတပ်ပေးပြီး မြက်ကျွေးတာကို အဓိက ပြဿနာကြီး တရပ်အနေနဲ့ ရှုမြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေ၊ လူမျိုးစုတွေဟာ ဒီ“သွေး”၀ါဒီတွေကို ကျော်ပြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကို ထူထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ သမိုင်းအပင်းသွင်းတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားလူမျိုးစု မျက်မှန်စိမ်း တပ်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား လက်မခံကြဖို့ လိုပါတယ်။
စာရေးသူ၏ “ ကျုပ် ” အခေါ်အဝေါ်ပေါ် ရှင်းလင်းချက်
ဒီဆောင်းပါးမှာ အညာဆန်ဆန် မိမိကိုယ်မိမိ “ကျုပ်” လို့ ရည်ညွန်း သုံးစွဲထားတာကို လူယဉ်ကျေး အရပ်က မန္တလေးသား အပြောအဆို ရိုင်းပါဘိလို့ မယူဆစေလိုပါ။ ဗမာပြည်သူတွေကို ခေတ်အဆက်ဆက်က နာမ်နှိမ်ပြီး စော်စော်ကားကား “င” နဲ့ တပ်ခေါ်၊ ကျွန်တော်မျိုး ကျေးတော်မျိုး ဆိုပြီး၊ လက်အုပ်ချီခိုင်း၊ ဒူးထောက် ခိုင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်သူများကတော့ ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေးတဲ့ မင်းမျိုးမင်းဆွေတွေဆိုပြီး လူပေါ်လူစော် လုပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တမင်ရှုတ်ချတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်အစား “ကျုပ်”လို့ သုံးနှုန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုင်းတယ်လို့ ကောက်ချက် လိုသူများကိုတော့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သူများမှာ “အရိုင်း”လို့ သမုတ်ခံ၊ တဇောက်ကန်းလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုအောင်ဆန်းနဲ့ လူမိုက်များသာ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာ သတိမူကြ စေချင်ပါကြောင်း။
ဒေါက်တာဇာနည်သည် မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (Free Burma Coalition) ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ နိုင်ငံရေးသိပံ္ပနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်တွင် သုတေသီ ပညာရှင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ စကားစစ်ထိုးပွဲများကိုဖတ်ပြီးတော့ သဘောကျတယ်၊
written by mmghlingmoe, November 18, 2009
ဆောင်းပါးကတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် ။ စဉ်းစားစရာတွေ (ဘာတဲ့ နိုင်ငံရေး လောကုတ္တရာစကားတဲ့ ) နိုင်ငံရေးမောဟ ပွားစရာတွေ ဘဲ ။ ဟိုးရှေးရှေးက တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဘုရင်တွေလည်း မနေသာ လွပ်လပ်ရေးလွန်ခေတ် နိုင်ငံ့အကြပ်တည်း ဖြေရှင်းသူများလည်း အတ္တဆန်။ အင်း လက်ရှိ နိုင်ငံ့အရေးကို တကယ်ကြိုးပမ်းသူများက ထောင်နန်းစံ ။အင်း.... ကိုယ့်အထင်သာ ဆွဲယူနေတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်မဲ့ မုသာဝါဒ မှိုင်းတိုက်ခံဘေးမှ ကင်းဝေးပြီး ပြည်ထောင်စုသားတို ၏တိုင်းရင်းသားအရေးကို ငြိမ်ချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေ.....့ ဆက်လက့်သွေးစည်းနိုင်ပါစေ...
written by Burmese, November 18, 2009
ဒီဆောင်းပါး ဧရာဝတီမှာ တော်တော်ပွဲဆူသွားတာပဲ။ ရေးလိုက်ကြတဲ့ comment တွေ... ဟားဟားဟား....။ တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသားဘက်က ‘ကကြီးတဲ့၊ ဗမာဘက်က ယပက်လက်တဲ့..။ ပြောချင်တယ်။ ကိုဇာနည် ခင်ဗျားသာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရင် ဒီထက်တောင်ပိုဆိုးဦးမယ်။ အာဏာလက်ဝယ်မရှိပဲနဲ့ ကို သွေးခွဲတတ်တယ်။ တတ်လည်း တတ်နိုင်ပါ့ဗျာ။ ဘာလဲ စစ်အစိုးရက ရေးခိုင်းတာလား။
written by Terrorist, November 18, 2009
ဗမာလူမျိုးစစ်စစ် ၁၀၀% ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားတာကြာပါပြီ
အဲ့တော့ ဗမာကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာအရူးတွေဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိနအဖတပ်ထဲမှာ အများစုက ဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါ
အကောင်းဆုံးက မြန်မာပြည်ပေါ်ကို အနုမြူဗုံးကျဲချလိုက်လို့ အားလုံးသေသွားရင်
written by အမည်မဖော်ပြလိုသူ-, November 18, 2009
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဇာနည်။ ကျွန်တော့အမြင်မှာတော့ ဒီလိုရေးဒါကောင်းပါတယ်။ လူတွေက အမှားကို မမြင်တတ်ဒါလား၊ မြင်ပြီး မမြင်ယောင် ဆောင်နေဒါတွေလားတော့ မသိပါဘူး။ လူဆိုဒါ အမှားကို မြင်တတ်မှ အမှန်ဘက်ကို ဦးလှည့်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တတွေရဲ့ ရင်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ သံသယတွေကင်းရှင်းအောင် အမှား အမှန်ကိုခွဲခြားမြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အပြန်အလှန်လေးစား ယုံကြည်မှုဆိုဒါက အရေးကြီးပါတယ်။ အတိတ်မှာမှားခဲ့ ဒါကို ကြည့်ပြီးဆက်မှားနေလို့ မရပါဘူး။ ပြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ Ethnic Nationalism and patriotism နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေတယ်။ Civic Nationalism ဆိုဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Civic Nationalism ကကျတော့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာနေနေတဲ့ လူတန်းစားအားလုံးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ မျှဝေပေးပါတယ်။ အဲဒါမဟုတ်တော့ ခက်ဒါပေါ့။ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်းတစ်ခုက Ethnic Nationalism as an obstacle in Human rights ထဲမှာလည်းပဲ တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ နေရတဲ့ သာဓကတွေကို ရည်ညွန်းထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါပါတယ်။ ဒါတွေကို တချို့ လူတွေမကြိုက်လို့ ကျွန်တော့ စာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဖတ်ခွင့်မပေးပါဘူး။
ဒီဆောင်းပါးက တိုင်းရင်းသားအားလုံး အပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှုကို ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ ဖတ်ခွင့်ရမလား။ ဖတ်ခွင့်ရရင်လည်း နားလည်မှုရော့ ရှိပါ့မလား။ အလျော့ပေးမလား။ စစ်တပ်ထဲမှာ ဗမာစစ်စစ်တွေများပေမယ့်လည်း သူတို့ မူဝါဒါနဲ့ ဆန်ကျင့်တဲ့ ဘယ်သူမဆို ဗမာ ဆိုလည်း နှိပ့်ကွပ်ဒါပါပဲ။
တည့်တည့်ပြောတတ်တဲ့ လူကို အများက သိပ်သဘောမကျပါဘူး။
wah ha ha ha
written by d-chit thu, November 18, 2009
I maburmese and i never think of myself like that..
Comments are better than the Article..
and Never Ever Compare wit GENERAL AUNG SAN
Interesting to read the comments
written by Bumtsaw, November 18, 2009
It is very interesting to read comments of the readers. The comments have reflected the mentality and attitude of Burman majority toward ethnic groups. Some do not even seem to have basic understanding of Ethnic equality. They argued that they have friends from ethnic Shan, Karen, Kachin,etc... It is important to understand that having friends from the oppressed ethnic groups and the concept of having equality among different ethnic groups in Burma isafar cry. Look back the history in the colonial period, many Burman educated like U Nu, U Ba Maw must have had many good English friends. But they joined the movements to get independence in fighting against the British because they knew that they did not have equality and freedom. Hope this would help you understand the distinction between having friends from non-Burman groups and their fight for freedom and equality.
Some made irrelevant points. For example, Dr.zarni's brother sought asylum in Australia and has gone nut. What is the point here? His brother’s case is nothing to do with this article. It is totally irrelevant. Some pointed out that Dr.Zarni is just makingaproblem rather than findingasolution. They do not seem to understand the intention of this article and intellectualism. The intention of this article is to reveal the wrongdoings of Burman leaders and to learn lessons from them. You can argue if the facts he mentioned are inaccurate.
Some commented that even though the miliatry regime has been opperessing the ethinic groups, there are many good Burmans. All Burmans should not be seen as the oppressor. They do not want to be seen as burman regime. The fact that there are many good Burmans is true. We have to distinguish between the good and the bad. But, I here want to point out that since the problem in our country isaracial and political problems derived from the State policy. I think , ethnic groups deserve apology from the Burmans. Why? Look at what German government did to Jews in the Second World War. Hitler killed millions of Jews. There were many good Germans who opposed Hitler and his Nazi party. But , new German government apologized the jews and gave compensations. This should that they as Germans are responsible for what wrongdoings of their evil leaders.We have to learn lessons from this example. It is obvious that there are many good Burmans. But as ethnic discrimination has derived from the Burman government’s policy, individual Burman, should also acknowledge mistakes of its Burman leaders. Burman must have courage to face the Truth and learn lessons from the past. If I wereaBurman , I would apologize ethnic groups and try to win their trusts.
Some think, Dr.Zarni, asaBurman, should not criticize its fellow Burmans ethnic. He isascholar, who is supposed to speak the truth. If he does not do so, he will lose his credibility. I would like to recommend you all to read Empire:How Britain Made the Modern World by Niail Ferguson. The author,asaBritish he revealed the truth about British empire.
We should welcome Burmese intellectuals who dare to criticize the wrong systems implemented by political leaders, scholars, business people, etc... We need to change our racist and chauvinist attitude based on race, sexual orientation and religions for peaceful co-existence. We should not just get stuck in this rubbish chauvinism.
Now is the time to move forward to the next phase of history. Otherwise, we all, Burmans or non-Burman, will be left behind in this highly competitive world.
တိုင်းရင်းသားလေးရဲ� �� အတွေ့ကြုံ
written by whitepeacock, November 18, 2009
ကျနော်က တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တယောက်ပါ။ အိမ်သုံး စကားက တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား။ အထူးသဖြင့် အဘိုး ဘွား တွေနဲ့ ပြောဆိုတဲ့ ခါတိုင်းရင်းသား စကားဖြင့်ဆက်သွယ်ရပါတယ်။ ဘိုးဘွား နှင့် ဆွေမျိုးထဲ ၅၀ထက် သက်ကြီးသူတွေ ဗမာစကား လိတ်ပတ်မလည်၊မပြောတတ် မြေးအရွယ် ကျနော်နှင့်ရွယ်တူများ တိုင်းရင်သားစကား နားလည်သော်လည်းကောင်းစွာ မပြောနိုင်။ မိဘများက ဗမာနှင့်တိုင်းရင်းသား ဘာသာ နှစ်မျိုးလုံးကျွမ်းကျင်သည်။
ကျနော်အမြင် ပြောရရင် "လူမျိူးကြီးဝါဒစစ်စစ်" ဗမာ တိုင်းရင်းသားများကြားတွင်မရှိပါ။ ကျနော်က ဗမာနှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအား ခွဲခြားမှူမရှိသလို၊ ၎င်းတို့လည်း ကျနော်ပေါ် ခွဲခြားခြင်းမရှိဘူး။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှူပုံစံ ညံဖျင်းမှူကြောင့် တိုင်းရင်းသားခွင့်ရေးတချို့ဆုံရှူံးကာ လူမျိုးကြီးဝါဒဟု နားလည်မှူ လွဲစရာတွေ ရှိသည်။ ဥပမာ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူ တချို့ ရုံးဂတ်ရောက်ပြီးဆိုလျှင် ဗမာစကား မကျွမ်းကျင်၍ ကျနော် မိဘများအား ကူညီတောင်း ရသည်။ ကျနော်၏ ဘိုးဘွား ဇာတိဖြစ်သော နေရာသည် မြို့နယ် အဆင့်ရှိသော်လည်း အမဲရောင်နယ်မြေ အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ဗမာစကားမကျွမ်းကျင်၊ လူရည်မလည်လျှင် မှတ်ပုံတင်မရ။
တိုင်းရင်းသားလူထုအားလုံး၏ အကျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်သော အစိုးရတရပ် ရှိလျှင်အားလုံးပြေလည်နိုင်သည်။ ထိုမှသာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆုံရှူံးနေသောခွင့်ရေး (Language, Culture, History) လွတ်လပ်စွာ တောင်းဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇င့်ကျက်မှု နဲ. ပြည်.၀မှု ၇ှိကြ၇ဲ.လား
written by မောင်ကြီး, November 17, 2009
ဗမာကို ချစ်တဲ့ တိုင်း၇င်းသား တွေ၇ဲ. အချစ်တွေ ပိုမလျော.ပါ၊
ဗမာကိုမချစ်မမုန်းတဲ. တိုင်း၇င်းသား တွေ မချစ်မမုန်း နေမြဲပါပဲ၊
ဗမာကို မုန်းတဲ. တိုင်း၇င်းသား တွေ အတွက်တော့ စဉ်းစား စ၇ာ တခုတိုးလာပါတယ်၊
ဘာလဲဆိုတော့ ဒေါက်တာ ဇာနည် လို ဗမာလည်း ၇ှိပါသေး လား ဆို ပြီး
ဒီဆောင်းပါးကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် မှု ကို မထိခိုက်ပါဘူး။
အတ္တအ၇င်းခံ ပြည်ထောင်စု ကို အသက်သွင်းချင်သူများ အတွက်တော့
ဒီဆောင်းပါး ဟာ“ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ” နဲ. “ ပါးလှည်.နား၇ိုက် ပြည်ထောင်စု ”အကြား ခွဲခြား ပေးတဲ့ ဆောင်းပါး ဆို၇င်တော့ မမှားပါဘူး။
တိုင်း၇င်းသားများကိုသွေး၇င်းများမို.ချစ် ၇ပါသည် ဆိုသောေ၇ာင်း၇င်းများ အသင်တို.အတွက်ဘာမှပူစ၇ာမ၇ှိပါ။
Please check out the following resources before continuing your debate
written by Historicical Meterialism, November 17, 2009
For those of you who are interested to study formation of modern nation states, the rise of nationalism and ethnocentricism in Burma and other countries, please check out the following resources. Havingalively debates and sharing different and diverse ideas are good habits for democracy, however I wish Burmese people to study more about our own history and other’s in critical and analytical perspectives.
The Myths of Panglong (PowerPoint slides)
The Myths of Panglong (Paper)
Siam Mapped A History of the Geo-Body ofaNation
The Construction of Nationhood Ethnicity, Religion and Nationalism
Burmese Political Values
Nationalism as Political Paranoia in Burma
The Myth of the Lazy Native’
Race and Multiculturalism in Malaysia and Singapore
Imagining ‘Burma’ A Historical Overview
solution or problem
written by myo, November 17, 2009
people are waiting for solution, but this article bring problems.There are Problems more than enough for mmr people.We should better bring good solution instead of problems.I think ,The main weakness of mmr people (all races )is not less enough jealousy if compare with developed country people. sorry for saying this. But, now mmr people start trying to help each other in other country .
written by ငတုံး, November 17, 2009
You said "Nor NLD leader Daw Su kyi ever seem to be aware of the problem (or knowingly)". By seeing that I understand clearly that u don't know about Daw Aung San Suu Kyi very well. That's the big problem with some of people in our country. They don't dare to believe the right leader. Daw Aung San Suu Kyi is the first ever leader in our history who willingly taking care of the rights of different ethnicities of the country; also knowing the importance of it. I suggest you to explore her speeches in the internet. Thanks.
ခုလိုပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောဒါ ကျေးဇူးတင်တယ် ဒေါက်တာ ဇာနည်
written by ဘွဲ့ သွေးနီ, November 17, 2009
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ဗမာအမျိူးသားတချိူ့ အော်နေပေမယ့် တကယ့် တိုင်းရင်းသားအရေး ဆိုရင် ဆိတ်ငြိမ်နေပြီး လက်ရှောင်နေကြဒါပါ။ ဗမာ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေကြားမှာ မဟာစိတ်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုဒါ နယ်စပ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပိုပြီး သိမြင်လာခဲ့ဒါပါ။ ခုလို ဒေါက်တာဇာနည် တစ်ယောက် အရှိကို အရှိ အတိုင်း ရေးချပြဒါ တိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့အမှန်တရားကို လက်ခံတဲ့ ဗမာအမျိူးသား အားလုံး ကြိုဆိုကြမှာပါ။
အစားမှားသွားပြီ....., Low-rated comment [Show]
written by Truth, November 17, 2009
ခုနေခါကြ တော့လည်း နိုင်ငံရေး အကြ ည်တော်ဆို က်တော်မူနေကြတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ တရုတ် တို့ရဲ့ အကောင်းကိုယ်ွင်းစိတ်ထားများကိုလဲ တစ်ဆိတ် လောက် ရသစာတမ်းလေးေ ရးပါ ဦးလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဖစ်မှ ဖစ်ရ ပလေကွယ်
written by ဇော်ဇော်, November 17, 2009
ရှေးတုန်းက ဒို့ဗမာ သာကီမျိုးတွေက ငတုံးတွေဆိုတော့ ဘုရင်ကို ဘုရားထူးတာပေါ့။
ဒါနဲ့....... ဗြိတိန်မှာ အလုပ် မလုပ်ဘဲ ရီးတီးရားတား လုပ်နေတဲ့ ဘုရင်မဆိုတဲ့ အဘွားကြီးကို ကိုဇာနည်တို့က ဒီနေ့ခေတ်ကြီး အထိ အခွန်အတုတ် ဆက်သနေတာကရောဗျ။ ဘယ်လိုကြီးတုန်း။ အင်္ဂလိပ်တွေ ခုထိ ကျွန်စိတ် မပျောက်သေး ဘူးဗျနော့....။ အင်း.......ကိုဇာနည်ရော အတူတူပေါ့နော်။
ပြီးတော့ အင်းဂလိပ်ဆိုတဲ့ မောင်တွေက ခုထိသူများကို ကိုလိုနီ လုပ်ထားတုန်း။ ထပ်ပြီးတော့လည်း ဟိုကျူးကျော် ဒီကျူးကျော် လုပ်နေတုန်းနော်။ ဟဲ...ဟဲ... သဘောတူတယ် မဟုတ်လား။
written by BaMaPyiThar, November 17, 2009
Referring to Dr. Zar Ni's article in which I've got mixed feelings.
First, I very much like his idealogy over burmese people misconcept about the nationalism, indeed, he highlighted how everyone being brain stromed since childhood that I never thought before, and its quite correct to me and I feel like we all are framed, deliberated to hate the western countries who colonised Burma and still accusing for any negative consequences which is still printing in all text books , in all media channels daily basis. Shame.. it was on the past and why must we remember those things forever. Can't we fixed ourself or don't we have enough talent to fix it.
However, I'm not agree with his second part of accusing all Burmese not treating well over others tribes in which I thought he losts the plot. Asaburmese origin, I'm sure no one burmese hate other people from different tribes. If we look at the history, indeed we do had some clashes but not like other countries in Africa but all xenophobia incidents over the world have been deliberated by bad goverment. Please remember.
But anyhow he giving something that I like his comment.
written by Tikyi Min Khant Naing, November 17, 2009
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာဖို့ အတွက်က တောင်းယူ တိုက်ယူလို့ မရနိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး စည်းစည်း လုံးလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိ လုပ်ဆောင်သွားကြမှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။
အမျိုးသားေ၇းဝါဒီ နဲ. စစ်မှန်တဲ့ငြ မ်းချမ်းေ၇း
“အမျိုးသားရေးဆိုတာ အင်မတန် ကောင်းတယ်။ အမျိုးသားရေးဆိုတာ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ တခြား အမျိုးသားကို ထိခိုက်စေတဲ့ဟာ၊ တခြား အမျိုးသားကို မုန်းတီးတာဟာ အမျိုးသားရေး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ”
အမျိုးသားေ၇း ၀ါဒ သိပ်ပြင်းထန်လွန်းပြီး အစွန်းေ၇ာက်သွားတဲ့ အခါ တခြားလူမျိုး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့လူမျိုးမှငါ့လူမျိုး၊ ငါ့လူမျိုးေ ကာင်းစားပြီးေ၇ာ ဆိုပြီးဖြစ်တတ်ကြလို. ၊
ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ သာဓကတွေမြ န်မာ့သမိုင်းမှာေ၇ာ ကမ္ဘာ.သ မိုင်းမှာပါ၇ှိခဲ့လို.၊
အမျိုးသားနေ .မှာဒီလိုသတိ ပေးစကားပြောတယ်လို.ယူဆပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဇာနည်ပြောချင် တာလည်းဒါ ပဲလို.မြင်ပါတယ်။
ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင် ဆိုပြီး အမှားကင်းတာ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်သမိုင်း မှာမှ မ၇ှိပါဘူး၊
ဒါပေမယ့် မှားမှန်း သိ၇င် အမှန်ပြင်တ တ်တဲ့ ပြင်၇ဲတဲ့ တခြားလူမိူးတွေ၇ဲ. သမိုင်းတွေ၇ှိ ခဲ့ဘူးပါတယ၊် ၇ှိနေပါတယ်။
တကယ်ခက်နေတာက မှားလို.မှားမှန်း မသိတာ
မှားမှန်းသိလည်း ၀န် မခံ ချင်တာ၊ ၀န်ခံ၇ဲ တဲ့ သတ္တိ မ၇ှိတာပါဘဲ။
အနာ မသိ၇င် ဆေးတွေ.ဖို.မလွယ်သေးပါလို. ပြောပါ၇စေ၊
ချစ်ခင်လေးစား၇ပါသောေ၇ာင်း၇င်းများ။
written by REALITY, November 17, 2009
Bravo! Steve too
BRAVO!!!!! Ko Zarni and Maung Aye Tun Oo, Myo Chit, Kachinboi, Adam, Poe Kwa, Yoma Kyarr, Kyaw Min Oo, Chaw Chaw, win naing, Zaw Lurn Naing, thageeblood, Uncle, Ye Aung, the learner, Ko Ko, Tun Hla, Pisi, Burmese, Tin Pe, Kaung Aung, Thudanu, Andrew, Ashin Yatana, A Free Burmese, Saya Moe, Zin Thant, Mg Mg, snow, patriot, Roxanne, Toe Tet Aung, ulashio, Kthet and THER.
May chauvinism disappear from the surface of the our earth.
written by thiha, November 17, 2009
ယခု အချိန်အထိ အောက်ပါCOMMENT အများစုသည်
ဗမာလူမျိုးတွေ၏။ စိတ်ဓာတ်ကို။ ပေါ်လွင်စေပါသည်။
written by Sai Aron Suriya, November 16, 2009
It isawell balance articles . We have to open up our past mistake to close up the darkest chapter . This is the time to begin new chapter on new page. Burma never has been homogeneous country. Our future path is clear , the next political system should accommodate each and every individual rights which lead to self determination . Also encourage to achieve Unity through diversity. Larger ethnic group should protect smaller minority group. In the past 60 yrs , until today , xenophobic selected group of burmese government practice systematic eradication of ethnic culture, literature and history. EG. Chiang Tong Shan Palace was destroyed by Burmese Army. By destroying , they had destroyed part of culture and historical importance of Shan States.
The importance of local language is not encourage in local school. All the curriculum is in Burmese. It is prove hibit to learn one's own language. Participation in decision making process are all in the hand of Burmese.
We all have friends from different ethnic group but do we really understand each other beyond accent, food and clothes.
How many of us really aware of differ ethnic group has totally different culture heritage than Burmese?? How many time we see in the newspaper ethnic dress wearing government minster?? The solution is genuine Federal States.
A Quote from "A History of Britain"
written by Historicical Meterialism, November 16, 2009
I would like to shareaquite by Simon Schama from famous BBC documentary, "A History of Britain".
“…But history ought not to be confused with nostalgia. It’s written, not to revere the dead, but to inspire the living. It’s our cultural bloodstream, the sacred of who we are, and its tells us to let go of the past even as we honor it, to lament what ought to be lamented, to celebrated what should be celebrated. And if in the end that history turns out to reveal itself asapatriot, well then I think that neither Churchill nor Orwell would have minded that very much, and, asamatter of fact, neither do I."
Simon Schama from A History of Britain TV Series, Episode 15 “The Two Winstons”
written by ဦးပညာဝရ, November 16, 2009
အင်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ပြောဆို ပိုင်ခွင့် လူတိုင်းမှာ ရှိတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ -- ရှေးရှေးက လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းသွားကြတဲ့ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အပေါ်မှာ မြင်ပုံကတော့ အံ့သြစရာဘဲ။
ဆောင်းပါး ဆုံးခါနီးမှာ ကိုယ်ကိုကိုယ် ပညာရှင်လို့ဖေါ်ပြခဲ့တာ အခု တကြိမ်ထဲ မကဘူး။
written by ဇော်ဂျီ, November 16, 2009
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ တော်တော်စုံလင်တယ်။ ဒီ ကွဲပြားမှု(Diversity) တွေဟာ အသုံး ချတတ်ရင် အားဖြစ်မယ်၊ မသုံးတ တ်ရင်တော့ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ အဆိပ်ပဲ။ အမေရိကန်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို ပဲကြည့်ပါ။ လူမျိုး၊ ဘာသာ ပေါင်းစုံ ရှိတာပဲ တို့မှာလဲ ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ သူတို့ ဘာ့ကြောင့် ထိပ်ရောက်နေလဲ။ သူတို့ တွေဟာ အဲ ဒီ ကွဲပြားမှုတွေကို သေချာ အသုံးချတတ်လို့ ပဲလို့ထင်တယ်။ အဲလို အသုံးချနိုင် ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မှာ မျှတတဲ့ ဥပဒေရှိရမယ်။ အဲဒီဥပဒေဟာ ဘက်လိုက်မှု မရှိရဘူ၊ ပြည်သူပြည်သား (Citizen) တိုင်းအပေါ် တန်းတူ အခွင့် အရေးပေးရမယ်။
ဗိုလ်ကြီး/မှူးတွေ ရတဲ့လစာ စားပြီး ချမ်းသာနေတာလား၊ လာဘ်စားပြီးချမ်းသာ နေတာလား ၊ တိုင်းပြည် ရောင်းစားပြီး ချမ်းသာနေ တာလား။ အောက်က စစ်သားတွေကတော့ မျိုးချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ဆိုတာတွေကို နေ့တိုင်းရွတ်ပြီး အနင်းခံနေရ တာပဲမလား။ အမျိုးသားရေး ဆိုတာ ဗန်းပြပြီး လူတွေကို လိမ်နေတာ၊ သေချာတွေး ကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းကြီးပါ။ စနစ်မကောင်းရင် လူတွေလဲ မကောင်းနိုင် ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့ တာတွေကတော့ဒီလိုပါ။ သေသေချာချာ မှတ်မိတာ တော့ ”ဒီနိုင်ငံကို ပြည် သူတွေ အားလုံး ပိုင်တယ်” ( ကြပ်ပြင် တွင် ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်း) ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ခုက ”ဗမာတွေကို တစ်ခုသိရမှာက မြန်မာပြည်ကို ဗမာတွေချည်းပဲ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခု ကဘယ်မှာေ ပြာခဲ့လဲ မမှတ်မိပါ။ ဒီလိုပြောရတာကလဲ အမျိုးသားရေး ဆိုတာကို ဗန်းပြစည်းရုံးပြီး လူတွေကို ကျွန်ဇတ်သွင်းနေတဲ့ လူတွေကို နားယောင်မှာ ဆိုးလို့ သတိပေးတာမျိုးလို့ထင်ပါတယ်။
dr. ဇာနည်ရဲ့ ဆောင်းပါးက လူတိုင်းအတွက် တော့ မဟုတ်ဘူး။ အကုန်မှန်တယ် လို့လဲမထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နောင် တစ်ချိန် မှာ တိုင်းပြည်policy ဆွဲမည့်သူများ အတွက် တော့ ထည့်တွေးစရာတွေ အများကြီး ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗမာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ အားလုံး သဘောထား ကြီးနိုင်ကြပါစေ။
written by Methalone, November 16, 2009
တခုခု အဆန်းထွင်တာလား။ ပညာ ရှိ ပညာ တတ်ဆိုတာ အချိန် အခါ အခြေ အနေကို ကြည့်ပြီးမှ မှန်တယ် ဆိုရင်တောင် ထုတ်ဖေါ် သင့်မှ ထုတ်ဖေါ် ရတာပါ။ သူတို့တွေရဲ့ ဘဝ၊ လုပ်ရပ်တွေကို လေ့လာ ဘူးပါသလား။ အားလုံး ပြသနာတွေ နဲ့ ကြီးဘဲဗျ။ တချို့ လူမျိုး စုတွေကတော့ ပြောတယ်ဗျ။ အင်းစိန် တိုက်ပွဲမှာ ဗမာ နိုင်သွားလို့တဲ့ ဗမာ ရှုံးရင် မြန်မာ(ဗမာ) ပြည်ကြီး ဒိထက် အခြေအနေ (တိုင်းရင်းသား အရေး) ဆိုးမယ် တဲ့ဗျ။
Hello Dr Zar Ni
written by john, November 16, 2009
Never ever compare with GEN: AUNG SAN ..
written by သားသား, November 15, 2009
ကော်မန့် ပေးသူတစ်ချို့ က လက်ရှိ မြန်မာပြည်ကို ပဒေသရာဇ်တွေ ပုံဖော်ခဲ့တယ် လို့မြင်နေကြပါတယ်။ မှားပါတယ် ခင်ဗျား။ မြန်မာပြည် အပါ အ၀င် အရှေ့တောင် အာရှ တစ်ခုလုံး ရဲ့ နယ်နိမိတ်ဟာ နယ်ချဲ့တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Dutch, French, British) ပဒေသရာဇ်တွေမှာ လူမျိုး မရှိသလို၊ နယ်နိမိတ်လည်း မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်တွေ မလာခင်က လက်ရှိ မြန်မာပြည် ပုံရိပ် မထင်ခဲ့ရပါဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာ နယ်နိမိတ်ဟာ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ကျေးဇူးပါ။ (Thongchai Siam Mapped ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ နှိုင်းကြည့် စေချင်ပါတယ်။)
မဟာဗမာ လူမျိုးကြီး ၀ါဒ ရှိပါတယ်။ ဗမာကို မေးရင် မရှိဘူးလို့ ပြောမှာပါပဲ။ လုပ်တဲ့သူ မသိပါ။ ခံရတဲ့သူသာ သိပါတယ်။
ဗမာ တစ်ချို့ ကလည်း မဟာဗမာဝါဒကို နားမလည်ကြပါ။ အတူသွား အတူလာ ကြရုံ နဲ့ ငါဟာ ခွဲခြားသူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ကို ကြည့်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးကို တန်းတူ ညီတူ ၀င်တိုးခွင့် မရပါဘူး။ ကိုယ့်ပြည်ကို ကိုယ် အုပ်ချုပ်ခွင့် မရှိပါ။ ကိုယ့်စာပေကို ကိုယ်ရေးခွင့် မရှိပါ။ ကရင် သမိုင်းကို ဘယ်မှာ သင်ခွင့်ရလို့ လဲ။
written by mungringla, November 15, 2009
Well written piece of article, which offers fascinating insights into how the perceptions of (MaHa) Burman are shaped and misguided through Burma education system for generations.
What's striking me most is the fact that Neither Burman democary seekers (Most seniors from NCGUB, whom I personally spent in conversation with for hours), Nor NLD leader Daw Su kyi ever seem to be aware of the problem (or knowingly), the problem in which they (Maha Burman) are obsessed framing themselve to dominate in Burma affairs, rather than to lead. These represent Sadly that there is lack of critical self-evalution. Ifameaningful and better society is to be formed with the presence of mutural tolerance,common value and common interest,apoint is reached for Maha Burman to re think their approach and understanding on the 50 millilions population collectively. Failure to do such would mean that Even the implementation of democracy would not sereve us inamost positive manner in our society of multiculturalism to coexist.
Don't Beat the Bush!
written by Koyu, November 15, 2009
You don't have to pretend that you areaGURU, you should simplify your article that you don't understand that kind of GERAT BURMAN SUPERMACY (POLICY?) if it was existed in Burma. People will answer your query, and you will benefit with the variety of points of view about that. If you want to go about Burma's history, make sure you've really studied and known it from every corner of views. You better know Burma's invasions to such places you mentioned were based on unavoidable and threaten facts. Don't try to express Burma wasawar-thirst uncivilised territory. Learn Burma's history throughly.
In summary, don't try to insult your ancestors who built up Burma in South East Asia and remember you should not incite clashes between Burman and non-Burman inside/outside Burma or else. Your article should be in the direction of intergration of burma's politics for the sake of democracy and for the freedom from oppression and poverty and termination of tyrant military dictorial ruling. Don't show up narrow-minded (chauvinism) approach forashort-cut to political influence. Be hournest! Be polite!
ဗမာ နှစ်မျိုး နှစ်စား
written by လားဟူ, November 15, 2009
ဗမာ ၂ မျိုး ၂စား ရှိတယ်လို့ပြဲ မင်တယ်။ သာဓက ကတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်ဆု(နှင့် နောက်လိုက်များ ) ပေါ့ရှင်။ ရုပ်ရှင်ထဲက လူဆိုးနဲ့ လူကောင်းလို့ မြင်ကြည့် လိုက်မိတယ်။
တစ်ချို့ ဗမာတွေကတော့ ပြောမယ်။ ကျုပ်တို့ ဗမာတွေလည်း ဗမာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရတာပါပဲလို့ စောဒက တက်မယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေ ခံနေရတာေ လာက်တော့ မဆိုးသေးဘူး လို့ ပြောချင်တယ်။
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ ဗမာတွေက တိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့ သာတူ ညီမျှ power share လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဗမာတွေအပေါ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ချစ်ခင် ရင်းနှီးမှု ပြန်လည် ရရှိလာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒီအခါကျရင် ဗမာမှ မဟုတ်ဘူး။ အခါ အခွင့်ကောင်းရရင် တစ်ခြား လူမျိုး တစ်ခုခု ကလည်း လူမျိုးကြီး ၀ါဒကို ကျင့်သုံးသွားမှာလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မှာလဲနော်။
written by Burmese, November 15, 2009
စင်္ကာပူမှာ clashes မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်လို့ လား။ ဖြစ်ခဲ့တာမှ အကြီးကြီးကို ဖြစ်ခဲ့တာ တရုတ်နဲ့ မလေး၊ ကုလားတွေ ဖြစ်ကြတာ။ စင်္ကာပူအစိုးရကလည်း Perfect မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ ဒီမှာ တရုတ်တွေကို ဦးစားပေးတာ တစ်နိုင်ငံလုံး သိတယ်။ PAP မှာ အဖွဲ့ ဝင် အများစုဟာ တရုတ်ဗျ။ သမ္မတတောင် မကောင်းတတ်လို့ပေးထားတာ။ ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားပြောသလို Role Model မဖြစ်ပါဘူး။ ကောင်းတာတစ်ခုက Law and Order ရှိတယ်။ Justice ရှိတယ်။ အစိုးရက ပြည်သူနဲ့မျှစားတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ဘူး။ ဒီလောက်ပါပဲ။
ဗဟုသုတဆိုတာ Click တစ်ချက် နှိပ်တာနဲ့ ရပါတယ်။ ဗမာတွေကို မစော်ကား ပါနဲ့ ကျေးဇူး မတင်ချင်နေပါ။ သွေးမခွဲပါနဲ့ ။ မျှမျှတတ ပြောပါ။ အားလုံးဟာတန်းတူတွေပါ။
written by ဖုလ်ဝန - Colgate မဟုတ်ပါ, November 15, 2009
သူ့ဖက်က ဘယ်လို၊ ကျူပ်ဖက်ကနေ ကြည့်ရင် ဘယ်လို ဆိုပြီးတော့ ဖတ်ရှုနိုင်မှ .. စာဖတ်တာ မှန်ကန်ရာ ရောက်ပါတယ် ... ။
စာရေးသူက ... ဆိုလိုချင်တာက တစ်မျိုး .. ကိုယ့်ဖက် တွေးယူပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်လိုက်တာက တစ်မျိုးဆိုတော့ (အတ္တဆန်သလို ဖြစ်သွားမှာပါ)။
ယိုးဒယားကို ၀င်တိုက်၊ အနိုင်ကျင့်တုံးကတော့ .. သူတို့က .. တရားပါတယ်.. ။ နယ်ချဲ့တွေလာတော့.. သူတို့က... နယ်ချဲ့ကုလားဖြူတွေ .. ကျူးကျော်သူတွေလို့ .. ပြောတယ်... ။ အဲဒါကျတော့.. တ၇ားတယ်ပေါ့ ... ??? ဟုတ်လားလို့ ကျနော် မေးချင်ပါတယ် ။ အဲဒီစာသားကိုလဲ ကြိုက်ပါတယ်... ။
ဒေါက်တာ ဇာနည် ..ဆက်ရေးပါ ... ။ အဖြစ်မှန်ကို.. တင်ပြတာ ကောင်းပါတယ်..။ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တုန်းက... ဒီလောက် မကြာပါဘူး ..။ အခုထိ ...ဂျော်ဂျော် အော်နေပေမယ့်.. စွန့်စားတဲ့လူတွေသာ.. ထောင်ထဲ ရောက်သွားတာ ...ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ် ..။
အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် ကောင်လေးတစ်ယောက် (စလုံး)
We are Myanmar. We have equal opportunity ...
written by ခွန်, November 15, 2009
ရေးရဲ တာ ကို ချီးကျူးပါတယ် ။ ဒီမို ကရေစီ မြန်မာ နိုင် ငံ ဖြစ် လာဖို့ဆိုရင် ဗမာ တွေ ဖက် ကရော . တိုင်း ရင်းသား အားလုံးဖက် ကရော ..အားလုံး ဟာ တန်း တူ မြန်မာနိုင် ငံ သား ဖြစ် တယ် ၊ အားလုံး အခွင့်အရေး တန်းတူ ရှိ တယ် ဆိုတဲ့အမြင် ရှိဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒီမို ကရေစီ ဘိုး အေ ယူကေ နိုင် ငံ ကို ကြည့်ပါ။ အင်္ဂ လိပ် တွေ က နိုင် ငံ လူဦးရေ ရဲ့၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက် ရှိတယ် ဆို ပေမယ့်စကော့ ၊ ဝေလ်း ၊ မြောက်ပိုင်း အိုင်းရစ် နဲ့အင်္ဂလိပ် တွေ အကုန် လုံး ယူကေနိုင်ငံ သား ဖြစ်တယ် ဆိုရင် အားလုံး ပါလီမန် မှာ နေရာ ရနိုင်တယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်လဲ ဖြစ်နိုင် တယ်။ သူတို့ တွေ က ပြောမယ် .. ငါ က အင်္ဂလိပ် လူမျိုး ၊ ငါ က စကော့ ၊ ငါ က ဝေလ်း .. သူတို့အချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင် မှု တွေ ကလဲ တော်တော် ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံး British ဆို ပြီး ဂုဏ်ယူကြတယ် ။ British ဆိုပြီးခံ ယူထားရင် အားလုံးဟာ အခွင့်အရေးတန်းတူပဲ။
ကျနော် က တိုင်းရင်းသားစပ် တစ် ယောက်ဆိုပေမယ့်မြန်မာနိုင် ငံသား တစ်ယောက် ဆို ပြီးလည်း ဂုဏ်ယူတယ် ။
မြန်မာ ပြည် ကို ယူကေ လို ၊ ယူအက်စ် တို့ လို့လူမျိုးတိုင်း အခွင့်အရေး တန်းတူ ရတဲ့နိုင် ငံ လိုမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ် ။ ကောင်းတဲ့ဗမာ တွေ အများကြီး ပါ။ ဆို လို ချင်တာ ကတော့လူများစု ဗမာ တွေ ရော၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်း စုံ ဘက် ကရော လူမျိုး စု အစွဲ မထားပဲ အားလုံး တန်းတူ မြန်မာလူမျိုး တွေ ပဲ ဆို ပြီး ညှိနှိုင်း မှု့ တွေ လုပ် နိုင် ခဲ့ မယ် ဆို ရင် အား လုံးအဆင် ပြေသွားမှာ ပါ။
written by ကျော်စွာ, November 15, 2009
တစ်ခြား ဆောင်းပါးတွေ ကိုလည်း မျှော် လင့်နေပါတယ်။ အများညီရင် ဤ တောင် ကျွဲဖြစ် တဲ့စရိုက်၊ မုသာဝါဒါ မပါ ရင် လင်္ကာ မချောတဲ့ ခေတ် တွေက ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ အခြေစိုက်လာတာ နှစ်ပေါင်း သုံးထောင် လောက်တောင် ရှိလာပြီဆိုတော့ မှန်တာပြောရင် ခံရ ခက်တတ်ကြပါတယ်။ အနာပေါ် တုတ်ကျရင် နာတတ်ကြ ပါတယ်။
written by myo, November 14, 2009
A person who is good or not good, fair or not fair, gentle or not gentle is not dipending on his race.It is depending on whose back ground Education, surroundings, orginal mental and original generation status only, i think so. ( I am bamar race, but I like almost all races , i stayed closely with them in University, the most i like is Shan (esp: Inlay people) and Karen, i feel they are so sincere when i heard their accent).
written by K. Naing Twan, November 14, 2009
ဗမာပညာရှင် တယောက်က ဒီလိုမျိုး အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ချ ရေးလာတာကို အပြည့်အ၀ ကြိုဆို ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ။ နောက်လဲ များများ ရေးပေးပါ။ မဟာဗမာတွေက မျက်မှန်စိမ်းကြီးတွေတပ်ပြီး ကျနော်တို့ လူနည်းစုတွေကို ဘက်ပေါင်းမှာ နှိပ်ကွပ်ထားတော့ လူနည်းစုတွေကလဲ ခိုင်မာ ရှည်လျှားခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို အခြေခံပြီးတော့ မျက်မှန်စိမ်းလေးတွေ ပြန်တပ်ရတာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်စစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို တည်ဆောက်ြ ကပါစေ။ အားလုံး ဗမာဖြစ်ရေး မူဝါဒနဲ့ ဗမာလူမျိုးကြီး ၀ါဒတွေကို မဖျောက်ရင်တော့ နိုင်ငံ ရည်ရှည်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
written by Mg Gyi, November 13, 2009
သမိုင်း ဟာ အပြစ်၇ှာဖို့မဟုတ်သလို၊
သမိုင်း ဟာ ဖုံးကွယ် ထားဖို. လည်း မဟုတ်ပါ၊
သမိုင်း ကိုမှတ်တမ်း တခုအနေနဲ့ မကဘဲ အမှားအမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်.အမှားကိုယ် မြင်ပြီး အမှန်ပြင်ဖို.ြ ကိုးစား တာ နှလုံးသား ရဲရင်. လှပသူများသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
(သြစတြေးလျ မှာ သူတို့လူဖြူတွေ အ၇င်က ဒေသခံ လူ၇ိုင်းတွေ အပေါ်ပြုမူ ခဲ့တာ ကို မှား တဲ့ အကြောင်း
၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် တောင်းပန် ခဲ့ပါတယ်။)
ကိုယ်.အမှားကို ၇ှင်း၇ှင်း လင်းလင်းမြ င်ပြီး ရဲရဲရင်.ရင်. ထောက်ပြ တာလည်း ငါတို.ဗမာ ထဲကဘဲ ဆိုပြီး ချီးကျူး ဂုဏ်ယူ၇မဲ.အစား.....ခုတော.ဖြင်.
စဉ်းစား ကြည်. ကြ ပါအုံး.....
ကိုယ်.လူမျိုးက တခြား လူမျိုးအပေါ် ၇က်၇က်စက်စက်စစ် ကျူးကျော်စစ်နိင်တဲ.အခါ၊
ကျောင်းသမိုင်းစာအုပ်တွေ ကြား က မဟာမျိုးချစ်များ၇ဲ. ၇င် မှာ
ကိုယ်.ဘု ၇င် ကို မဟာ သူ၇ဲကောင်း၊ ခေတ် ကိုေ၇ွ ခေတ် လို. တင်စား၊
ဒါ ပဒေသ၇ာဇ်ခေတ်မို. စစ်ခင်းတာ ထူးလို့ မဆန်းပါဘူး တဲ.၊ မတ၇ားဖြစ်စ၇ာ မ၇ှိပါဘူးတဲ.။
တော်တော်လည်း တ၇ားကျဖို. ကောင်းပါလား၊
ကိုယ်ချင်းစာတ၇ားေ၇ှ.ထားပြီး စဉ်းစား ကြပါအုံး။
အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန် ကိုယ့် ကျူးကျော်ခံ၇တော့ ဘယ်လို ပြောမလဲ။
ဒါတော့ မဆိုင်ဘူးလို့ ခလေးဘ၀ ငြင်းခဲ့သလြို ငင်းအုံးမှာလား ။။
အတ္တအ၇င်းခံ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် တက်နေမဲ့အစား ကိုယ်ချင်းစာတ၇ားလေးေ၇ှ.ထားပြီး
written by Young Man, November 13, 2009
အနှစ် ချူပ်လိုက်တော့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မရှိဘူး။ မောင်လှသည် ဆံပင်ရှည်နှင့် ဖြစ်သည်၊ မောင်လှသည် ယောင်္ကျားတယေက် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောင်္ကျားများသည် ဆံပင်ရှည်နှင့် ဖြစ်သည် ဆိုတဲ့ Logic အမှားလို ဖြစ်နေပြီး။ ဆောင်းပါးထက် comments တွေကို ဖတ်ရတာ ပို ဗဟုသုတ ရှိသလိုပဲ။
စကားပြော ဆင်ခြင်ဖို့ လို, Low-rated comment [Show]
written by ငတုံး, November 13, 2009
မြန်မာပြည်နဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဒီလောက်လေးနဲ့မရပါဘူးဆရာ။ ဆရာပိုလေ့လာပါဦး။ ဆရာ့စာတမ်းက သီအိုရီ အရတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကြီးကို လက်တွေ့ ဆန်ဆန်ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆို တာကြ တော့ ဆရာတို့ ပြည်ပရောက် ဂုရုများ တိတိ ကျကျ အဖြေ မထုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဆေးမြီးတိုလေးတွေပဲ လှမ်းလှမ်း အော်တတ်ကြ တာပါ။ ဘာလို့လဲဆို တော့ ဆရာတို့ က နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဝေးနေလို့ပါ။ ဆရာတို့ လုပ်သင့်တာက မင်းကိုနိုင်တို့လို ထောင်ထဲမှာ ဆယ်စုနှစ် ချီပြီး နေနေရတဲ့ လူတွေကို လွှတ်အောင် လုပ်ပေးေ စချင်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အကြောင်း ပိုသိပါတယ်။ ဒီစစ်အစိုးရကြောင့် မြန်မာလူမျိုး ကော တိုင်းပြည်ပါ နာမယ်ပျက်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်လို ငတုံးတောင် ရင်ထဲ အသဲထဲကနေ ကောင်းကောင်းကြီး သိပါတယ်။ ဒီအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ရှက်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို လက်ခံဘူး မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ရတဲ့နည်း ၊ ပုံစံတွေနဲ့ ပြနေကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ တရုတ်အစိုးရကြီး တစ်ရပ်လုံး ထောက် ထားတဲ့ ဒီ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရကြီးကို အာခံရတာ ဘယ်လောက်ခက်လဲ ဆရာ သိမှာပါ။ ကိုယ်တင် မက ၊ အမျိုးအဆွေ တွေပါ မွဲပြာကြ ၊ ဘ၀ပျက်နိုင်တဲ့ ကစားပွဲကို ဘာဆုမှမမက် ဘဲ ၀င်ကစားရတာမျိုးပါ။ ဒီလို အခြေအနေ မျိုးမှာ ဒီလို အာဏာရှင်တွေကို အာခံ ဖို့ လူတစ်စု လောက်တောင် ဘယ်လောက် စည်းရုံးရခက်လဲ သီအိုရီ အရ ဆရာ တွက် ကြည့်ပါဦး။ ဒီမင်းကိုနိုင် ရဲ့ မိန့်ခွန်းလေး ဆရာ ကြည့်ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ (http://www.youtube.com/watch?v=NtdphvmUzV4 ) သူတို့တွေ သဲတစ်မှုန်လောက် လုပ်ရှားမှု တစ်ခုရဖို့ ဘယ်လို တည်ဆောင်ရလဲ မသိသေးသူများ သိစေချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာဇာနည်ရဲ့ စိတ်ရင်း စေတနာကို ခံစားမိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါလဲ။ လေးစားလျက် ..( ငတုံး )
written by lin lin, November 13, 2009
ဘာလို့ သွေးခွဲေ နရတာလဲဗျာ
written by Thar Htwe, November 13, 2009
Dear Dr Zar Ni,
Please think about the Myanmar people how to get to be united instead of writing so. We must remember all the times the meaning of 'Unity Is Strength'. Asaeducated, pl think about us how to getapiece in our life and re-gathering with our beloved family and write about the article how to build our country to be modernize!!! Thanks and Best Wishes!!!!
written by vincent, November 13, 2009
အခုအချိန်မှာ အားလုံး သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ တော်လို့ တတ်လို့ ၀င်ရေးတာ မဟုတ်ပါခင်ဗျား။ ဆောင်းပါးရှင်ကို ရေးချင်တာ မဟုတ်ပါ ပြည်သူ အားလုံးကို ကိုယ်ပိုင် ဆင်ချင်ဥာဏ်နှင့် သတိထားစေချင်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ တစ်ချို့က (အများအားဖြင့် သာကူးများ) ခေါင်းထောင် အသံဟစ်မှာ သေချာပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် ဆရာကြီးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အခြေအနေ မကောင်းရင်လဲ လက်ရှိ အနေအထားအတိုင်း အခြေအနေမပျက် နေနိုင်ကြမှာ ဆို့တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရှုံး မရှိဘူးပေါ့လေ။ နှစ်ရှည်လ များထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ သူတွေကို မမေ့သင့်ပါဘူး။
written by မြန်မာပြည်ကို ချစ်သူ, November 13, 2009
မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပြီး ဘာသာရေး သာသနာရေး အရ ကော လူမျိုး ရေး အရကော စနစ်ကျကျ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ
လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်တွေ ကို သတ်ခဲ့တာ
ပြည်တွင်းစစ်မီး မွှေးခဲ့တာတွေ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ အစိုးရလက်ထပ် ကတည်းက စနစ်တကျ ဖန်တီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာ အခု ဗြိတိသျှ အစိုးရနဲက ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေ သိအောင် ပြောရဲတဲ့ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမား မြန်မာ သတင်းမီဒီယာ တွေ ဘယ်သူေ ပြာရဲလို့လဲ အခု အချိန်ထိ မြန့်မာ သမိုင်းမှာ ဗြိတိသျှကို အာခံရဲတာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တစ်ယောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်
ဗိုလ်ချုပ်လို အရိုင်း တစောက်ကန်း ဂုဏ်ပုဒ် အတင်ခံ ချင်ရင် ဗြိတိန် နိုင်ငံရေး သမားတွေ နိုင်ငံသားတွေ မြန်မာပြည် အကြောင်း အမှန်တကယ သိအောင် ပြောလိုက်ပါ၊
မူ က လူကို ထိန်းသွားပါလိမ့်မယ� ��ဗျ
written by Maung Aye Tun Oo, November 13, 2009
မူတစ်ခုကိုသာ တည်ဆောက်ကြရအောင် မူက လူတွေကို ထိန်းကျောင်းေ ပးသွားပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား
written by Kane, November 13, 2009
Now you know how hard is it to integrate Myanmars. Not only you, no one can defeat Burmese Mindset.
written by myochit, November 13, 2009
Striking, provoking and yet enlightened article.
Congrats Dr.ZarNi. You did it again.
Some words are sharp enough to pierce through..... May be you deliberately put it that way.
As I belong to minority, I have seen and suffered enough discrimination from BIG brother Bamars (power holders). This discrimination might not be systematic by the government which is total military Bamars but it happened everywhere in minority places. I found out later it is happening everywhere between power holders (military) and general public regardless of races.
As we all aware of minorities and other religions apart from Buddhist were ban from promotions beyond Major in the military.
In my place, soldiers were got promoted for marrying minority and eventually converted them to their religion.why?
This untrustworthy and discrimination work so well even beyond the boundary of Burma. I have seen and heard of how difficult to organize among Burmese people elsewhere just for non-political event.
So sad! Because of we still cannot forgive each other or just the way it is? I personally don't believe in bashing one another. You and I may have differences rooted from every possible way but we have the same ambition for our country which is liberating it from evil junta.
Let's welcome every thoughtful ideas and stand as ONE.
A Unique Article, Low-rated comment [Show]
ကိုကိုနဲ့ အချို့သောသူများသို� ��၊
written by Chotuu Mar, November 13, 2009
ဗမာမကောင်းဘူး သိမ်းကြုံး ပြောတာထက် အုပ်ချုပ်သူ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် ဆိုတာ ခွဲပြောသင့်တယ် ထင်တယ်။
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဆွဲခဲ့သူတွေဟာ ယနေ့ နအဖ တွေရဲ့ အဖေကြီး မဆလ တွေလေ။
ကျွန်မတို့ သာမန် ဗမာတွေ ရဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေက ကချင်၊ ချင်းနဲ့ ရှမ်းတွေ။ သွားလေသူ ချင်း ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုတင်မောင်ဦးဆိုလည်း ကျွန်မတို့ သိပ်လေးစားပေါ့။
ဒေါ်စုနဲ့ ဦးတင်ဦးလည်း ဗမာတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နအဖ အာဏာရူးတွေ နဲ့ တခြား စီပါ။
ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောသင့် ရေးသင့်
ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်တာ သေချာလို့ မောင်လေးတယောက် အနေနဲ့ ခေါ်တာနော်။
ဒါကို တလွဲတချော် တွေးပြီး အထင်တွေလွဲ၊ အပြစ်တွေတင်ရင်၊ မင်းလည်း မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒစိတ်
ရှေးဗမာဘုရင်တွေနဲ့ လက်ရှိအာဏာရှင်တွေရယ်၊ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက် လက်ပါးစေ၊ ရာထူးဖြတ်လမ်းက လိုချင်သူ လူနည်းစုရဲ့ မိုက်မဲ စာနာမှုနည်းပါးတာ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် ရက်စက် ယုတ်မာတာတွေကို ဗမာ အားလုံးအပေါ် သိမ်းကြုံး အပြစ်ပုံတင်တာ မတရားဘူး ဆိုတာထက် မောင်လေး အသိညာဏ် နုံနည်းသေးတယ်လို့ မမ ထင်တယ်။
တို့များရဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီနောင်တွေ နာကျည်း အပြစ်တင်တဲ့ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗမာဆိုးတွေ ဆိုတာ သာမန် ပြည်သူတွေနဲ့ ဒေါ်စုတို့လို မင်းကိုနိုင် တို့လို ကိုကျော်သူတို့လို ဗမာကောင်း သားသမီး ရတနာတွေ မပါပါဘူး။
ဘွဲ့ပညာတွေ က ကနေ အ အထိ ရတိုင်း ဒေါက်တာ ဆိုတိုင်း ငါပြောသမျှ အမှန်၊ ငါသာသိ၊ ငါသာတတ်၊ ရေးချင်ရာမရေးသင့်ပါ။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ၊ စကားတလုံး စာတကြောင်း ဆင်ဆင် ခြင်ခြင် ပြောသင့် ရေးသင့်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီလို စာ စကား ပြောလေ့၊ ရေးလေ့ရှိသူတွေ ပို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးနယ်မှာ နာမည်လိုချင် လူတွေ သတိပြုစေချင်ရင် နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ လုပ်ယူပါ၊ ဒီလို ဖြတ်လမ်း လိုက်ရင် ထင်သလို အပေါ်မတက်ပဲ အောက် ပြန်ကျနေဦးမယ်။
written by Ko P, November 13, 2009
ကိုယ့်ကိုကိုေ ဖ်ာလိုက်မှဘဲ ဘါမှန်း ဆိုတာသူများ သိသွားတာပေါ့။ တတ်လဲ တတ်နိုင်တယ်။
written by kachinboi, November 13, 2009
this article really open my eyes. i really enjoy this article. im looking forward to this kind of objective criticism article like this.
i know that u touch pretty much the whole burmese history. but it would be so much better, if u could list some reference for people who is interested to read more detail about burmese history and also to prove that you are claiming all these with well founded facts.
written by်fairway, November 13, 2009
လူမျိုးရေး ဆိုတာကလည်း ခက်သားဗျ လွတ်လပ်ပြီး တရား မျှတတဲ. ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးဆိုတဲ.ြ ဗိတိန်မှာတောင် IRAဆိုတဲ. သူပုန်တွေ ရှိခဲ.သေးတာဘဲ။ အဲဒီတော. ကျွန်တော်တို. ဆီက ၁၃၅ မျိုးသော လူမျိုးရေးကကော ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ?
ဘယ်သူဘာပြောပြောဗျာ... ဒီစာရေးသင့်တာကြာပြ� ��
written by Adam, November 12, 2009
အပေါ်မှာ ရေးခဲ့ကြ တဲ့ လူတွေ အကုန်လုံးကို လေးစားပါတယ်. .စာရေးသူကို ပိုပြီး လေးစားပါတယ်..ဒီစာ ရေးသင့်နေတာကြာပါပြီ.ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုရင် ဗမာပြည်မှာနှိပ်စက်ခံနေရတာခြင်း အတူတူ ဘာဖြစ်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ပိုခံနေရတာလဲ. ဗမာစစ်သားက ဗမာမိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်တယ် ဆို ဒါ ဘယ်မှာ ကြားဖူးကြလဲ. ကရင်ပြည်နယ် မှာဖြစ်နေတာတွေဟာ စစ်နိုင်ချင်လို့ လုပ်နေတာလို့ပဲ ထင်လား.. လူမျိုးကြီး ၀ါဒ မသုံးဘူး ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ရွာတွေကို ဖြက်စီးရတာလဲ. အမှန်ကို ပြောရင် မခံခြ င်မဖြစ်ကြပါနဲ့. တိုင်းရင်းသားတွေ ခံနေရတာတွေကို ဘယ်ဗမာလူမျိုးက လက်တွေ့ ခံစားဘူးလဲ.မေးချင်ပါတယ်. ဗိုလ်ကြီးတစ်ကျပ်၊ ရဲဘော်တစ်ကျပ် ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပါ၊နောက်ဆုံးတော့ ရဲဘော်ဆယ်ယောက် ရှိရင် ဗိုလ်ကြီးက ဆယ်ကျပ် ရသွားပြီး ရဲဘော်တွေက တစ်ကျပ်စီပဲ ရသွားသလိုမျိုးပါ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီစာဟာ ရာနှုန်းပြည်း မဟုတ်တောင် ၈၀ ရာခုင်နှုန်း မှန်ပါတယ်။
ကို ဇာနည် သို့
written by စည်သူ, November 12, 2009
ကို ဇာနည် ရေ ခင်ဗျားရေးလိုက်မှ ပဲ ကျနော်တို ဗမာ တွေလည်း ရစရာ မရှိတော့ဘူး တဲ့။ ခင်ဗျာ သဘော ဆို ကျနော်တို ဗမာ သမိုင်းက အညာ တွေ ဆို တော့ ကျနော် မေး ခြင်တယ် ဘယ်နိုင်ငံက သူတိုရဲ သမိုင်းတွေ ကကော ပကတိ သမာ သမတ်ကျခဲ့လိုတုန်း ကိုယ့် တိုင်းပြည်ကို တော့ သာသာ ထိုးထိုးရေးထား တာတွေကြီးပဲ။ ခင်ဗျား ပြော သလို ကျနော် တွေက ဗမာ လူမျိူးကြီး ၀ါ ဒ မှာ မိုင်းမိနေတယ်ဆို တော့ မေးခွန်းက တကယ်ကော ဗမာလူမျိုးကြီး ၀ါ ဒ ဆိုတာ ကော ရှိလိုလား? အဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ကိုယ်လူမျိုး ရဲ စရိုက်လက်ခံဏာကို မသိလို ပြောတာလိုပဲ ကျနော်က မှတ်လိုက်မယ်။
ဒီမယ် ကျနော် တိုဗမာ တွေ ဟာ ရုတ်တရက် တော့ သွေးဆူ မြန်ပေမယ့် ကြာတော့ မေ့ပျောက် သွားတာပဲ စိတ်ထဲ သိပ်ထားတဲ့လူတွေမ ဟုတ်ဘူး ။ ဥပမာ ဆိုရသော် ဂျပန် ဟာ ဖက်ဆစ် စနစ် နဲ ကျနော်တို ပြည်သူ ပြည်သားတွေကို နှိတ်စက်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ကြီးလည်းပြီး ရော ကျနော်တိုက ဂျပန် နဲပြန်ပြီ မိတ်ဆွေ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ( တရုတ်တွေက တော့ ခုထိ ဂျပန်ကို မုန်း နေကြ တုန်းပေါ့ )၊ ပြီးနောက်တခြက် က ကျနော်တို ဗမာ တွေစရိုက် ကို ကတဖက်သား ကို ကြင်နာ သနားတတ် သူတွေခြည်းပဲ။ ကြည့်ပါလား ကုလား တရုတ် တွေ ကျနော်တို မြေ ပေါ်မှာ ကျနော်တိုကို ခေါင်းပုတ်ဖြတ်ပြီး ကြီးပွားနေကြတာ တောင် မမုန်းနိုင်ကြပဲ အော် သူတိုက လုတ်တတ် ကိုင်တတ် လိုက်တာ ဆိုပြီးတော့ ချီးကျူး နေကြသေးတာ။ အလို လို စိတ်ဓာ တ်ရှိတဲ့ ကျနော် တို့ဗမာတွေက ဘာလို ကိုယ့် တတိုင်းပြည်ထဲ နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေကို ဘာကြောင့် ဗမာလူမျီူး ကြီး စိတ် ဓာတ် ထားပြီး အနိုင်ကျင်း နှိပ်ကွက်မှာလည်း ။
သူများ တွေ တော့ မသိဘူး ကျနော် ငယ်ငယ် ထဲက ရှမ်း သူငယ်ခြင်းလည် ရှိတယ် ကရင်သူငယ်ခြင်းလည်း ရှိတယ်မွန် သူငယ်ခြင်းလည်း ရှိတယ် ဗမာသူငယ်ခြင်းလည်း ရှိတယ် ။ဒါပေမယ့် အားလုံးဟာ ကျနော်သူင ယ်ခြင်းတွေပဲ အတူတူပဲ ဒီကောင် ကကရင်မို မွန်မို့ ဆိုပြီး လျှောက်တွေး နေမယ်ဆိုရင် တော့ ဟုတ်တာပေါ့ ။ မတွေးပါဘူး ခင်ပါတယ်။ ပြီး ကျနော် ကငယ်ငယ်ထဲက မွန်ပြည်နယ် လည်း ရောက်ဖူးတယ် ရှမ်းပြည်နည် လည်း ရောက် ဖူးတယ် မွန် ရေကြဲ မုန်ဟင်း ခါးကို ကြိုက်သလို ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လည်း ကြိုက်ပါတယ် ပြီး ရခိုင် မုန်တီလည်း ကြိုက်ပါတယ် ( ကျနော်တွက်က တော့ အကုန်လုံးက ကိုယ်လူမျီုး အစားစာ ပဲ)။ ပြီး စစ်ဖြစ် ကြတာ ပဲဗျာ သေကြေ ကျမှာ ပေါ့ ရက် စက် ကျတော့မှာပေါ့ ခင်ဗျာ ပြောသလို လူမျီုးတုန်း သတ် နေတာ ဆို ကိုးကန့် လို လူမျီုးစုလေး တွေ မျီုးတုန်းတာ ကြာလှပေါ့။
ဒါကြောင့် ကိုဇာနည် ရေ ခင်ဗျား အမြင်ကိုတော့ ကျနော် က လက်မခံနိုင်ဘူး လိုပြော ပြစေ။ ခု ခင်ဗျား ဆောင်းပါး ကြီး က ကွန်မြူနစ် သဘော တရား ကြီးလို သူ ဘာသာ ရှိနေတဲ့လူတွေကို အရင်းရှင် နဲ အရင်းမဲ ခွဲပြီး လူခြင်းခြင်း ပဏီပက္ခ ဖြစ်အောင် လုပ်သလိုမျီူး ကျနော်တိုဘာသာ ကျနော်တို နားလည်မူမျှ နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ခြင်းကို ဗမာ မို့ ကရင် မို့ ရှမ်းမို့  ဘယ်လူမျိုး ဘယ်လိူမျီူးကို အသာရနေပါ တယ့်ပုံစံမျီုး ရေးတော့ ကျနော်တို့တွေ နားလည် မူ လွဲတော့မှာပေါ့ ။တကယ်တော့ ခင်ဗျားလည်း ဂန္ဒီးကြီးလို ပဲ။ ဂန္ဒကြီး နဲနိုင်းလို ဘ၀င်တော့ မမြင့် သွား နဲ့ အုန်း ပြောခြင်တာက အဒီဂန္ဒီ ဆိုတဲ့ ဘဲကြီးကလည်း အန္ဒိယ လူမျိုးခြင်းခြင်း ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် လျှောက်ခွဲလို ကုလား သွေးသားခြင်း အုပ်စုတွေကွဲ ပြီး ပြသနာတတ် ရောမဟုတ်လား အသလိုတူ တာကို ပြောတာ။
အော် ကြုံတုန်း ပြောလိုက်အုန်းမယ် ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဗမာစစ် တော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ အမေက မွန်လူမျီုးဆိုတော့ မွန်သွေး တ၀က် ပါတယ် ဗျ ( အလောင်းစည်သူလိုပေါ့ မွန်- ဗမာ သွေးပါတာ ပြောတာနော်) ၊ ပြီး ကျနော် က ရှမ်းမလေး တွေ ကို ရိုးသားပြီး ပွင့်လင်း လို့ မိန်းမယူရင် အလို ရှမ်း မလေးတွေကို ယူမလားလို။
ကဲ အဒါဆို ခင်ဗျာ ဘယ်လို ပြော မလဲ။
လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် ရှိတယ် လူ့စည်းကမ်း တော့ ရှိရမယ်
written by မြန်မာပြည်ကို ချစ်သူ, November 12, 2009
ကိုဇာနည် ရေးထားတာတွေ က မှန်တာ ပါသလို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံး ရမ်းထားတဲ့ အမှားတွေ များပါတယ်
မှန်တယ် ဆိုတာ နှစ် ၆၀ လုံးလုံး သင်ရိုး ညွန်တန်း တွေက လိုရာဆွဲ သမိုင်းတွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ခံခဲ့ရ တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ခုတည်းကို ပြောတာပါ။
ကိုဇာနည် သမိုင်းကို ပစ္စလက်ခက် မစော်ကားသင့်ဘူး ပညာတတ် တစ်ယောက် အနေနဲ့
အထူးသဖြင့် ဒီ ယဉ်ကျေးမှူနဲ့ဒီ နိုင်ငံ ဖြစ်ဖို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို မစော်ကားသင့်ဘူး
သမိုင်းထဲ က အမှားနဲ့ အမှန်ကို ဘဲ သင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ်
မြန်မာပြည် သမိုင်းကြောင်းက ပုဂ္ဂလိက အတ္တ ကြီးဆိုးမှူတွေကြောင့် ဆိုးဝါး ခဲ့ ဆိုးဝါး နေဆဲ ဖြစ် သလို အများအကျိုး လူမျိုး ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှူ အကျိုး ကိုယ့်ကျိုး မဖက် စွန်လွှတ် စွန့်စားခဲ့ကြ တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အာဇာနည် တွေ ဘိုးဘွားတွေ ကြောင့် ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ ဒီနိုင်ငံ နဲ့ ဒီလူမျိူးစုတွေ ရှိနေတာပါ။
လူနည်းစု လူများစု အားကြီးသူ အားနည်းသူ တန်းတူ ညီမျှဖို့ ဆိုတာတွေ ကို လူမျိုးတိုင်း အလိုရှိတာပါ။
မြန်မြာ ပည်သူတွေ ကြားမှာ လူမျိုးကြီး ၀ါဒ ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါ အခု မြန်မာပြည် စည်းပွားရေးကို ချယ်လှယ်နေတဲ့ တရုပ် ကုလား စစ်တပ် တို့မှာ ဘဲ သူတို့ကောင်းစားရေး ၀ါဒ ရှိတယ် ဆိုတာ အားလုံး အသိပါ
ဗိုလ်ချုပ်လို ဖြစ်ချင်ရင် တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ တကယ် စေတနာရှိရင် စွန့်ရဲရင် သတ္တိရှိရင် မြန်မာပြည်ကိုသွားပါ မြန်မာပြည် အပြင်ကနေ ပြီး သူကြီးသား ညနေစာင်း ထန်းရေမှူးပြီး တရွာလုံး ကို သိမ်းကြုံးဆဲသလို မအော်ပါနဲ့
မြန်မာပြည် အပြင်ကနေ ဆိုရင် သာမန်လက်လုပ် လက်စား ကျုပ်တို့လိုလူမျိုး တွေလဲ အော်နိုင် ပြောနိုင် ပါတယ်
ဒီအချိန်က အားလုံး ညီညွတ်ရမယ့် အချိန်ပါ
မြို့ပေါ်လူတန်းစား တောနေ လူတန်းစား ကချင် ကယား မွန် ဗမာ ရခိုင် ရှမ်း နဲ့ တရုတ် ကုလား အကုန်လုံး ပြည်သူ အားလုံးလဲ ထောင်းထောင်း ကြေနေပါပြီ
တာဝန်ရှိသူတွေ အတ္တတွေ လျှော့ကြပါတော့
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အမျိုးသားနေ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှာစကားလေး က အဖိုးတန်လွန်းလို့ ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်
Xenophobia is not nationalism and patriotism, opposition leader Daw Aung Suu Kyi has said.
“She said nationalism is good with good intentions for the welfare of one’s own nationality and with Metta (love) and Cetana (benevolence). But it should not hate and hurt other nationalities,
တခြားသော အမျိုးသားများကို မုန်းတီးခြင်းသည် အမျိုးသားရေး မဟုတ်ဟု အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆို လိုက်သည်။
”သူ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) တခုပဲ ပြောပါတယ်။ အမျိုးသားရေး ဆိုတာ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ အမျိုးသားရေး ဆိုတာ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ကောင်းစား စေချင်တဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ တခြား အမျိုးသားကို ထိခိုက်စေတဲ့ဟာ၊ တခြား အမျိုးသားကို မုန်းတီးတာဟာ အမျိုးသားရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ ပြောလိုက်တယ်”ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောစကားကို ကိုးကား၍ ပြောသည်။
written by KKk, November 12, 2009
မိမိကိုယ်ကို အရင် သုံးသပ်ပြီး ကောင်းအောင်နေပါ ...။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ မယှဉ်ပါနှင့် ။
အသလွတ်ကြီး ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ်ပြန်ဆဲ နေသလို့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ဇာနည်ရဲ့ စတိုင်ပဲ ဆိုရင်တော့ ရှိပါစေတော့ဗျာ။
ဆောင်းပါး ရဲ့ အနှစ်ချုပ်က ဘာလဲ
written by tuntauk, November 12, 2009
i'm not clear what do u want to readers(myanmar people) to know specifically. Is your article to be continued? I think u need to display conclusion.If not, it is just like an article which is written by primary school's boy.
Great Article, Low-rated comment [Show]
သွေးထွက်အောင် မှန်လိုက်လေဗျာ, Low-rated comment [Show]
written by Burmese, November 12, 2009
ကိုဇာနည်က ဘာကို မကျေနပ်လို့ ဘာကိုရေးချင်နေတာလည်း။ နအဖ ကိုလား၊ ဗမာတွေကိုလား။ ကျုပ်က ဗမာ မဟုတ်ဘူးနော်....။
written by yetwayni, November 12, 2009
sanction နဲ့ပတ်သက်ပြီး interview မှာတုန်းကတော့ ဒေါက်တာဇာနည် ပြောခဲ့တာလေးတွေ သဘောကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ အယူအဆကြီးကတော့ အတင်းကြီး ဆဲချင်သလိုဖြစ်နေတယ် ထင်တယ်။ အဓိက တွေးခေါ်ရမှာက အုပ်စိုးသူလူတန်စားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံလူထု သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်လူမျိုးကပဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားအပေါ် လူလိုသူလို ဆက်ဆံဖို့ပါပဲ။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကတော့ ပဒေသရာဇ်ခေတ် ပုံစံပဲသွားမှာပါပဲ။ ဒေါက်တာဇာနည် အပြစ်မြင်နေသလိုဆိုရင် ဘယ်လူမျိုးမှ ကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အားလုံးကြီးနိုင် ငယ်ညှင်းလုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားကြီးတဲ့သူက သူ့လူမျိုး ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေး စဉ်းစားခဲ့ကြမှာပါ။ ရှေးဘုရင်တွေရဲ့ အပြစ်အနာဆာတွေကိုပဲ ပြောနေလို့မပြီးပါဘူး။ သူတို့ကောင်းကွက်တွေလည်း ရှိခဲ့ကြတာပါပဲ။ တဘက်မှာ ကောင်းသလို တဘက်မှာ အဆိုးတွေဖြစ်နေတာလည်း သဘာဝပါပဲ။ ရှေးဘုရင်တွေထဲမှာ စစ်ဝါဒီတွေရှိခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ကြောင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်နေတာပါ။ တိုးတက်လာတဲ့ နှောင်းလူတွေကပဲ တန်းတူ အခွင့်အရေးတွေအတွက် အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြဖို့ပဲလိုတာပါ။ အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျသွားပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်နိုင်ရင် ဒီလို လူတန်းစားအမြင် ကွဲပြားတာတွေ အနည်းနဲ့အများ လျော့ကျသွားမှာပါပဲ။ ကျနော်တို့ ညံ့နေလို့ ကျနော်တို့ဘိုးဘွားတွေကို အပြစ်တင်မနေသင့်ပါဘူး။
Failures does not worth blame like this..
written by Falcon, November 12, 2009
A lot of people died inside Myanmar fighting this junta. Those people includes all kind of races.. also Bamars. It is just that we still can't reach our destination. It is not that we lost. You just can't blame all people by seeing those failures.. Instead you must encourage them. Now some technicians praise China for its success. Actually .. Chinese Communist Party is Evil. We with our human can't praise them just because they are successful now.. The same thing .. you just can't blame all of us just because of we are failing at the moment.. The battle against evils are not done yet...
written by Kyaw Min Oo, November 12, 2009
If you want to build the reality Union, this isaprecious article for all ethnics.
Kachin=Kayarr=Karen=Chin=Mon=Bamar=Rakhine=Shan=other ethnics=We are one in Myanmar.
Pls review before you load
written by pyi chit thar, November 12, 2009
Pls don't load this kind of article.Last few week we all argued on Dr Aye Kyaw's article.Most of myanmars educated people like Dr Aye Kyaw & Dr Zar Ni,don't have enough brave to against SPDC.That's why,they write too much rather than doing for Burmese people.All these kind of people are selfishs.I will more proud for U Win Tin who is doing everything for us(see his age and health situation too).If you(Dr Zar Ni) really want to help Burmese people,pls come and write or doing something inside Burmar.Can u do so?????????????
There's always the first time for everything
written by Chaw Chaw, November 12, 2009
These days, it is quite depressing to find so-called Burma experts and scholars recycling the kind of narratives Dr. Zarni has severely criticized in this article. These academics and pseudo-academics are just trying to validate the official history of Burma as an essentially "White Man's Burden", while accusing competing analyses as "ahistorical", "irrational", and "unrealistic". At the same time, they purposely downplay the inevitable messages of liberal aspirations that Burma's social movements have carried. For them, it's all about economics, weakness of civil society/middle class, and the lack of institutions. Such simplistic, linear readings of Burma's history are favoring the oppressors over the oppressed.
There is always the first time for everything. This original and well-intentioned article should be very much welcome. This may beafirst step to further diagnose the country's sickness.
written by Myanmar , November 12, 2009
အဲဒီလောက် တောင် တော် ပြီး တတ် သိ နား လည် နေ ရင် မြန်မာ ပြည် ကို စွန့် လွှတ် လိုက် ပါ လား ဗျာ.
written by kan, November 12, 2009
လေးစားပါတယ် ... လူသားအားလုန်းကို လေးစားပါတယ်.. ရွှေဝါရောင်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့မှာ သေစုန်း ဒဏ်ရာရ ထောင်ကျခဲ့ကျတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘမာများကိုလဲ လေးစားပါတယ်.. ဒါကိုမှမထောက် ဘမာမကောင်းကျောင်း ရေးတက်တဲ့ စာရေးစရာ ဘက်မလိုက်ဘမာဂျည်းကိုလဲ(ပိုလို့ ပိုလို့ ပိုလို့) တောင်လေးစားမိပါတယ်... မောင်မင်းဂျည်းသား ယခုပို့စ်ဖြင့် လှဲနေလှေအောင်း ခွေးကတက်ပါမကျန် နံမယ်ကျော်လူကျိုက်များပါစေသတီး
လေးစားပါတယ် ... လူသားအားလုန်းကိုလေ
Agree but need more explanation
written by win naing, November 12, 2009
Dear Ko Zarni,
I basically agree on your thought that we must end such hatred and ethnocentric politics in the future. But it would be nicer if you remind readers that even world history had been fulled of bloodshed, hatred, genocide, and occupations in the name of civilization. About 70 years ago, Western and Eastern Europe wereablood bath between so called major powers and very civilized nations. Still, ethnic nationalities in some part of Africa for example Sudan, like Burma, are killing each other in the name of power and nation-building.
So, Burma is not the only piece of land that has been filled up such atrocities. But we must end such mentality of "short lived and brutish." I think not all Burma's "60 years" old problems are ethnocentric. I do not deny it doesn't exit. But the lack of economic growth, education, and social development have driven our society intoabrink of collapse, both mentally and physically.
I must confess that I myself had seen such anti-human being behavior in my service with jungle movement for 10 years. But like Gandi's saying, "an eye for an eye makes the whole world blind." Are we going to kill each other for another 20 years like we did in the past 60 years? It is up to the wisdom and leadership of all parties concerned in Burma politics. If we did, then, whoever had the mighty power would be in upper hand. So I pray for forgiveness and look forward forabetter future.
မဟာစစ်ဝါဒီကြီးစိုး� ��နမူသာ ဘုံရန်သူဖြစ်ပါတယ်။
written by NayMyo, November 12, 2009
ဗမာတွေကိုဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုတွေကိုဖြစ်စေ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြောချင်တယ် ဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုလျှင်
ဒေါက်တာဇာနည် နဖူးပေါ် ရေခဲတင်ပြီး ငါကိုယ်တိုင်ရော မဟာဗမာတွေ၊ မဟာကရင်တွေ၊ မဟာမွန်တွေ၊ မဟာရခိုင် တွေလောက် တိုင်ပြည်အတွက် စွန့် လွတ် အနစ်နာခံခဲ့ပြီးလား ဆိုတာ စဉ်စားကြည့်ပါ။ ခြောက်လုံးတွေပေးပြီး တဇောက်ကန်းရေး မယ်ဆိုလျှင် မူလတန်းအဆင့်လောက်မှာ နောက်ကျကျန်နေမယ်။ မဟာဗမာတွေမှာ၊ မဟာတိုင်း ရင်းသားညီအကိုတွေမှာလည်း လူဆိုးလူကောင်း ရှိပါတယ်။ အသက်ပေး စတေးသွားသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မဟာဗမာလူမျိုးကြီး ဝါဒကို အများပြည်သူကြားမှာ၊ ရန်ကုန် ကရင်ခြံမှာ၊ အင်းစိန် ကရင်ခြံမှာ ၊ ပဲခူးမြိုမှာ၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မှာ၊ ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေမှာ သွားမေး ရင်တောင် မကြားဘူးပါ ဒေါက်တာဇာနည်ရယ်လို ပြောပြ ကြမည်။ ဗမာမုန်းတီးရေး သမားတွေကသာ မဟာဗမာ မဟာဗမာဆိုပြီး ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောပြီး ဝါဒဖြန့် အမျိုးသားရေးစိတ် မြှင်တင်ဖို့ ၊ခွဲထွက်လိုစိတ်မြှင်တင်ဖို့သီချင်းအဖြစ်သီဆိုနေ ကြပါ။ ကိုယ်တိုင်က နအဖဆီမှာလည်း အဆင်မပြေ၊ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုကိုလည်း လက်မတွဲနိုင် ဖြစ်နေပြီး တစ်ကောင်တည်း ကိုင်လွတ်နေရတာကိုလည်းပြန် ကြည့်ပါ။
written by Ko Ko, November 12, 2009
ကျုပ်တို့ပြည်သူများ အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်အစိုးရပဲ တက်တက် သဘောတူတယ်။ စားဝတ်နေရေးဖူလုံဖို့နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက် စုဆောင်းနိုင်ဖို့ကိုပဲ အထူးမျှော်လင့်တယ်။
လူမပြောင်းချင်နေပါစေ မူတော့ ပြောင်းပေးပါ။
အခုပုံနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မူကိုတော့ လုံးဝမကြိုက်တာ အမှန်ပဲ။
အခုဟာက လူလည်း မရွေ့ချင် မူလည်းမပြောင်းချင်ဆိုတော့ အတ္တအရမ်း ကြီးလွန်းတယ်။
written by luminnkyaw, November 12, 2009
အခုအချိန်မှာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သတ်လျှို ရေးထားသလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား အသိဆုံးပါ
ခင်ဗျားရဲ့ ယူဆချက်တွေ အားလုံး နီးပါး မှားပါတယ်
ကမ္ဘာ မှာ သူ့ကာလနဲ့ သူ အုပ်ချုပ် ရေးပုံစံ ရှိခဲ့ ပြောင်းလဲ ခဲ့ ကြတာပါ
မြန်မာတနိုင်ငံ ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ် ဗမာတွေ ကမှ တိုင်းရင်းသားတွေ ကို အနိုင်မကျင့် ကြပါဘူး
တိုင်းရင်းသားတွေ ကပဲ ခင်ဗျားလို ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေး ဆွဲပြောတဲ့ အကျင့် ရှိတဲ့သူတိုင်း
ငါတို့ က အားနည်းတယ်ဆိုပြီး အားနည်းတာကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်သွားတာပါ
ကျုပ်လဲ မန်းလေးသား ပါပဲ
ကျုပ် ကျောင်းတက်ခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေမှာ ချင်း ကချင် ရှမ်း လူမျီုးတော်တော်များများနဲ့ အတူတူ တက်ခဲ့တာပါ
အားလုံး တန်းတူ အခွင့် အရေးရပါတယ်
ခင်ဗျားပြောသလို ကျုပ်တို့ တွေ မဟာ ဝါဒ မရှိခဲ့ ပါဘူး
ကျုပ် သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာလဲ မရှိခဲ့ ကြပါဘူး
အခု စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အောက်မှာ
ဗမာတွေလဲ အလူးအလဲ ခံနေရတာပါပဲ
တိုင်းပြည်မှာ စစ်ပွဲတွေ ပြီးသွားမှ အေးချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှာပါ။
ယနေ့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ အားလုံးပြေလည်ပြီး သွားမှာ ကို ခင်ဗျား က ကြောက်နေတယ်
တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခတွေ ထဲ မှာပဲ ထားချင်လို့ ဒီလို မမှန်ရာ မမှန်ကြောင်း ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ဆွဲ ပြောနေတာပါ
ခင်ဗျား အခုမှ လူတတ်ကြီး လုပ်မနေပါနဲ့
ခင်ဗျား ဘယ်လိုပုံစံ နဲ့ အမေရိကားရောက်ခဲ့ တာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံ ကြီးကောင်းစားဖို့ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ရောက်ခဲ့တာလား
အခြေအနေ အရ ဖြစ်လာတာပါဗျာ
ခင်ဗျား ညီလဲ သြောစတြေးလျ မှာ နိုင်ငံ ရေးခိုလှုံ
စိတ်မမှန်တော့ ပဲ အခု မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေပြီလေ
ဘယ်သူကောင်းစားဖို့ လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဆိုတာ အခုဆိုသိလောက်ပါပြီနော်
ခင်ဗျားတို့ မှာ မြန်မာပြည်ကောင်းစားအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခုမှ မပါခဲ့ ပါဘူး
ဒါ ကို ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ များ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်သေးတယ်
ခင်ဗျားဆောင်းပါး ရဲ့ အနှစ်ချုပ်က ဘာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံကြီး အတွင်းမှာ နေနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး အတွက် ဘာပါလဲ
စစ်ပွဲတွေ ပဲ အတော မသတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီး
တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေ ဆင်းရဲ
ခင်ဗျား လို ပြည်ပက လူတွေ အတွက်တော့ ဘာအရေးလဲဗျာ
နိုင်ငံ ရေး မှာ အခြေအနေ မဟန် ၊ အရာသွင်း မခံရတာနဲ့ မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ့ တော့ လှမ်း မပက် လိုက်ပါနဲ့ ဗျာ။
ခင်ဗျားပြောသလိုကျုပ်တို့ မှာ မရှိပါဘူး
ကျုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်လဲ ခံနေရတာပါ
ခင်ဗျားတို့ လို ထင်ပေါ်ကြော်ကြားချင်တဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် လူတွေ ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ က ပိုမုန်းလာတာပါ
ခင်ဗျား ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရန်တိုက်ပေးချင်ရတာလဲ ဆိုတာ တော့ ခင်ဗျားပဲ သိမှာပါ
ခင်ဗျား က ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ ယှဉ်ပြီး သာဓက ပြ လို့ ကျုပ် က လဲ ပြောလိုက်အုံးမယ်
ဗိုလ်ချုပ် က တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ကို ရအောင်လုပ်တဲ့ သူ
ခင်ဗျား ကတော့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ကို ပြိုကွဲ အောင်လုပ်တဲ့ သူ
ဒေါက်တာသရောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဘာချပြချင်တာလဲ ဆိုတာတောင် ချမပြနိုင်ဘူး
Where are you living now Dr. Zar Ni
written by Myanmar, November 12, 2009
Dear Dr. Zar Ni,
My father is Karen and my mother is Shan, but I do love my Nation, Myanmar. while we are out side of our nation we havealot of difficulties to live in the respective nations. I also have that problem, now i am living in Thailand and studying. But whenever i haveachance to explain to my friends about my Nation, i always try to explain to them in the way of not an extremist Nationalist but also not as the one who blame his nation all the time and make his friends like him and look down on his nation. what you have said is not an acceptable for me, becuase you are the one who is saying bad things about Myanmar and make yourselfasuccessful scholar, you have insulted the honorable Myanmar historians, but please do reconsider yourself, Please ask yourself what did you do for the nation? I have read many things about your activities, since i was young. may i ask you where are you living now? you are saying many things (bad attitude) about Myanmar citizen but you did not do any good thing for Myanmar, I do not like those who are now living in the Western Nations and saying all the bad things about Myanmar citizens, Shame on you Dr. Please recall your memory what did you do when Lt. Gen Khin Nyunt was in power????? please don't say Free Burma while you are living in America or any other nation where you can haveaLuxries. I amanationalist but not an extremist nationist.
For you Dr. "Don't Say Free Burma While Living in America or UK"
if you dare please come to Burma or Myanmar and say these words.
For me after i finished here i will go back to Myanmar and try to help my people with work not with words.
Thanksalot Editor
written by Zaw Lurn Naing, November 12, 2009
ဗမာမဟာတွေကတော့ ပါစပ်ကသာ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး ၀မ်းစာအတွက် အော်နေကျတာ။ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို နည်းနည်းလေးမှ အထိခိုက်မခံနိုင်ကြဘူး။ ဗမာလူတွေမှာ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို စွဲကိုင်ပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ဗမာမူပြုဖို့ ကြိုးစားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဝေးနေရအုံးမှာပါ။ လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဟာ မဟာဗမာဝါဒမှာ အခြေခံထားတာကြောင့် ဘယ်သူကမှ ဒီအာဏာရှင် စနစ်ကို မတွန်းလှန်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီဖြစ်ချင်ရင် ပထမဆုံး မဟာဗမာဝါဒကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ၀န်မလေးကြပါနဲ့လို့ ပြောချင်တယ်။
written by Ko MHT, November 12, 2009
ဒေါက်တာဇာနီရဲ့ ဆောင်းပါးကို နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ရေး အဆိုပြုလွှာ တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး လွှတ်တော်မှာ တင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် အငြင်းပွါးစရာ အတော်ကြီးကို ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်မိပေသေးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မချနိုင်ပဲ တက်မပါတဲ့လှေလို တိုင်းပြည်ကတော့ မျောနေဦးမှာပဲ။ ဒေါက်တာဇာနီအနေနဲ့ သူ့ဆောင်းပါးရဲ့ နိဂိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချုပ်သင့်သလို တိုင်းပြည်အတွင်းနအဖရဲ့ ထောင်ဗူးဝနဲ့ သေနပ်ပြောင်းဝမှာ ထမင်းနပ်မှန်အောင် မစားရရှာတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကိုလည်း အမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ကောင်းလိုလိမ့်မယ်။ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိဝင်ဖို့ကိုတော့ အချိန်ယူရပေဦးမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူပြိန်း နားလည်စေတဲ့ ရေးဟန်တွေ အရေးအသားတွေနဲ့ လူထုဆီအရောက်ပို့ပေးတဲ့ ဒီဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ သတိထားရလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်သူ/သားအားလုံးဟာ လူပြိန်းတွေချည်းတော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုပေါ့။
written by တိုးတက်အောင်, November 12, 2009
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ ပဒေသရာဇ်ခေတ် နေရာတိုင်းမှာ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့လဲ တော်လှန်ရေးနဲ့လုံးဝ ဘုရင်စနစ် ဖြုတ်ချခဲ့သလို၊ တစ်ချို့လဲ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားကပဲ စည်းမျည်းခံ ဘုရင်စနစ်ကို ပြောင်းပေးခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြည်သူတွေကလဲ မတော်လှန်နိုင်သလို၊ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကလဲ ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တိုင်းတစ်ပါးကလာမှပဲ ဘုရင်စနစ်တစ်ခန်းရပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာဆိုတာ လူမျိုးပေါင်းများစွာထဲက လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခြားလူမျိုးထက် ပိုပြီးယဉ်ကျေးခြင်း ရိုင်းဆိုင်းခြင်းမရှိပါ။ တစ်ခြားလူမျိုးများနည်းတူ ကောင်းသူ ဆိုးသူသာရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကပိုများသလဲတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်ဟာလဲ မဟာပထ၀ီမြေကြီးပေါ်က နိုင်ငံငယ်တစ်ခုတာ ဖြစ်လို့ လူ့သမိုင်းရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များနဲ့သိပ်ကွာခြားမှုမရှိခဲ့ပါ။ လက်ရှိမြန်မာပြည် အခြေအနေမှာ စစ်အစိုးရဟာ ရက်စက်သလို ပြည်သူလူထုဟာ မတတ်သာလို့ သည်းညဉ်းခံ နေကြရတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဟာ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ စတင်တိုးတက် ပြောင်းလဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘောထားကြီးကြမယ် ဆိုရင် ကျုပ်တို့လက်တွဲပြီး လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုချီတက်နိုင်ကြမှာပါ။ ကိုဇာနည့် အမြင်မှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ သိပ်ရှည်ရှည် ရေးချင်တော့လို့ မိတ်ဆွေများကိုမေးခွန်းလေး ၃ခုနဲ့ အဆုံးသတ်ပါရစေ။
၁။ အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ ဂွကောင်တွေခွေးဖြစ်တော့ဗျိုး မှာ တစ်ကယ်ခွေးဖြစ်ခဲ့တာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားလား၊ အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားလား။
၂။ သခင်အောင်ဆန်းကို ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ်က တစ်ဇောက်ကန်းလို့ ခေါ်တာလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဘမော် နဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ရဲ့ မတူညီနိုင်တဲ့ အဖြေကို ကြားချင်ပါတယ်။
၃။အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကိုကျုပ်တို့ ဘယ်လိုလက်တွေ့ ပေါ်အောင်ဖေါ်ဆောင်သင့်သလဲ။
တစ်ချို့အော်နေကြတဲ့ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ အပေးအယူလား။
တစ်ချို့အော်နေကြတဲ့ NO 2010 NO America ပြည်သူတွေ လမ်းပေါ်ထွက်ကြလား။
တစ်ချို့အော်နေကြတဲ့ ရတာယူထား စကားမများနဲ့လား။
What would be the way we must choose?
written by ZinYaw, November 11, 2009
ဆရာဇာနည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ရဲတာ ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါပေမယ် မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ရွေးရမယ့်လမ်း က ဘယ်လို ဖြစ်သင့်တယ်ထင်လဲ။ လူမျိုးဆိုတာကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး အပြစ်တင် နေလို့မရဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ လူမျိုးဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးအောက်မှာ ကောင်းတဲ့လူတွေကော ဆိုးတဲ့လူတွေကောပါမှာပဲလေ။ ဒါကမ္ဘာဦးအစကတည်းကကိစ္စ။ ကျွန်တော်တို့ သွား ရမှာ က စည်းကမ်းကျတဲ့စနစ်မျိုးကို တည်ဆောက် ဖို့ပဲ။ အဲ ဒီ စနစ်အောက် မှာ တရားမျှတမှု (justice) ရှိမယ်။ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာဆိုတဲ့ အရောင် ကို အဲ ဒီစနစ်အောက်မှာ ဖျောက်ထားရမယ်။ လူမျိုးရေးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းခြင်းက တော့ ကိုယ်ပိုင် လူမျိုးရဲ့ တာဝန် အဖြစ်ပဲရှိသင့်တယ်။ အဲလို တွေးမယ်ဆို ရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အားကျစရာ (Role Model )ဟာ စင်ကာပူ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ စင်ကာပူရဲ့ နိုင်ငံရေးကစားနည်းမျိုး ကို ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့ ရဲ. ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေပြည့်ပြည့်၀၀ရရှိ ခြင်း ကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာဆိုရင် တရုတ်တွေက တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ၊ ဘာသာကို သူတို့ ဘာသာထိမ်းသိမ်းတယ် ၊ မလေး နဲ့ တမီးလ်တွေကလဲ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေကို သူတို့စောင့်ရှောက်တယ်။ အဲဒီ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမျိူးရေး၊ ဘာသာရေးတွေ မတိုက်မိအောင် အစိုးရက လိမ်မာပါးနပ်စွာ ဥပဒေတွေနဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ တစ်ဖက်မှာလဲ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကို ဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက် မှာ မျှတစွာအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ ပေးထားတယ်။ အဲလိုနည်းနဲ့ ပြည်သူတွေအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာမှာ ၀င့်ကြွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဘာအဓိကရုဏ်းမှမရှိဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ က ဘတ်စကားစပယ်ယာ နဲ့ မပြေလည်ရင်တောင် ကြောက်နေရတယ်။ တစ်ခုခု အခြေအတင်ဖြစ်လာရင် ကိုယ်မှန်ရင်တောင် ရဲ တိုင် လို့မရ၊ ဥပဒေဆိုတာမရှိ၊ ဒါကြောင့်ရန်ခဏခဏဖြစ်ကြ၊ စကားများကြနဲ့၊ အဓိကကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်ရှင်းရတာလေ။
written by thageeblood, November 11, 2009
ကိုဇာနည်က ဗမာလား. ဗမာဆိုရင်.. ဒီလိုသတ္တိရှိတဲ့ဗမာမျိုး သိပ်ရှားတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ ဗမာတွေသိသင့်တာကြာပြီ။
မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးရေး မှိုင်းမိပြီး မျက်ကနုးမျိုးချစ် ပညာမဲ့တွေ ဟာ ဒီ နအဖ ခေတ်မှာ များလာတာဟာ နအဖ ရဲ့ တံခါးပိတ်ပြီး အတွေးအခေါ် မှားတွေ မီဒီယာမျိုးစုံ နဲ့ရိုက်သွင်းထားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သေနတ်ပြောင်းဝအောက်မှာ သတ္တိရှိ ရှိ အမှန်တရားအတွက် အသေခံ သွားတဲ့သူတွေ၊ ထောင်ထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး သေလုမြောပါး ခံစားနေရသူတွေလဲ အများကြီးပါ။ Dr. Zar Ni ပြောလိုက် တာ က ဘာနဲ့တူနေသလဲဆို ရင် Sharon Stone က ပြီးခဲ့တဲ့ လူခြောက်သောင်းလောက် သေခဲ့တဲ တရုတ်ပြည် ငလျင်မှာ တုန်းက .. တရုတ်တွေအဲလိုသေရတာ ကံကံ၏အကျိုးကြောင့်လို့ ဝေဖန်သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် ကနယ်မှာမွေးတဲ့ဗမာ၊ စကားဝဲတယ်၊ ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းတက်တော့ တစ်ချို့ရန်ကုန်သား ဗမာတွေက နှိမ်သလိုလို စကားပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲလိုပြောတဲ့ကောင် တွေက များသောအားဖြင့် အဆင့်မရှိတဲ့ လူနည်းစုပါ။ အဲလိုကောင် တွေက လည်း တိုင်းရင်းသားဆိုပြီးနှိမ် တာမျိုးထာက် ငတုံး၊ ငရိုး ဆိုပြီးနှိမ်တာမျိုးပါ။ ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော်အခုထိ စကားဝဲတာမပြင်ဘူး။ မိုက်ရိုင်းတဲ့ ဗမာအများစုဟာ နအဖ အုပ်စုဝင် ထဲမှာပဲများတယ်။ သာမာန် အရပ်သားဗမာတွေအများစု က ယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာ ဗမာကြိးစိုးတယ်ဆို တာကလည်းဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ စီးပွားရေးကို ကြည့် ရင် ၆၀% လောက်က တရုတ် နဲ့ကုလားပိုင်တယ်၊ ၂၀ % လောက် က နအဖ နဲ့ပါတသက်ရာ ပါတ်သက်ကြောင်းတွေပိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့ ဟာ အနည်းစုလောက်ပဲ ကျန်တဲ့လူထုက ပိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သတ္တိရှိရှိနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူတွေ (လူမျိုးပေါင်းစုံ- ဘုန်းကြီးတွေအပါအ၀င်) ဒီအာဏာ ရှင် တွေကို အာခံနေတာမလား။ မအောင် မြင် ရခြင်း အဓိက အကြောင်း အရင်း က န.အ.ဖ ကို တရုတ်အစိုးရ ကထောက် ခံ တယ်၊ ဆရာဇာနည်နေတဲ့ US ကလဲ အီရတ် ရယ် ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ရယ်၊ ပြည်တွင်းက အလုပ်လက်မဲ့တွေရယ် နဲ့ တင် ဗျာများနေတာမလား ။သူကလေလောက်ပဲ တတ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီ မသူတော် နှစ် ပါး ကြီးကမြန်မာ ပြည်မှာ စိုးမိုးနေတယ်လေ။ ပြောရရင် မီစ္ဆာ ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်လေဗျာ။ အခုမြန်မာပြည်သူတွေက မြေဇာပင်ပဲ။ ခင်ဗျားဆဲချင် ရင် နအဖ နဲ့ တရုတ်အစိုးရကို ပဲ တိုက် ရိုက်ဆဲပါ။ သူတို့ က သာ အဓိကတရားခံပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာဇာနည်ရဲ့ပွင်းလင်းရဲတင်းမှုကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။
agree, Low-rated comment [Show]
written by ကိုစိုင်း, November 11, 2009
ကိုဇာနည် ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ရင်ဖွင့်ချက်ကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အမြင်ကို အချက်ကျကျ နဲ့ ထုတ်ဖေါ် ပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကန့်ကွက်သူတွေလဲ သူ့အမြင်နဲ့သူ ရှိနေမှာပါ.....
ကျနော့ အမြင်လေး ထပ်ဖြည့်ချင်တယ်..
အမျိုးသားရေးကို အမည်ခံပြီး စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ကိုထိမ်း၊ တပ်ကိုကျတော့ ဆွဲစု၊ လိုက်ဖမ်း၊ ပြီးတော့ စားစရာမရှိလို့ တပ်ထဲဝင်လာတဲ့ အောက်ခြေလူတမ်းစားက လူတွေနဲ့ တပ်ထုကိုအင်အားကြီးအောင် တည်ထောင်။
ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေ ဘက်ကလဲ စစ်ထဲ ၀င် ချင်လို့ ၀င်လာသူက အနည်းစု၊ အများစုက ဖမ်းခေါ်ခံရသူ (သို့မဟုတ်) စုဆောင်းရေး မှာ ပါလာသူတွေ။ အင်း... သနားစရာတွေ။ တကယ်တမ်း တိုက်ကြခိုက်ကြလို့ သေကြတာက ရဲဘော်လေးတွေပါ။ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတွေ (အုပ်ချုပ်သူတွေ) အနည်းစုပါ။ နိုင်သူက ရှုံးသူတွေကို နှိပ်ကွပ်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ အမည်ကောင်းတပ်။ တကယ်တမ်းတော့ တိုင်းပြည်မတိုးတက်နိုင်ဘဲ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ်ကာကွယ်ကြရင်း ပြည်တွင်းစစ်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဘဲ ခံစားမိလာတယ်ဗျာ။ ဘယ်ဘက်ကဘဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်တကယ် တိုက်ရင်း သေကြေနေကြတဲ့ “ရဲဘော်ထု အများစု” တွေဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေပါဘဲ ဆိုတာကို အုပ်ချုပ်သူ လူတမ်းစားတွေကို သတိပြု သိစေချင်ပါတယ်.......
written by Uncle , November 11, 2009
Thanks you very much Dr ZarNi
Totally agree and like it very much.
You not only point Burman , you also point all other minorities, this is so far the most fairest article ,from all sided views, well balanced , and more importantly you see the History correctly and made correct judgement.
I very much appreciate your courage & wisdom.
Hope you can keep doing like this and lighten up cloudy people minds.
written by ye Aung, November 11, 2009
at least we need this article.
beenawhile no one talked like this.. cheers
very very good, Low-rated comment [Show]
Another bravo Dr.
written by the learner, November 11, 2009
You've done another nice shot again.
This kind of article need real ground knowledge and huge gut for the writer.
I mostly agree with your ideas and again 'congratulation' Dr..
(p.s - for the part of criticism, please take time before you let your article go to press
and probably have some fellows to criticise you.)
written by layman, November 11, 2009
This is not the time to dig out all the bad past and to find who has to be blamed. Today all Myanmar citizens' duty is to be united and to against the UNLAWFUL MILITARY GOVERNMENT. I agreed w/writer on his note," Our country has been independent for over 60 years but we are living in the same condition as 60 years ago".
Everybody has to realize our country has been misled and misruled by the MILITARY or it's people all that long. This is the main reason of why we BURMESE are still living in this poor condition at sad state.
Ne Win has systematically eliminated the POLITICAL BLOODLINE. Then POLITICS become TABOO to all ordinary Burmese.You like it or not today Burma has NO chance of escape from MILITARY RULERS, unless we united and able to topple the MILITARY GOVERNMENT.Once considered Mighty Berlin Wall was downed for 20 years ago. The answer is not in the past,today newer generation kids do not interested in politics, they simply want the CHANGE .Nobody want to live with Fear and we want to see Burmese people living without Fear and live with FREEDOM .
Whoever ruled the country ( Ne Win & Than Shwe ) they were lack of GOOD WILL ( SETANAR ) and this country will never prosperous.
Please look FORWARD, Don't look back .
written by Ko Ko, November 11, 2009
ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်ပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုးလို့ စကားပြောမိရင်- ဘာလူမျိုးလဲ၊ တိုင်းရင်းသားလားဆိုတာတွေက စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြိးပဲဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီစိတ်ထားတွေ မှားမှန်းမသိမှားနေကြတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ရင် ဗမာစကားပြောတာ မပီရင် ၀ဲရင် လူပဲမဟုတ်သလို၊ ဘယ်လိုပြောရလဲ “တိုင်းရင်းသား”ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်လိုက်ကြတာ မှန်တယ်လို့ မထင်ဘူး။ ဘာလဲ လူမျိုး (nationality)၊ နိုင်ငံသား (citizenship)ဆိုတာတွေက “တိုင်းရင်းသား”ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလားဗျာ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် “ဗမာ”တွေကော “တိုင်းရင်းသား”တွေမဟုတ်ဘူးလား။ သူတို့က ပြည်မကဆိုပြီး ဗဟိုရ်အချက်အခြာ မဟာလူမျိုးတွေမို့လို့ ဒီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ “တိုင်းရင်းသား”တွေ မဟုတ်ရင် အမြီးပေါက်နေတဲ့ အကောင်တွေမို့လို့လား-လို့ မေးလိုက်ချင်တယ်။
ကျန်တဲ့လူမျိုးစုများအပေါ် အရမ်းလူပါးဝတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုပဲ ကြည့်။ ကျန်တဲ့ လူမျိုးများကိုတော့ တစ်ပြည်နယ်စီ နာမည်တပ်ကာ (၇)ပြည်နယ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုးစီမှာ တစ်ပြည်နယ်စီပဲဖွဲ့ပေးတယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေကိုကျတော့ ဗမာပြည်လို့ မတပ်တော့ဘူး။ “တိုင်း” (၇)တိုင်းနဲ့ လူလည်ကျစွာ နားရင်းပါးရင်းရိုက်ပြီး (၆)ပုံ ပိုယူလိုက်တယ်။
ဗမာပြည်မကို ကျန်တဲလူမျိုးများနဲ့တန်းတူ တစ်ပြည်နယ်ထဲ ဖွဲ့စည်းဖို့ (အဲဒီလို (၇)တိုင်း မလုပ်ဖို့ အကြံပြုကြတော့ လက်မခံဘူး၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်သွားတယ်)။
ရှမ်းတွေနယ်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းလူမျိုးများလည်း ယနေ့အထိရှိနေခဲ့ကြတဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနယ်မြေများကို “ကချင်ပြည်နယ် နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း” ထဲ ဖဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ ပြောင်ပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်ပေးတာတော့ ကချင်တောင်တန်းနယ်မြေများရှိခဲ့လို့ ထားပါတော့။ မေမြို့နဲ့ မိုးကုတ်ကိုလည်း မန္တလေးတိုင်းထဲ ပြောင်ပါပဲ။ မေမြို့ထက် မိုးကုတ်က ပိုထင်ရှားတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့“မေမြို့မိုး” သီချင်းကို ပြန်သတိရတယ်။
ပြည်ထောင်စုကြိးပြိုကွဲဖို့၊ ခွဲထွက်ဖို့ကို ဗမာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ အဲဒီလောက်ကြီး ခွေးကြောက်ဝက်ကြောက် ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။ မဟာဗမာလူမျိုးရေးစိတ်ကိုခွါချလိုက်၊ ဗမာအတ္တကို ပယ်လိုက် လူဦးရေးအနည်းအများအလိုက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးများကို ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ရင်း ပြိုကွဲမယ့်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသစ် တစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ဆိုတာ အင်္ဂါရပ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း သေးသေးမွှားမွှားနိုင်ငံငယ်လေးတွေ ပလူပျံနေအောင် မထူထောင်ချင်ပါဘူး။ (တကယ်တန်း စာထဲကလို အေးအတူ ပူအမျှ တန်းတူညီတူ (တန်းတူညီတူဆိုတာလည်း လူဦးရေအလိုက်ပေါ့လေ၊ ဒါ ဘယ်လိုပဲ ကြည့်ကြည့် တရားပါတယ်) စိတ်ထားလေးတွေ ထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ပြောတာပါ။
ဒေါက်တာဇာနည်ကို လေးစားတယ်ဗျာ။ , Low-rated comment [Show]
ကျုပ် ဆိုတာ ကျွန်ုပ် က ရွေ့လာတာပါ
written by MHM, November 11, 2009
စကားလုံး ပေါ်မှာတောင် လိုက်တွက်ကပ်နေတာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် သူငယ်နာ မစင်တာကို ပြနေပါတယ်။ ခင်ဗျားရေးတဲ့ အကြောင်းအချက် အတော်များများကို ဒေါက်တာသန်းထွန်း နဲ့ ဒေါက်တာအောင်ခင် သမိုင်းပညာရှင် နှစ်ယောက်က ပြောခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အမျိုးသားရေးဝါဒ လွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့တာကို ၀န်ခံသလို ပြောင်းလဲဖို့လဲ လိုတယ်ဆိုတာ ယနေ့ လူငယ်တွေ သိကြပါတယ်။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ နေသူတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ရင် လွတ်လပ်ပွင့်လင်း မှန်ကန်တဲ့ အမြင် သဘောတရားတွေ ပေါ်ထွက်လာမှာပေါ့။ ခင်ဗျားရဲ့ “ငေါက်လုံး”တွေနဲ့တော့ စာဖတ်သူတွေ နားဝင်မယ် မထင်ဘူး။ အဲ တခု သတိပြုဖို့က၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး ပဒေသရာဇ်တွေကြောင့်ပဲ မြန်မာဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် နယ်မြေ အုပ်ချုပ်မှု သီးခြားရှိတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။
I agree with you., Low-rated comment [Show]
written by Heinn, November 11, 2009
I don't want any remark on this. It is very general. Please point detail.
ဖတ်လို.ကောင်းတယ်၊ စာရေတဲ့သူက အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ. သုံးသပ်သွားတာဟာအား� ��စရာဆောင်ပါးတစ်ပုဒ� �ဖြစ်လာ၊, Low-rated comment [Show]
Nothing remark on this.
I do not want to write any comment on this. Because its very general
MY VOTE FOR YOU DR, ZARNI, Low-rated comment [Show]
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ. မဟာပညာ၇ှင်ဒေါက်တြာ� ��ီး
written by sir.thein, November 11, 2009
နအဖဆီမှာ လက်နက်ချ၊ အခွင်.ေ၇း၇မလား သွားပြီးမှ၊ ဘာမှမ၇တော. မှ ဒီဘက်မှာ ....၊ ဒေါက်တာဇာနည်
ဆိုတဲ.... သူသမိုင်းသူေ၇းပြီး မြောင်းထဲေ၇ာက်နေတာ မြန်မာတပြည်လုံး သိတယ်။
written by Burmese, November 11, 2009
ိကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ဘာညာပြောမနေနဲ့ တော့ဗျို့ ။ သူတို့ တွေ ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ဖောက်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းတွေက စေတနာပါတော့ အခုထက်ထိကို ကောင်းတုန်းပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အုပ်ချုပ်မှသာ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာသာ ကြည့်။ ကျွန်ခေတ်မှာတောင် ပြန်နေလိုက်ချင်သေးတယ်။ ကျွန်ခံချင်တယ်ပဲပြောပြော၊ ဒင်းတို့ လက်ကလွတ်အေးတယ်။
Reality, Low-rated comment [Show]
ဗမာမုန်းတီးရေး စောင်းပေးရေးလိုက်လ� ��ှင် စင်ပေါ်ရောက်မယ်ထင်လ� ��ု့ လား။
written by Reader, November 11, 2009
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အရည်အသွေး၊ စွန့် လွတ် အနစ်နာခံမူ နှင့် ကိုဇာနည် ကတစ်ခြားစီပါ။
ဒေါက်တာဇာနည် နှင့် ဒေါက်တာကိုကိုသက် ဟယ်ဆင်ကီမြို့ မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို တစ်ကြောင်းတည်းသော နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက် လိုပြောသွားခဲ့တယ်လို့ ကြားမိတယ်။
(Free Burma Coalition) ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်တွင် ဧည့်သုတေသီ ပညာရှင် ဖြစ်ရုံနဲ့ ဗမာတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ ခေါင်းစဉ်တပ် ပြောနိုင်လောက်ပြီးလား။
ဗမာမုန်းတီးရေး စောင်းပေးရေးလိုက်လျှင် စင်ပေါ်ရောက်မယ်ထင်လို့ လား။
Effective persepcitves from half open minded and we would like to read more.
written by Myu Marai ( Kachin ), November 11, 2009
It is effective perspectives from half open minded and we would like to read more less egocentric articles.
Myu Marai (Kachin)
“ခွဲထွက်ခွင့် ပေးရမယ်။ မခွဲထွက်ချင်အောင် လုပ်ပြရမှာက ကျုပ်တို့ ဗမာတွေရဲ့ တာဝန်” ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကားအတိုင်းလည်း လိုက်နာဖို့ ရှိပုံမရပါဘူး။ လုပ်နေတာတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား ဗမာတွေကို ရွံမုန်းပြီး ခွဲထွက်ချင်စိတ်တွေ တဖွါးဖွါးဖြစ်ပေါ်နေအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ခွဲထွက်သွားမှာကို အ၇မ်းပဲစိုးရိမ်နေပြန်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး စစ်သားများဆိုတာ ပြည်သူတွေထဲကနေ ရပ်တွေရွာတွေထဲကနေ ပေါက်ဖွါးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာကလူတွေကို အကြောင့်မဲ့ ဥပဒေမဲ့ အနိုင်ကျင့် ညဉ်းဆဲ သတ်ဖြတ် မုဒိမ့်ကျင့် မီးရှို့နေတာတွေ မရပ်သေးသမျှကတော့ သောင်းကျန်းသူလို့ပဲ သတ်မှတ်သတ်မှတ်၊ အကြမ်းဖက်သမားလို့ပဲ ၀ါဒဖြန့်ဖြန့် တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ ဆက်လက်အသက်ရှင်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း သူ့ရပ်သူ့ရွာ သူ့မိသားစု အိုးအိမ်များကို ချစ်လို့ လုပ်တာကိုး။ သူ့အတွက်သူအမှန်တရားကို သူကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတာကိုး အပြစ်ပြောလို့ ဘယ်ရမတုန်း။
အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန်တွေကို မလိုလို့ တိုက်ထုတ်တုန်းက ဗမာတော်လှန်ရေးတပ်ကို “မျိုးချစ်တော်လှန်ရေး၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်” ဂုဏ်ယူစွာ ဘာညာနာမည်တပ်ခဲ့ပြီး၊ ကိုယ် သူများနယ်မြေတွေကို အတင်းသိမ်းပိုက်၊ အကြောင့်မဲ့အနိုင်ကျင့်လို့ သူများက မခံမရပ်နိုင်တော့လို့ တပ်အင်အားစုဆောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာတာကိုကျတော့ “အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ သောင်းကျန်းသူတွေ၊ ခွဲထွက်ရေးသမားတွေ၊ သူပုန်တွေ“လို့ ကင်ပွန်းတပ်နေတာတော့ ဘယ်တရားပါ့မလဲဗျာ။ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် မျှမျှတတတွေးပေါ့ဗျာ။
ဆောင်းပါးရှင် ဇာနည် ဆော်လိုက်တဲ့ စကားကတော့ သိပ်ကောင်းလွန်းတယ်။ ကျွန်တော် ရင်ထဲကစကားများနဲ့ တကယ်ကို လုံးဝတစ်ထပ်တည်းပဲ။ အပြန်တစ်ရာမက လေးစားပါတယ် ဆရာ ဇာနည် ရေ။
ဆရာ ဇာနည်ကတော့ ဗမာဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ အသေအချာမသိဘူး။ ပြောသွားတဲ့စကားကတော့ ဘက်မလိုက်ဘူး။ သမာသမတ် သိပ်ကျတယ်။ ဘာလူမျိုး ဘာကောင်ကိုမှ မငဲ့ဘူး။ ပြောစရာရှိတာကို တည့်တည့်မတ်မတ်ပြောသွားတယ်။ လူတိုင်းပြောချင်တဲ့စကားကလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဆရာ ဇာနည်နဲ့ကွာတာကတော့ လူတိုင်းက ဆရာ ဇာနည်လို ချက်ကျလက်ကျ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စုံစုံစေ့စေ့ မပြောနိုင်ကြတာပါပဲ။
အောက်ပါ စကားများကတော့ အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးများနဲ့ စာပိုဒ်များပါခင်ဗျ။
[ကျုပ်တို့ပြည်သူအားလုံးကို “ကျေးတော် ကျွန်တော်” လုပ်ခိုင်းပြီး စီးပွားရေး ကုပ်သွေးစုပ်၊ မယားမှိုလိုပေါက်အောင် ယူပြီးတော့ လောကီစည်းစိမ်ယစ်မူးခဲ့တဲ့ “ပါးစပ်က ဘုရား လက်ကကားယား” ပဒေသရာဇ်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုကြည့်။ ယိုးဒယားကိုသိမ်း၊ ရခိုင်ကို ဖျက်ဆီး၊ မွန်တွေကို အမျိုးဖြုတ်၊ ရှမ်းတွေကို နှိပ်ကွပ်၊ ကရင်တွေကို ပေါ်တာဆွဲ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်း အဓမ္မဇာတ်ခင်းပြီး လက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီးတွေ ထောင်ခဲ့ တာပဲ။]
[ကျုပ်တို့အမျိုးသားရေးသမိုင်း အမြင်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေ ဆိုးဝါးအနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘုရင် သခင်က တခြားလူမျိုးတွေကို သွားသိမ်းပိုက်အနိုင်ယူတာကျတော့ ပါးစပ်က အမြှုပ်တွေ ထတဲ့အထိ ပီတိဖြာ တယ်။ ပြောလို့ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးတော့ဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုးအသုံးမကျလို့ အင်္ဂလိပ်မင်းများက သခင်ကြီးအဖြစ်လဲ ရောက်ရော မတရားဘူး ထအော်ပေါ့။ ဒါက ညစ်ပလီစိတ်ပါ။]
[ဗမာအုပ်ချုပ်သူ၊ ရှမ်းအုပ်ချုပ်သူ၊ ရခိုင်အုပ်ချုပ်သူ၊ မွန်အုပ်ချုပ်သူ အစရှိသဖြင့် လူမျိုးတွေ၊ လူတန်းစားတွေ၊ ခေတ်တွေ ပြောင်းသွားပေမယ့် အကျင့်အကြံ အပြုအမူတွေကတော့ သူမသာ ကိုယ်မသာတွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာ လူထုကြီးတွေကို ဂုံးပိုးစီးပြီး နိဗ္ဗာန်ကို ဖြတ်လမ်းက ရောက်ချင်သူတွေပါ။]
[ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ဗမာကို အလယ်မှာထားပြီး လူနည်းစုလူမျိုးစုတွေက အစွန်အဖျားကနေရမယ့် ဗမာဗဟိုပြု ပြည် ထောင်စုကြီး ထူထောင်ဖို့ပါ။]
[ကျုပ်တို့ ဗမာအမျိုးသားရေး စစ်ဝါဒီ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေက တခါသေဖူးလို့ ပျဉ်းဖိုး သိနေပြီး မယုံကြတာ ဘယ်သူ့အပြစ်ပါလဲ။
အခုလဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမူတွေကို ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေလုပ်ပြီး ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး မှောက်ချီလှန်ချီ လုပ်နေကြတော့ “ငြိမ်း” အဖွဲ့တွေခဗျာ အရူးမ လင်လုပ်တဲ့ဘ၀ကို ရောက်မှန်း မသိရောက်နေ တော့တာပေါ့။ မင်းတို့ဗမာတွေ “ညစ်ပလီ”တွေဆိုပြီး ပြောရင်လဲ ခေါင်မိုးက မလုံတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ခေါင်းငုံ့ခံရ မှာပါ။ ကိုယ့်လူတွေကမှ မရိုးသားကြတာကိုး။]
ဗမာအားလုံး မကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကောင်းတဲ့ “ဗမာ”တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် “ဗမာကောင်း”တွေ နေရာမရကြပါဘူး။ (ကန်ထုတ်ခံရတယ်၊ ဗမာပြည်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကို ရောက်ကုန်ကြတယ်။)
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ “မိစ္ဆာဗမာများ”သာ နေရာရနေကြတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် အဲဒီမကောင်းဆိုးဝါး မိစ္ဆာဝါဒီဗမာများသာ ထိုင်ခုံကောင်းတွေမှာ အခန့်သား နေရာယူခဲ့ကြတာ ယနေ့အထိပါပဲ။
ကွယ်လွန်သည်အထိ တော်လှန်ရေးသီချင်းများကို အစဉ်တစိုက်သီဆိုပြီး ဂီတဖြင့် အမျိုးသားရေးအသိ ရှင်သန်အောင် နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ တစ်ဖြစ်လဲ ရှမ်းအဆိုကျော် “စိုင်းမှူး”ရဲ့ နောက်ဆုံးသီဆိုခဲ့တဲ့ ဗမာစီးရီးခွေထဲက “ဆရာ“ လို့ သူအမည်ပေးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော် သွားသတိရမိတယ်
စားသား အားလုံးကိုတော့ အလွတ်မရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဆိုလိုတဲ့ အဲဒီသီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့-
ဗမာလူမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဆရာကို ခွင့်ပန်ပြီး သူ့ရင်ထဲက မေးခွန်းလေးကို မေးပါရစေဆိုပြီး သီချင်းကို အစပြုပါတယ်။ ပြီးတော့-
သူ(စိုင်းမှူး)ဟာ ရှမ်းတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆီမှာ ပညာရည်နို့ သောက်စို့ရင်း ကြီးပြင်းခဲ့ဖူးသူပါ။ (စစ်ကိုင်း ဒေသကောလိပ်ကျောင်းဆင်းလို့ သိရပါတယ်)
ဒါပေမယ့် သူနားမလည်နိုင်တာက ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဆရာကတော့ အရမ်းသဘောထားတွေပြည့်ဝပြီး၊ လူသားဆန် စိတ်ရင်းကောင်းများ ရှိနေပြီး၊ သမာသမတ်အတွေးတွေ ရင်မှာကိန်းအောင်းပြီး လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေးဘဲ လူကိုလူလို တန်ဖိုးထားဆက်ဆံတတ်ပေမယ့် (သူ့ဆရာလိုပဲ) ကျန်တဲ့ တစ်ချို့ဗမာလူမျိုးတွေကျတော့ သူ့ဆရာနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့် ဆန့်ကျင်တာကိုပဲ။ မဟာဗမာ လူမျိုးစိတ်တွေ အရမ်းပြကြတယ်။ ဗမာလူမျိုး တစ်မျိုးကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လူမျိုးများကို လူလို့ မထင်တတ်တဲ့ စိတ်ထားများကို သူအံ့သြတယ်။
ဗမာလူမျိုး အယောက်တိုင်း မကောင်းသလို အယောက်တိုင်းမဆိုး-ဆိုပြီး
အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲဆရာ?? လို့ ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဆရာရင်းကို မေးခွန်းတွေထုတ်သွားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
(၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိတဲ့ စိုင်းမှူးရဲ့ နောက်ဆုံးစီးရီးခွေ “ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း” အခွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ရှမ်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပေးလို့ နားထောင်ရင်း ယနေ့အထိ စာသားရဲ့တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို မှတ်မိနေတာပါ)
written by ကောင်းအောင်, November 11, 2009
written by Thudanu, November 11, 2009
Absolutely right ! I have met many political and ex army leaders in my life. What you have mentioned reflects the mentality of these people.
written by မျိုးချစ်, November 11, 2009
ဧရာဝတီက ဘယ်လိုစာနယ်ဇင်း မူဝါဒမျိုးနဲ့ ရွေးချယ်ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့သလဲတော့ မသိပါ။ ဒေါက်တာဇာနည်ဆုိုတဲ့ အမည်နဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြချက်များဟာ သမိုင်းဆိုင်၇ာ တန်ဖိုးလဲမရှိ ပညာရှိလဲမဆန် ငါ့စကားနွားရပုံမျိုးနဲ့ ထင်ရာရေးထားတာတွေကို ဖတ်ရတော့ စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုးမဲ့သလို ဧရာဝတီအတွက်လဲ စာနယ်ဇင်းသိက္ခာ ကျပါတယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်သာ မရှိခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးများလည်း တည်ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ တကယ်ဆိုရင် ဆောင်ပါးရှင်အနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို ဘယ်လိုဖေါ်ဆောင်ရမည် ဘယ်လိုဖြစ်သင့်သည် စသည်ဖြင့် အပြုသဘော တင်ပြရေးသား သင့်ပါကြောင်း အကြံပြူလိုပါသည်။
ပဒေသရာဇ်စနစ်မှာ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်နိုင်ငံမဆို အားကြီးသူက အားငယ်သူကို လွှမ်းမိုးသိမ်းပိုက်တာ သဘာဝပါ။ အားဆိုသည်မှာ စစ်ရေးသားမက ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခြင်းကိုလည်း ခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ (စစ်မက်ပြုခြင်း၊ အင်အားအသုံးပြုခြင်း သက်သက်ကြောင့်သာ မဟုတ်ပါ။) အင်္ဂလိပ်စာသည် နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာသည်မှာ မည်သူမှက္ဈန်ပြု၍ မဟုတ်ပါ။ ပဒေသရာဇ်စနစ် မကောင်း၍ ကမ္ဘာမှာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်လျှက် ရှိပါသည်။ ဒါကို အသားလွတ်အော်ပြီး ဆဲနေမဲ့ အစား အပြုသဘောဆောင်ပြီး အကြံပြု ရေးသင့်ပါတယ်။
ဗမာစာပေနဲ့ ဗမာယဉ်ကျေးမှု တည်ရှိသည်ကိုတော့ လက်ခံပါသည်။ ဗမာလူမျိုး တည်ရှိသည်ဆိုတာ ကတော့ အငြင်းပွါးဖွယ်ရာပါ။ ပဒေသရာဇ် ခေတ်ကာလက စစ်နိုင်သူများမှ စစ်ရှုံးသူများအား အကြွင်းမဲ့ ပိုင်ဆိုင်သည့်အပြင် ဘုရင်ပြည်ထောင်များ အလျှင်သင့်သလို ကညာဆက်၍ အမျိုးစပ်ခဲ့ကြသည်မှာ မြန်မာဒေသတွင်းမှမဟုတ် တရုပ်၊ အိနိယ၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊ ရုရှား အစရှိသည့်နိုင်ငံများပါ ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဆုိုလျှင် ဗမာလူမျိုးကို ဆိုသည်မှာ မည်သူကိုခေါ်ဆိုသနည်း။ ပဒေသရာဇ် လက်ထက်မှ ယနေ့အထိ ဘုရင်များနှင့် ဗမာစကား ပြောဆုိုသည့်သူများကို ဗမာလူမျိုး အဖြစ် ရည်ည္လန်း ဆိုလိုချင်ပါသလား။ ထိုသို့ဆိုလျှင်
ဆောင်ပါးရှင် အော်အော်ဆဲပြီး ပြောနေတဲ့ ဗမာလူမျိုးဆိုသည်မှာ
မည်သို့ မည်ပုံ မည်သည့်အချိန် ကာလက ဖြစ်တည်လာသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြသင့်ပါသည်။ ဗမာလူမျိူး ဘယ်က ဘယ်လိုပုံ ဆင်းသက် ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြင့် သိလိုပါသည်။ ဗမာလူမျိုးမရှိ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာပေသာရှိသည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
written by aung kyaw kyaw thu, November 11, 2009
I think that he want to be famous.so he write like that.He never becomealeader.
ဆုံးမ စာလား ....
written by shwe, November 11, 2009
မိမိကိုယ်ကို အရင်သုံးသပ်ပြီး ကောင်းအောင်နေပါ ...။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ မယှဉ်ပါနှင့် ။ ဂျုံ နဲ့ ထောပတ်ကို အေးအေးလူလူစားပါ။ ငပိရည်စားနေသူတွေကို အဝေးကနေ မစော်ကားပါနဲ့ ။ သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်။ ပညာတတ်မှန်းလည်း သိပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို မိမိစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်ကို ပြန်ရိတ်သိမ်းပေးရမယ်လို့ ဗုဒ္ဓ က ဆုံးမထားတယ်..။ သင်လည်း တနေ့ သင်ပျိုးကြဲထားတဲ့ မျိုးစေ့တွေကို ပြန်ရိတ်ပေးဖို့ သတိရနိုင်ပါစေ။ ( သင်က ဒေါက်တာဆိုတော့ ....သင့်ရဲ့ မျိုးစေ့တွေကို သင်မှတ်ထားသင့်တယ်)
စာကြွင်း = ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာရေ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့ရဲ့မှတ်ချက်ကို ဆင်ဆာမလုပ်ပါန့...။
written by Andrew, November 11, 2009
ကောင်းတယ်, Low-rated comment [Show]
written byaFree Burmese, November 10, 2009
I must praise your wonderful thoughts, Dr Zarni. You article highlights chauvinism, prejudice, and narrow-mindedness of Burmese powerfully. Look at the editorial written by Nay Win Mg in the Voice journal. He shamelessly attack Iraqi people as uncivilised creatures. He does not know the fact that the world civilisation started from Iraq. He does not know because he thinks Burma is the best, and it is good enough if he knows only about Burma.
ကိုယ့်ပေါင်ကို ကိုယ်ဘယ်လိုထောင်းရ� ��ါ့ ?
written by ဆရာမိုး, November 10, 2009
ကိုဇာနည်ရေးတာတွေ မှန်ပါတယ်။ အကြောင်းတွေကလည်း အများကြီးရှိခဲ့တော့… အတ္တအခြေခံပြီး ထွက်လာတဲ့…. အကျိုးတွေကလည်း… တိုင်းပြည်မှာရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့လူမျိုးကိုက… ဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့ ပြောပေမဲ့၊ လူလူချင်းတူတူပဲဆိုတဲ့…. မေတ္တာတရားဆိုတာဝေးလို့၊ အတ္တ ထုထည်ကြီးတွေနဲ့ပဲ၊ ငါပြီးရင်… ငါ့မိသားစု၊ပြီးရင် ငါ့ဆွေမျိုး၊ ပြီးတော့ ငါ့ အုပ်စု ၊ပြီးတော့ ငါ့လူမျိုးပေါ့လေ၊ ကို ဇာနည် ညွှန်းတဲ့ အချုပ်တန်း ဆရာဖေကြီးတောင် “သမုတိ အတွက် င ဝက်ကခံ” ဆိုတဲ့ လေးချိုးမှာ ကိုယ် အရှင် ကိုယ့်လူမျိုး ဘုန်းတော်ကြီး မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး ကိုမြှောက်ပင့် ပေးခဲ့သေးတာဘဲ။ ကျုပ်တို့လူမျိုးက အိန္ဒိယ တိုက်မှာ ပွင့်တဲ့ ဘုရားနဲ့တောင် အမျိုးလှမ်းစပ် နိုင်ကြသေးတာဘဲ။
ခေါက်ရိုးက ကျိုး၊ အစွဲကကြီးတော့ ချွတ်ရမှာတော့ လွယ်မယ်မထင်ဘူးဗျို့ ။ သမိုင်းကလည်း သူဦးသူချ ၊ ငါဦးငါချတွေများခဲ့တော့၊ ပြောင်းဖို့ထက် ဒီတိုင်း ဆက်သွားချင်သူတွေ များတာမဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုဇာနည်ချပြတဲ့ ideology ကိုသာမန် အရပ်သားတွေသွားပြောရင်၊ “ကရင် တွေ မင်း နှမ တက်ဆွဲ ရင် မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ”။ “ဗမာတွေ မင်းအမတက်ဆွဲတာ မင်းခံမလား” စသဖြင့် မေးကြမှာဘဲ။ ပြောစရာများကလည်း သမိုင်း ရဲ့ ရာစုနှစ် တဝက်လောက်အတွင်းမှာ ရှိခဲ့ကြတာကိုးဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူကြတာတောင် လက်နက်တွေ ကိုင်ပြီးယူကြတာမလား။ ကျုပ်တို့ဘက်ကလည်း မိုးကုတ် ကိုမန္တ လေး တိုင်းထဲ ထည့်ထားတာသာကြည့်တော့။ ရပြီးသားတော့ ဘယ်ပြန်ပေးလိမ့်မလဲနော့။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကလည်း ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ကျတာnများလွန်းလို့ ၊ တချီတမောင်း များ အကြောင်းလှရင် ပြန်တွယ်ချင်တဲ့ သူကလည်း ရှိသေးတယ်။ ကျုပ်တို့ကလည်း ကိုယ်က မတရားလုပ်တာများခဲ့တော့ ပြန်ခံရမှာ ပြန်ပေးရမှာကို လုံးလုံးမကြ်ိုက်၊ ဒီပုံ နဲ့ဘဲ မိုးကြီးချုပ်ဆိုတာ လို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး (စစ်စစ်) ဖြစ်လာတာတောင် ဒီပြဿနာတွေက တော့ဖြင့် အချိန်အတော်ယူပြီး၊ ဗမာတွေကိုရော တိုင်းရင်းသားတွေကိုရော နားလည်အောင် ပညာပေး ပြီး မှ ညှိနိုင်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ဗျာ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်း တဲ့သူမျိုးတွေ များလာနိုင်ပါစေလို့ တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကာတွန်းဦးဘဂျမ်းပြောသလို “သူများပေါင် ထောင်းတော့ ဟော့သလို”…”ကိုယ့်ပေါင်ကိုထောင်းတော့ ဒီလိုလေး” မဖြစ်ဖို့တော့ ဗမာပညာရှိ ရော တိုင်းရင်းသားပညာရှိပါ ဂရုစိုက်ကြဖို့တော့ လိုသဗျို့ ။
written by Zin Thant, November 10, 2009
ခင်ဗျား ပြောတာတွေက မှန်ပေမယ့် ဒီအတိုင်း ခေါက်ရိုးကြိုးနေတဲ့ ကျုပ်တို့ လက်ခံနားလည်ဘို့တော့ တော်တော် ဝေးသေးတယ် ထင်တယ်။ ရှုတောင့်သစ်တစ်ခုကို လက်ခံဘို့ ၊ လက်မလျှော့တမ်း ဆက်လုပ်ပါဗျာ။
ဆရာဇာနည်, Low-rated comment [Show]
very good, Low-rated comment [Show]
အင်မတန် လျှော်ကန်သင့်မြတ်ပ� ��သည်, Low-rated comment [Show]
written by Ko Gyi Thar, November 10, 2009
ဗိုလိချုပ်လေသံလိုလို ဘာလိုလိုပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ ရေးရဲတဲ့စေတနာနဲ့ သတ္တိကိုတော့ ကြိုက်တယ်..
အမျိုးသားရေး (အားလုံးရဲ့အရေး) ဆိုတာတော့ လိုအပ်သေးတယ်လို့ ထင်တယ်.. အခုငါ့အရေးတွေကြောင့်
တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟာတွေ ကုန်တော့မယ်.. တရုတ်.ထိုင်း.နဲ့ ကုလားတွေ က သူတို့အမျိုးသားရေးကို ကြည့်တာမျိုး
(ငါတို့ဆီက ပေါပေါများများနှိမ်ယူတာ) ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင် ကျုပ်တို့မှာ ရှိနေဖို့လိုတယ်..
written by ရော်ဆမ်း, November 10, 2009
မြန်မာ့ သမိုင်းကို သေတ္တာ အပြင်ဘက် ထွက်ပြီး လေ့လာခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဇာနည်ရဲ့ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အဓိက အချက်က ဗမာတွေ ဘက်က မဟာဗမာ အယူ အဆကို စွန့်လွှတ်သင့်သလို တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကလည်း လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်တဲ့ အတွေးအခေါ် တွေကို စွန့်လွှတ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်လို့ ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဆွီဒင်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ စတဲ့ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ မြန်မာ့ သမိုင်း အပေါ် သုံးသပ်ချက် တွေ တော်များများ ဖတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်လည်း အဲလို တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းရင်းသားသွေး များပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အခွင့် အရေးတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အတွက် ခုချိန်မှာ သူတို့က ဗမာတွေထက် လူမျိုးစွဲ ပိုကြီးတယ်လို့ ခံစား မိပါတယ်။ ဗမာတွေ ကတော့ အရပ်သားတွေ ထဲမှာ ပြင်းထန်တဲ့ မဟာဗမာ အတွေး ရှိတဲ့ လူတွေကို ထွေထွေ ထူးထူး မတွေ့ရပဲ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာပဲ အများဆုံး ရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဗမာ အများစု ကိုယ်တိုင်က သူတို့လည်း စစ်တပ်ရဲ့ နင်ပြားလို့ ယူဆထားပြီးသားပါ။ စစ်တပ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ဖွဲ့ပေးပြီးလို့မှ မကြာသေးဘူး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို စတိုက်ပြီး စစ်ရည် စစ်သွေးတွေ တက်လာတာကိုး။ အဲဒီတော့ စစ်တပ်ကိုလည်း ဗမာ အများစုနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်း ဖွဲ့လာရာကနေ စစ်ဖြစ်ရာ ဒေသတွေမှာ စစ်သားတွေ ထင်ရာ စိုင်းခဲ့သမျှ တွေဟာ ဗမာတွေကို ကိုယ်စား ပြုသလို ဖြစ်နေခဲ့ပါ တယ်။ နယ်စပ် ဒေသ တွေမှာ တိုင်းရင်းသား တွေဟာ စစ်သားတွေနဲ့ အစိုးရ ၀န်ထမ်း တွေကို ဗမာလို့ပဲ သုံးနှုန်းပြီး ပြောတာကို အမြဲတွေ့ရ ကြားရပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဇာနည် ပြောသလို အစွန်းရောက်တဲ့ အတွေး အခေါ်တွေ နှစ်ဖက်လုံးက မစွန့်ရင်တော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ပီပီ ပြင်ပြင် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ တိုင်းရင်းသား အရေးဟာ ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်လောက်ပါဘူး။
written by Ko J J, November 10, 2009
ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ရေးသားချက်တွေ ကတော့ထိမိတယ်ဗျာ... မျိုးမစစ်တဲ့ (တိုင်းရင်းသားသွေး ၄မျိုးတောင်စပ်ထား
တဲ့) ကိုဂျေဂျေတယောက် သေတာသေလိုက် ချင်တော့တယ်. ..ဩော်... တသွေးမကောင်းလို့ တသွေးဖေါက်ထုတ်
လို့ရရင် လည်းကောင်းသား... ဘယ်သွေးနဲ့ ဘာလူမျိုး ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းပါလိမ့်နော်....
written by တိုးတက်အောင်, November 10, 2009
ဗမာတွေ သမိုင်းကို သတ္တိရှိရှိ မြင်သင့်ပြီ။ သမိုင်းက အမှားတွေကို သင်ခန်းစာ ယူတတ်မှ တစ်ခြားလူမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မရင့်ကျက် သေးသမျှ ရာဇ၀င်ဘီး တစ်ပါတ်လည် တာနဲ့ပဲကြုံနေရမှာပါ။
disclose the hidden feeling
written by ulashio, November 10, 2009
I believe that this isagenuine situation among Myanmar .They didn’t see their real faces in mirror. In order to get national reconciliation in Myanmar, these types of article should be frequently addressed. It reminds us the right solutions are needed to repair the differences among different nationalities. Even if democracy is finally arrived in Myanmar, agreement without real compromises among our national leaders will beabig disaster for all of us. I don’t think our democracy will survive. Myanmar will still beafailed state without any doubt.
I believe that the consequences of failure to practice the Pang long agreement is still effecting our current generation in negative ways. No one can deny about it. Do we learn the past lessons? My answer is “No”. There are many proven historical records that we cannot trust the military junta such as pang long agreement, and 1990 election are broken promises .How about this coming 2010 election ? ???????
written byုKthet, November 10, 2009
ကျနော် (ကျွန်တော် လို့မရေးပါ) ဗမာစစ်စစ်ပါ။ မျက်မှန်စိမ်းတတ် ဗမာမဟုတ်ပါ။ ကျနော့လို လူတွေရှိကြမယ်လဲ ထင်ပါတယ်။ နည်းတော့နည်းလိမ့်မယ်။ ကိုဇာနည့်လို ပြောရဲတဲ့လူမျိုးရှားတယ်ဗျ။
မြန်မာ တွေက ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အတိုင်း ပြော/လုပ်တဲ့သူ သိပ်ရှားတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။
စစ်တပ်ထဲကလူတွေ ဆို တပ်ကထွက်မှပဲ မျက်မှန်စိမ်း ဖြုတ်ကြည့် တတ်ကြတာကလား။
written by Ye Zar Ni aung, November 10, 2009
Guy!!! Although I hate military government, I am not appreciate your post. You need to clear Burma and Myanmar...
written by THER, November 10, 2009
SO NICE,SO RIGHT,CARRY ON.
written by min, November 10, 2009
I'm not agree this concept. I think he isa(...) writer. At that moment,we need unity for our country. Most of the activists in our political industry are who like with him, we never never never get sucessful. All activists are put wrong glass, that mean deviation from our hope. Unity is strength. When we get unity, junta is falling down. At that time, we think about how can we do our best? Don't blame each other. We are falling down over 20 years in military occuption,who can make escape from situation. That mean all activists have poor thinking like as this writer. I'm citizen of mother country and I always hope democracy country.
written by နိုင်မင်းသူ, November 10, 2009
ကိုဇာနည်ဟာ နိုင်ငံရေး သမားလား။ နိုင်ငံရေး သမားလည်း မဆန်ဘူး။ ပညာတတ်လား။ ပညာတတ်လို အသုံးအနှုန်းတွေ ကလည်း မနူးညံ့ ပညာမပါဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာ လက်ဝဲ လက်ယာ အင်အားစုတွေက ရှိတာပါပဲ။
ကိုဇာနည်က အမျိုးသားရေးကို လက်ဝဲရှုထောင့်က ဝေဘန်တာလား
အဲလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အသလွတ်ကြီး ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ်ပြန်ဆဲ နေသလို့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ဇာနည်ရဲ့ စတိုင်ပဲ ဆိုရင်တော့ ရှိပါစေတော့ဗျာ။
၂၀၀၈ မူကြမ်းမပြင်မချင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည်မဟုတ်ဟု...
ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ်ကျခံရသူ အပစ်ရပ် SSA နာယက ပုံမှန်ေ...
နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်းတွင်လူ (၂၁)ယောက...
Illegal Burmese migrants: caught between hiding or...
လက်နက်ကိုင် အကျဉ်းသား ၃၄ ဦးကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှ...
သျှမ်းပြည်၌ ‘တားမြစ်ထားသောမြင်ကွင်းများ’ ဆိုင်ရာ သ...
ဗမာ့တပ်မတော် ၀ မြေမှဆုတ်ခွာပေးရန် ၀ တပ်ဖွဲ့ ထံမံတေ...
ချင်းမိုင်ရောက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ရှမ်းနှစ်သစ...
အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့် မနက်ဖြန်...
နှစ်ရှည်ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာသူပုန်တွေကို ဒုက္ခသည်အဖြ...
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို တိုင်းရင်းသား ခေါင်း...
၀ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ ရမခတိုင်းမှူးနှင့် တွေ...
စစ်တွေတွင် နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုမှ ရုံးများ ဖွင့်လှ...
ကရင်နီဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား နအဖ စစ်ကြောင်းမှူးတ...
ကေအဲန်အယ်လ်အေ၏ ဆွဲမိုင်းကြောင့် နအဖ ၇ဦး ထိခိုက်သေ...